2016 ဖြင့် ဇာတ်ကား100 ကား
ဒီတစ်ခေါက် မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ “A Man andaWoman” ဆိုတဲ့ ရိုမတ်တစ် ဇာတ်ကားလေးပါ… အညွှန်းဆိုတော့ ညွှန်းပါရစေ…ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်သင့်တဲ့ သူတွေက တော့ လက်ထပ်ထားကြတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားထားတဲ့ လူငယ်တွေ ကြည့်သင့်ပါတယ် တစ်ခုတော့ပြောပါရစေ… ဟာသကား ဇာတ်မြူးကားမှ ကြိုက်တဲ့ ပရိတ်သတ် ဆိုရင်တော့ ဒီကားကို မကြည့်ပါနဲ့လို့ကြိုသတိပေးပါရစေ ..ကျွန်မ တောင် ကြည့်စ တုန်းက ဘယ်လိုတောင်လား ဆိုပြီး ပြောရတဲ့အထိပါ ဒါပေမယ့် ဒီဇာတ်လမ်းက သင့်ကို message တစ်ခုတော့ ပေးနိုင်မှာပါ ဇာတ်အေးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး လွမ်းစရာ တီးလုံးလေးနဲ့ ဇာတ်လမ်းကို အသက်သွင်းထားပါတယ် နောက်တစ်ခုက ရှက်တတ်သူတွေ မကြည့်ပါနဲ့ 18+ အခန်းတွေ ပါပါတယ်… မင်းသားကိုတော့ အထူးမိတ်ဆက်စရာ မလို တော့ဘူးထင်ပါတယ်.. Goblin မှင်စာ မင်းသား အာဂျူးရှီး Gong Yoo က ကင်ကီဟုန်အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ရိုးရိုးလေးနဲ့ လှနေတတ်တဲ့ Jeon Do Yeon က လီဆန်းမင်း အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်း- ဖင်လန်နိုင်ငံ ကလေးလေ့ကျင့်ရေးစခန်းမှာ သားဖြစ်သူကို ကျောင်းလာအပ်တဲ့ လီဆန်းမင်းဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး နဲ့ သမီးဖြစ်သူကို ကျောင်းလာအပ်တဲ့ ကင်ကီဟုန်ဆိုတဲ့အမျိုးသားအကြောင်းပါ… သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ကလေးကိစ္စကို အကြောင်းပြုပြီး ရင်းနှီးခဲ့ကြပါတယ်.. ရင်းနှီးတာက တစ်ဆင့် မေတ္တာပေါင်းကူးတဲ့အဆင့်ထိ ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်.. ကာမပိုင်ယောကျာ်းနဲ့ သားလေး ရှိတဲ့ လီဆန်းမင်းတစ်ယောက် သမီးရည်းစားထက်ပိုတဲ့ အချစ်ရေး အတွက် စွန့်စားမလား… သမီးလေးနဲ့ မိန်းမကို ထားခဲ့ပြီး ကင်ကီဟုန် တစ်ယောက်ကော နှလုံးသားကို ဦးစားပေးမလား …. သူတို့နှစ်ယောက်နောက်ဆုံးမှာ ဆုံစည်းခွင့် ရမလား.. ပရိတ်သတ် ကဘဲဆက်ကြည့်လိုက်ပါတော့ ….
A Melody to Remember ခေါ်တဲ့ကိုရီးယား ကားလေးပါ။ IMDb Rating ၇.၂ ၊ MyDrama List ၈.၆ ရရှိထားတယ့် Rating အမြင့်ပိုင်းတွေ ရရှိထားတယ့်ကာားလေးပါ။ Action/ Drama အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် ကဖြန့်ချီထားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ကားလုံး ကို ၁၂၄ မနစ်ကြာပါတယ်။ ဒီကားကို နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့လဲ ခေါ်ကြပါတယ်။ သူ့ရဲ ကိုးရီယား ပြည်တွင်းမှာ ( 임시완 )오빠생각 မြန်မာလို အဓိပ္ပယ်က အစ်ကိုကြီးရဲ့ ဆန္ဒ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ မှ A Melody to Remember လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒီကားလေးက Box Office ဝင်ငွေကိုကြည့်ရင် ပြည်တွင်းမှာအောင်မြင်မှုမရပေမယ့် နိုင်ငံတကာမှာအောင်မြင်မှုပိုရရှိခဲ့တယ်ကားပါ။ ရိုက်ကူးတယ့် စရိတ်ကိုမသိရပေမယ့် ဝင်ငွေ ကန်ဒေါ်လာ ၇ သန်းကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရှာလို့ရသလောက်က Far East Flim Festival မှာ ပရိတ်သတ်အကြိုက်ဆုံး ဆုကို ရရှိထားပြီး ဇကာတင်စာရင်းဝင်ထားတာနည်းနည်းတော့ရှိပါတယ်။ ဒီကားရဲ့အဓီကမင်းသားအဖြစ်ပါဝင် ထားတယ့် Siwan အဓီကနေရာမှာ သရုပ်ဆောင် တယ့် သူရဲ့ပွဲဦးထွက် ဇာတ်ကားလဲဖြစ်ပါတယ်။ ကလေး သရုပ်ဆောင် နှစ်ယောက်က Jung Joon နဲ့Lee Re တို့ဖြစ်ပြီး တော်တော်လေးသရုပ် ဆောင်ကောင်းပါကြပါတယ် ။ Rating များပြီး ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သတ် တွေကရှာရတာ မလွယ်ပါဘူး။ဇာတ်လမ်းက ကောင်းပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးရဲ့ Theme က မိဘမဲ့ ကလေး တွေ ရဲ စစ်အတွင်းက ဘ၀ နဲ့ဂီတပါရမီ ကိုပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဝေဖန်ချက်ကောင်းကောင်းတွေ ရရှိထားပြီး ပရိတ်သတ် တွေ ကိုဆွဲဆောင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ကလေးနှစ်ယောကို အဓီက ထားပြီး ဇာတ်အိမ် တည်ထားပါတယ်။ ဇာတ်ကားနာမည်အတိုင်း မောင်နှမ နှစ်ယောက် ရဲ့မေတ္တာကို ဖော်ကျူး ထားပါတယ်။ ကိုးရီယား ကားတွေ မှာ ချီးကျူးချင်တာက ကလေးသရုပ်ဆောင်တွေ ပါ။ တကယ်သူတို့ပေးချင်တယ့် ခံစားချက်ကို တစ်ဖက်သားဆီရောက်အောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တယ့် နှစ်၅၀ ကျော်က ကိုးရီယားနိုင်ငံအခြေနေကိုလဲ အထင်သားတွေ မြင်ရပါတယ်။ စစ်ကြောင့်မိဘမဲ့ဖြစ်သွားတယ့် ကလေးတွေ ရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းရှင်သန်ရပုံတွေ ၊ တောင်နဲ့ မြောက်ရဲ့အမုန်းတရားတွေ ကိုတွေ့ရမှာပါ။ နောက်ပြီးဒီ ဇာတ်ကားမှာပါတဲ့ သီချင်းဆိုရတဲ့ အခန်းတွေ ကို ကလေးတွေ တကယ်သီဆို ထားတာပါ။အဲ့ဒီမှာ သရုပ်ဆောင်နဲ့ဆွေးရုံတင် မဟုတ်ဘဲ အသံကိုနားထောင်ပြီးတော့ပါ ဆွေးနိုင် ပါတယ်။ အသံမှာကိုက သူတို့ခံစားနေတဲ့ ခံစားချက်ကို ပါ အောင်သီဆိုနိုင်တာ ပိုပြီးနားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်။ အခု ဒီကားရဲ့ဇာတ်လမ်းပိုင်းကိုပြောပြမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းအစမှာ တိုက်ပွဲတစ်ခုအတွင်း တပ်ရင်း တစ်ခုလုံး သေပြီး ဗိုလ်ကြီးတစ်ယောက်ဘဲအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ တောင်နဲ့မြောက် ကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်ပြီးနောက်မှာ နှစ်ဖက်စစ်စဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အတွင်းမှာ တောင်ဘက်ကလူဆို မြောက်ကလူကို သတ် မြောက်ကလူဆိုရင် တောင်ကလူကိုသက် ဖြစ်နေကြတဲ့ အချိန်မှာ အခြေနေကြောင့် မြောက်ပိုင်းအလိုတော်ရိ လုပ် နေတယ့် တောင်ပိုင်းသားတစ်ယောက်က လမ်း ခရီတစ်ခုမှာ တောင်ပိုင်း စစ်တပ် နဲ့တွေ့ပါတယ် အဲ့ဒီမှာ သူ့ရဲ့သမီးလေးက မြောက်ပိုင်းသီချင်း ဆိုပြလိုက်မီလို့သူ့အဖေဖမ်းခံရပြီး ရွှာက လူတွေ ဝိုင်းသတ်လို့သေသွားပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာ မောင်နှစ်မ နှစ်ယောက် ကမိဘမဲ့ ဖြစ်သွားပြီး ရွှာကေနေထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ အစ်ကို ကသူ့ညီမကိုအရမ်းချစ်ပြီး ဂရုစိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်တိုက်ပွဲတုန်းက အသက်ရှင် ခဲ့တယ့် ဗိုလ်ကြီးက ဘူဆန်ကိုဂီတဆရာ နေနဲ့ ပြောင်းလာရပါတယ်။ မိဘမဲ့ ကျောင်းအုပ်က အမေရိကပညာသင်လာ တယ့် စေတနာဝန်ထမ်း ကောင်မလေးပါ။ အဲ့ဒီအချိန် မိဘမဲ့ ကလေးတွေ ကို သီချင်းသင်ပေးပြီး အဖွဲ့တစ်ခုလုပ်လိုက်ပါတယ်။ သူတို့ပထမဆုံး အမေရိကန်က ဗိုလ်မှုးကြီးကို ဆိုပြတာကနေ လူတွေကြိုက်သွားပြီး သူတို့ကို ရှေ့တန်းက စစ်သားတွေ ကိုဖျော်ဖြေဖို့တာဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ မောင်နှစ်မ နှစ်ယောက်မှာ ညီမဖြစ် တယ့် သူက သီချင်းမဆိုဘဲ သူ့အကိုနဲ့မခွဲနိုင် လို့လိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ တောတစ်နေရာမှာ နားနေကြရင်း မောင်နှစ်မနှစ်ယောက် အပေါ့သွားဖို့ထွက်လာခဲ့တာမှာ မြောက်ပိုင်း တပ်နဲ့တွေ့ ကြတုန်း သူတို့ကိုမတွေ့လို့လိုက် ရှာနေကြတယ့် တောင်ပိုင်းတပ်တိုက်ပွဲစဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲ့တိုက်ပွဲနောက်ပိုင်းဘယ်သူကသေပြီး ဇာတ်လမ်းကို ဘယ်လို ဆက်ထားလဲ ၊ ကောင်မ လေးရရောဘာလို့သီချင်းမဆိုတာလဲ ၊ ဘယ်လို စိတ်ဝင်စားစရာ ဝမ်းနည်းစရာတွေ ရှိမလဲဆို တာဇာတ်ကားကြည့်ပြီးခံစားကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်မိပြီး တသသဆွဲနေမယ့် အထဲပါပါတယ်။အတက်နိုင်ဆုံး ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ခံစားမှုပိုပြီး စီးမျောသွားနိုင်အောင် ဘာသာပြန် ပေးထားပါတယ်။ ဂီတ အကြောင်းကို ဒရာမာ နဲ ရိုက်ပြထားပြီး တစ်ရှုးဆောင်ထားရမယ့် ကားပါ။ ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့သရုပ်ဆောင်နဲ့အဆိုပိုင်း ကို ကောင်းကောင်းကြီး ခံစားရမှာပါ။ ကြိုက်တာ မကြိုက်တာက ကြည့်တယ့်သူပေါ်မှာဘဲမှုတည်မှာပါ။
အသစ်စက်စက် A Monster Calls လေး ရပါပြီ CM fan အပေါင်းတို့ရေ.. ဒါနဲ့CM ပိတ်သတ်ကြီးရော.. ကိုယ့်စိတ်ကူးအိပ်မက်တစ်ခုခုကို စွဲစွဲမြဲမြဲယုံကြည်ဖူးပါသလား.. ဒီကားထဲက ကော်နာ အိုမယ်လီဆိုတဲ့ ကလေးလေးကတော့ အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ရင့်ကျက်ပြီး ယုံကြည်သက်ဝင်မှု ပြင်းထန်လှပါတယ်. . သူနဲ့ သူရဲ့ သေလုမြောပါးနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ အမေ ကြားမှာ စိတ်ကူးယဉ် ကမ္ဘာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်. . တစ်ညမှာတော့ ကော်နာလေးရဲ့ စိတ်ကူးထဲက tree monster ကြီးဟာ တောင်ကုန်းပေါ်ကနေ နိုးထလာခဲ့ပြီး.. ကော်နာလေးကို ပုံပြင် 3ပုဒ် စတင်ပြောပြပါတော့တယ်. . သူ ကော်နာလေးကို ပြောပြနေတာ အကြောင်းပြချက်ရှိလို့ပါ.. အဲ့ဒါက ဘာအတွက်လဲဆိုတော့… …. … ကျွန်တော် ဇာတ်လမ်းလေးပေါ့သွားမှာစိုးလို့ ဒီ့ထက်ပိုပြီးမပြောပြတော့ပါဘူး.. ဒီ Fantasy | Drama ကားလေးက စာရေးဆရာ Patrick Ness ရဲ့ “A Monster Calls” စာအုပ်ကို အသက်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်.. Budget $43M နဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီကားလေးဟာ Worldwide Gross အနေနဲ့ $37M ကျော် ရရှိထားပါပြီ.. Tree Monster ကြီးရဲ့ အသံသရုပ်ဆောင်ကတော့ Taken မင်းသားကြီး Liam Neeson ဖြစ်ပါတယ်.. ကော်နာလေးရဲ့ အမေနေရာမှာတော့ The Theory of Everything, Inferno, Rogue One;A Star Wars Story ကားတို့ရဲ့ မင်းသမီးချော Felicity Jones က သရုပ်ဆောင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် (သူမက ဒီကားမှာ မျက်ရည်တွေခြွေမှာမို့ ဒီကားမကြည့်ခင်တစ်ရှူးလေးတော့ဆောင်ထားကြပါ..ဘာသာပြန်ရင်းငိုနေရတယ်.. အပိုမပြောပါဘူး) ကျွန်တော်ကတော့ သူမကို ဒီကားနဲ့ပဲ စကြည့်မိတာပါ… ကဲ.. စကားရှည်မနေတော့ဘူး.. IMDb 7.7 ထိရထားတဲ့ ဒီကားလေးကို ကြည့်ပြီးရင်.. (ကြည့်နေရင်းနဲ့ကို)… ရင်ထဲမှာ တစ်ခုခုရှိနေမှာပါ.. ????
ဒီဇာတ်ကားကတော့ A Silent Voice ဖြစ်ပါတယ်။ Yoshitoki Ōimaကရေးသားခဲ့ပြီးတော့ 2016 ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တာပါ။ ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားကတော့Drama အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရှိုးရက အမြဲတမ်းကျောင်းမှာ သူငယ်ချင်းတွေကို အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပေါ့။
တစ်ရက် ရှိုးရ ရဲ့ကျောင်းကို နားမကြားတဲ့ ကျောင်းသူသစ်တစ်ယောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူမက သူ့အတွက် အနိုင်ကျင့်ချင်စရာ ပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ရှိုးရ နဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေက သူမကို တစ်ရက်တစ်ရက် နည်းလမ်းပေါင်းမျိုးစုံနဲ့အနိုင်ကျင့်ကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ ရှိုးကိုက ကျောင်းကထွက်သွားပြီးနောက်တော့ အားလုံးက သူ့ကိုဝိုင်းအပြစ်တင်ကြရော။
သူ့သူငယ်ချင်းတွေဆိုတဲ့လူတွေဘယ်သူမှ သူ့ဖက်မှ မရှိခဲ့ဘူးလေ။ ဒီလိုနဲ့ သူ့အပြစ်တွေနောင်တရပြီးတော့ လက်ဟန်သင်္ကေတဘာသာစကားကို သူသင်ခဲ့တယ်။
နောက် ၆ နှစ်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက် ပြန်ဆုံကြတယ်။ ပြန်ဆုံပြီးနောက်ပိုင်းသူ့အတိတ်က အမှားတွေကို သူပြန်ပြင်နိုင်မလား ဒါမှမဟုတ် သူ့အတွက် နောက်ကျသွားပြီလား ဆိုတာကတော့…
Adventure In Babysitting (2016)
ဒီကားလေးကတော့ မိသားစုနဲ့ကြည့်ရန်အထူးသင့်တော်တဲ့ဟာသကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်…စကားအပြောအဆိုချိုသာတဲ့ Jenny တစ်ယောက်ကလေးထိန်းအလုပ်ကိုလုပ်ရာကနေ Lola ဆိုတဲ့သူ့အကျင့်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ရွယ်တူကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်..Jenny ထိန်းရတဲ့ကလေးတွေကလည်း တစ်ယောက်တစ်မျိုး ဆိုးကြတဲ့ကလေးတွေပါပဲ….နောက်ပိုင်းမှာမျှော်လင့်မထားတဲ့ အကြောင်းရာတွေကြောင့် သူထိန်းနေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပျောက်သွားခဲ့ပါ
တယ်….ပိုက်ဆံအခက်ခဲကြောင့် သူမနေရာဝင်နေတဲ့ Lola နဲ့အတူ သူမတာဝန်ယူထားတဲ့ကလေး မပျောက်သွားစေရန် ကျန်တဲ့ကလေးများနဲ့အတူ လိုက်လံရှာဖွေရှာတာပဲဖြစ်ပါတယ်…အဲလိုလိုက်ရှာရင်ကနေ အမှတ်မထင် လူဆိုးတွေနဲ့ပတ်သတ်မိသွားပြီး လူဆိုးတွေရန်ကနေ လွတ်အောင် ကလေးတွေနဲ့အတူပြေးရင်းလွှားရင်းနဲ့ ဇာတ်လမ်းကိုသွက်သွက်လေးတင်ဆက်ထားပါတယ်…Jenny ကထိုပျောက်သွားတဲ့ကောင်လေးကို မိဘတွေပြန်မလာရင် ညအချိန်အရောက်အမှီရှာဖွေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…
သူတို့တွေရှာဖွေနိုင်မလား…လမ်းမှာတွေ့တဲ့လူဆိုးတွေရဲ့ရန်ကနေ လွတ်အောင်ဘယ်လိုထောင်ချောက်တွေသုံးပြီးထွက်ပြေးကြမလဲဆိုတာကတော့ ဒီဇာတ်ကားလေးထဲကိုကြည့်ရှု့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်….(ဒီကားကို Thin Zaly Kyaw နဲ့ Pyae Phyo Hein တို့မှဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်)….
ကျနော်တို့တွေအားလုံး နေ့စဉ်ဘဝမှာ ရှင်သန်နေကြတာ ဘ ာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လဲ မရှင်သန်ဖူးသေးလို့ ရှင်သန်ကြည့်နေကြတာလား?? မနက်ဖြန်အတွက်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးတွေနဲ့လား?? ရှင်သန်နေဆဲ မှာရော ရှင်သန်ဖော်ရှင်သန်ဖက်တွေကို ဘယ်လောက်အကျိုးပြုခဲ့ပြီလဲ??
လူတွေက ဘာလို့ ဆုံးရှူံးပြီးသားကိုမှ တန်ဖိုးထားကြတာလဲ?? အချစ်ဟာ အချိန်တွေကြာလာရင် သံယောဇဉ်ဖြစ်ရဲ့လား?? သံယောဇဉ်နဲ့ပဲနေနေတဲ့ အချိန်တွေကြာလာရင်ကော.. အချစ်ဆိုတာကျန်သေးရဲ့လား?? အဆုံးမဲ့စြင်္ကာဝဠာကြီးထဲမှာ မိမိဆိုတာကရော ဘယ်လောက်ထိအရေးပါနေလဲ?? ကျနော်တို့ဟာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဘဝမှာကြိုးစားကြတယ် ဖြစ်သွားရင်ကော..ဘဝကြီးကနေပျော်သွားပြီလား?? ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေဆဲကာလကရော ဘဝမဟုတ်ဘူးလား?? စ
တဲ့ mindblowingဖြစ်စေမယ့် မေးခွန်းလေးတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးရင်း ခပ်ငြိမ့်ငြိမ့်ဇာတ်ကားလေးထဲမှာ စီးမျောသွားပါလိမ့်မယ်.. မိန်းမရပြီးမှ မကြိုးစားခဲ့လို့ မိန်းမက ထားသွားခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်. ..သူသိပ်ချစ်တဲ့သူ့သားလေးကိုလဲ ထောက်ပံ့ကြေးပေးရဦးမယ်(သူတို့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရ) ပင်စင်စားအမေကြီးကိုလဲ ထောက်ပံ့ချင်သေးတဲ့ သားလိမာဖြစ်ချင်တဲ့ လူတစ်ယောက်… စုံထောက်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးမှာအလုပ်လုပ်ပြီး ဝတုတစ်ပုဒ်နဲ့ဆုရဖူးတဲ့ အရည်အချင်းနဲ့လူတစ်
ယောက် ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်မလာတဲ့ ဘဝတစ်ခုမှာ အဓိပါယ်ရှာနေတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ(ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ.ဘာသာပြန်သူကတော့ အောင်ချမ်းငြိမ်း ပဲဖြစ်ပါတယ်)
mmbusticketဂျီနာဆိုတဲ့ မိန်းကလေးက မတော်တဆမှုကြောင့် မျက်စိကွယ်ခဲ့ရတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ။သူ့ယောက်ျားဂျိမ်းစ်နဲ့အတူ ဘန်ကောက်မှာနေတာဖြစ်ပြီး ဂျိမ်းစ်ရဲ့စိတ်ရှည်သည်းခံစောင့်ရှောက်မှုတွေကြောင့် မျက်စိပြန်မြင်ခဲ့
ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဂျီနာမျက်စိပြန်မြင်တဲ့အချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့ လွတ်လပ်မှုတွေက ဂျိမ်းစ်ကို သဝန်တိုမှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတော့တယ်။တချိန်လုံးသူ့ဘေးမှာပဲ သူ့ကိုအားကိုးပြီးနေခဲ့ရတဲ့ မိန်းမ မျက်စိမြင်ပြီး လောကကြီးထဲ ပုံမှန်နေထိုင်ဖို့ကြိုးစားချိန်မှ
ာ ယောက်ျားတစ်ယောက်အနေနဲ့ မိန်းမကိုဆုံးရှုံးရမှာ ကြောက်နေပုံကို ဒရမ်မာဆန်ဆန်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်လို့ ဒရမ်မာပရိသတ်တွေအတွက်တော့ ကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားပါလို့ ညွှန်းလိုက်ပါရစေ……..(ဘာသာပြန်သူကတော့ မေသူရလွင်ပါ)
ရုပ်ရှင်နာမည်က Apprentice တဲ့ …Apprentice ဆိုတာခပ်လွယ်လွယ်ဘာသာပြန်ရင် အလုပ်သင် လို့ ဆိုသော်ငြား အတိအကျပြောရရင်ရှုပ်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော်ပဲဝေါဟာရဆင်းရဲတာလားတော့ မသိဘူး။
ဥပမာပေးရရင် ကားဝပ်ရှော့က ကောင်လေးတွေကို Apprentice လို့ခေါ်လို့ရမယ်။ ပညာသင်အလုပ်သမားပုံစံ …
ဆရာက ပညာသင်ပေးရတဲ့အတွက် လစာတော့ လျှော့ပေးထားတာမျိုးပေါ့ ..
A person who is learningatrade fromaskilled employer, having agreed to work forafixed period at low wages ဆိုတဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ကပဲ ပိုထိရောက်မယ်ထင်တယ်။Apprentice က စင်္ကာပူ/မလေးရှားရုပ်ရှင်ပါ။
စင်္ကာပူ/မလေးရုပ်ရှင်တွေကိုအထင်မကြီးတဲ့အတွက် တခါမှမကြည့်ဖူးဘူး။ ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်အထိတက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့သလို၊ ဆီလိုအပြစ်ရှာပြောတတ်တဲ့ ဟောလိဝုဒ် ဝေဖန်ရေးသမားတွေကပါ မှတ်ချက်ကောင်းကောင်းတွေပေးထားတာဆိုတော့ ကြည့်ဖြစ်လိုက်တယ်။
စစ်သားတစ်ယောက် တပ်မတော်နဲ့ စာချုပ်ပြည့်ပြီးအပြင်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ ထောင်ကိုအလုပ်ဝင်လျှောက်တော့ အလုပ်ရတယ်။
အဲဒီထောင်မှာ သေဒဏ်ကျအပြစ်သားတွေကို ကြိုးပေးဖို့အတွက်(အမှန်က ကြိုးစင်မောင်းခလုတ်ဖြုတ်တာ၊ ကြိုးကျစ်တာ) အလုပ်နေရာကို ဘယ်သူမှမလုပ်ချင်လို့ အခက်တွေ့နေချိန်ပေါ့။
သွေးအေးလွန်းတဲ့ အဲဒီစစ်ထွက်ကို ကြိုးမိန့်ပေးတဲ့နေရာမှာ အလုပ်သင် Apprentice အဖြစ်ထားလိုက်တာ။ အဲဒီအကြောင်းလေးကိုပဲရိုက်ပြတာ အရမ်းရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ။စကားသိပ်မပြောပဲ ဇာတ်ကောင်စရိုက်တွေတင်ပြတာ အရမ်းကောင်းတယ်။
အထူးတလည်ချီးကျူးချင်တာကတော့ ထောင်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို သေချာလေ့လာပြီးမှ ရိုက်ထားတာကိုပဲ ..
ဥပမာ – ကိုယ်အလေးချိန်ဘယ်လောက်ရှိရင် ကြိုးထုံးကို ဘယ်လောက်ထုံးရမယ်၊ ကြိုးအရှည်ဘယ်လောက်ထားရမယ်။ ကြိုးပေးခံရမယ့်သူကို ကြိုးကွင်းစွပ်ပြီးရင် ကြိုးရဲ့အထုံးကို ဘာကြောင့် ဘယ်ဘက်နားရွက်အောက်မှာပဲထားရတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ။
ဘယါလောက်သတ္တိကောင်းတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုးပေးမယ့်နေရာထိခပ်တင်းတင်းလျှောက်လာနိုင်တယ်ထားဦး၊ ခေါင်းစွပ်စွပ်ပေးပြီး ကြိုးစင်ပေါ်လည်းတင်ရော သွေးပျက်ကုန်တာတွေကအစ ဒါရိုက်တာဟာ ပညာသားပါပါချပြနိုင်လွန်းတယ်။ဒိုင်ယာလော့တွေနည်းတယ်ဆိုပေမယ့် ပြောလိုက်တဲ့ စကားလုံးတွေကလည်း အရမ်းထိတယ်။ ဆရာက သူ့တပည့်ကို သင်ပေးနေတဲ့စကားကိုပဲကြည့် …My job is to make sure he dies instantly. Make sure there’s no pain. In some countries they use the short drop. It’s pitiful, you know. The guy really suffers. They’ll let him struggle for 30 minutes until he turns blue and soils his pants before he dies. But here, we are humane. We make sure it is quick and painless.
အနှစ်ချုပ်ပြောရရင် Apprentice ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်လေးကို တနေရာရာမှာ အမှတ်တမဲ့တွေ့ရင် ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ပါ။ ရသ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်လိုက်ရသလိုပဲလို့ လက်တို့ပါရစေ …နိုင်ငံတကာကပေးတဲ့ဆုတွေလည်း တသီကြီးရထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းပါဗျာ။(ရုပ်ရှင်အညွှန်းကို Ko Aung Zaw Oo Facebook မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
လူတိုင်းမှာ ဘဝရဲ့တမ်းတမက်မောစရာ ဇာတ်လမ်းလေးတွေရှိကြမယ်….တခြားလူတွေအတွက်တော့ ပုံပြင်လေးတွေပေါ့…ဒီဇာတ်လမ်းက ပုံပြင်တချို့ကိုပြောပြနေလိမ့်မယ်…တိုက်ဆိုင်ရင်တော့ ကိုယ့်ရင်တစ်ခုလုံး ပျော်ဝင်သွားနိုင်တယ်…
အချစ်ကိုအပ်ဖျားမှာတပ်ပြီး မျှားနေတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ပေါ့ပေါ့တန်တန်တွေးမိလိမ့်မယ်…..တကယ်က အချစ်က ကျွန်တော်တို့ကို အပ်ဖျားမှာတပ်ပြီး မျှားနေတာ။လွမ်းမောဖွယ် ကြမ်းရှရှတချို့နဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးဟာ IMDb (6.1) ရရှိထားတဲ့ ထိုင်ဝမ်ဇာတ်ကားလေးပါ။နူးညံ့လိုက်ဖို့ စိတ်မရှိဘူးဆိုရင် ကြည့်ရှုခံစားသင့်ပါတယ်။
ဝါကင်းဟာ အောက်ပိုင်းသေနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ….တစ်နေ့တော့သူအလုပ် လုပ်တဲ့မြေအောက်ခန်းရဲ့ဘေးကို ဘဏ်ဖောက်မဲ့ရောက်လာတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်…တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သူ့အိမ်ကအခန်းကိုငှားဖို့လာတဲ့ “ဘတ” တို့သားအမိပါရောက်လာပါတယ်ဘဏ်ဖောက်မဲ့သူတွေကို”ဝါကင်း”ဟာသူတို့တွေရဲ့နာမည်နဲ့အချက်အလက်တွေကိုပါ
video recorded နဲ့အကုန်လိုက်မှတ်ထားပါတယ်…အဲဒီအချက်အလက်တွေကသူနောက်မှာအသုံးဝင်လာမယ့် တကယ့်မှတ်တမ်းတွေပါ…ဒီမှာတော့ ဝါကင်းဟာ ပိုက်ဆံလိုနေတာကတစ်ကြောင်း ပြီးတော့ ဘာတ”တိ့ုသားအမိကိုပါသံယောဇဉ်ဖြစ်ပြီး ထောက်ပံ့ကာကွယ်ပေးချင်တာတွေဖြစ်လာပါတယ်… သူပါ ဘဏ်ကပိုက်ဆံတွေကိုခိုးဖို့အကြံဖြစ်လာပါတယ်….နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဘဏ်ဖောက်မဲ့လူတွေဟာဝါကင်းဆီရောက်လာပြီးသတ်တော့မဲ့ဆဲဆဲအခြေအနေမှာ ဝါကင်းရဲ့ စကား
ကြောင့် အချင်းချင်းသတ်ကြကုန်ပါတယ်….ကဲ…”သူဘာပြောလိုက်တာလဲ”ဘယ်လိုတွေဉာဏ်ကစားလိုက်တာလဲ” ဒီနေရာမှာ မေးခွန်းတစ်ခုရှိနေပါတယ်….”ဘာတ”ကသူ့အိမ်ကိုရိုးရိုးရောက်လာတာဟုတ်ရဲ့လား…ဘဏ်ဖောက်တဲ့သူတွေနဲ့ပက်သက်နေတာဆိုရင်ရော…..ဝါကင်း ကရော သူ့အကြံတိုင်းဘဏ်ဖောက်နိုင်မှာလား အောက်ပိုင်းသေနေတဲ့သူမို့.. မလုပ်နိုင်ဘဲဖြစ်နေမှာလား “အပေါ်ယံကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ရင်ဒူးရင်းသီးဟာစားစရာမဖြစ်လာနိုင်ပါဘူး” ဆိုသလိုပေါ့ဘယ်ဟာကိုမှအပေါ်ယံကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်လို့မရနိုင်ပါဘူး..
ဒီဇာတ်လမ်းလေးဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း waterကို အသံမထွက်တတ်ဘဲ warလို့မှားထွက်မိလို့စစ်တပ်ထဲရောက်လာတဲ့အူကြောင်ကြောင်အီတလီစစ်သားလေးတစ်ယောက်အကြောင်းပါ …ဒါပေမယ့်လည်းဖြစ်ပုံက အဲ့ဒီနေ့က သူ့ကောင်မလေးကိုလက်ထပ်ခွင့်ရဖို့အတွက်
ပင်လယ်ခြားနေတဲ့စီစလီမြို့ကသူမရဲ့အဖေဆီ သွားပြီးခွင့်တောင်းရမှာပါ…ဒါပေမယ့် စားပွဲထိုးငမွဲလေးဖြစ်တဲ့အာတူရိုဟာ သွားဖို့ရာ ကားခသင်္ဘောခလေးတောင်မတတ်နိုင်တဲ့အတွက် စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ဘားသွားပါလေရော…ဘားလည်းရောက်ရော ရေတောင်းတာ Waterကိုအသံမထွက်တတ်ဘဲ warလို့ထွက်မိတဲ့အတွက် စစ်တပ်ထဲအူကြောင်ကြောင်နဲ့ရောက်သွားပါတယ်…ဒါပေမယ့်လည်း စစ်တပ်က စီစလီမြို့ကိုတပ်ကူလွှတ်လိုက်တဲ့အတွက် ရေငတ်တုန်းရေတွင်းထဲကျပြီး စီစလီမြို့
ကိုဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ကြီးကိုရောက်သွားပါတော့တယ်…စီစလီမြို့အရောက်မှာတော့ သူ့ချစ်သူရဲ့ဖခင်ကိုရှာဖွေရင်း ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ……နိုင်ငံကိုပေးဆပ်ဖို့စစ်တပ်ထဲဝင်လာတဲ့သူရဲကောင်းအရာရှိကြီးဖီးလစ်…ဗုံးစောင့်ကြည့်ပေးရတဲ့ မျက်မမြင်နဲ့ ထော့ကျိုးအတွဲ…စစ်တိုက်ထွက်သွားတဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့မိသားစုလေး…စတဲ့သူတို့ရဲ့စစ်အတွင်း ဘဝလေးတွေကိုဟာသနှောလိုက် ငိုချင်အောင်လုပ်လိုက်နဲ့ ပရိသတ်ကိုနည်းမျိုးစုံနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုပေးထားတဲ့ကားလေးပါ…သဘာဝကျကျ ခွီရတဲ့အခန်းတွေတော့ သိပ်ကိုသဘောကျရပါတယ်……အနှစ်ချုပ်ပြောရင်တော့ တကယ်ကြည့်လို့အရမ်းကောင်းတဲ့ကားလေးတစ်ကားပါ…
“မိတ်ဆွေ မိန်းကလေးတယောက်နဲ့ လက်ထပ်တော့မယ်
စိတ်ကူးထားလား ဒါဆို မြန်မြန်သာ လက်ထပ်လိုက်ပေတော့
နောက်အနာဂတ်မှာ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ မနက်ဖြန် ဘာစီစဉ်ရမလဲ
မစဉ်းစားနေနဲ့တော့ လက်ရှိကိုပဲကြည့်ပြီး ရဲရဲကြီးသာ ဆုံးဖြတ်လိုက်”ဒီဇာတ်လမ်းလေးကလည်း ဒီလိုပါပဲ သင်္ချာပညာမှာ သိပ်တောတဲ့#ဂျေးဟာ
သူ့ငယ်ချစ် ဒီယားနဲ့လက်ထပ်ချင်ပေမဲ့ သူ့ဘဝတတ်လမ်းအတွက်လည်း
အင်္ဂလန်နိုင်ငံက ကမ်းဘရိချ်တက္ကသိုလ်ကို ပြောင်းချင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဒီယားက မသွားချင်တော့ ဒီမင်္ဂလာပွဲကို
စိတ်ပျက်နေတဲ့ ဂျေးတယောက် သူ့ဘဝမှာ အပြောင်းလဲကြီးတခု ဝင်လာပါတော့တယ်ဒီအပြောင်းလဲက ဘာဖြစ်မလဲ ဒီယားကို သူလက်ထပ်ဖြစ်လိုက်လား
Bollywood Drama ကောင်းကောင်းလေးတွေ ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
ရုပ်ရှင်ကားလေးက ပညာသားပါပါနဲ့ ကျနော်တို့ဘဝတွေမှာ
ဘယ်အရာက အရေးကြီဆုံးလည်းဆိုတာ တွေးသွားစေနိုင်လောက်တဲ့
မက်ဆေ့ချ်လေးတော့ ချန်ခဲ့ပါတယ့်“ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေဟာ တနေ့ကျရင်
အချိန်ကြာကြာလေး ပိုရှိနေပေးခဲ့ရင် ကျနော်တို့ သိပ်ဝမ်းနည်းမိမှာ
မဟုတ်ပါဘူး ”ဘာသာပြန်သူကတော့ ကိုဇော်ထူးပဲဖြစ်ပါတယ်
Barbie_ Star Light Adventure (2016)
Barbie: Star Light Adventure (2016) မြန်မာစာတန်းထိုးIMDb rating – 5.6/10ဘာဘီကားလေးတွေကိုမှ ကြိုက်တယ်၊ ဘာဘီရုပ်လေးတွေကိုမှ ချစ်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက် ဘာဘီရုပ်ရှင်စီးရီးရဲ့ စတုတ္ထမြောက်စီးဆင်းထဲက ဒုတိယမြောက်ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ 2016ခုနစ်ထွက် ဘာဘီကားလေးကို ဘာဘီချစ်သူအားလုံးတို့အတွက် မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဘာသာပြန်ပေးတဲ့သူကိုယ်တိုင်ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဘာဘီ ကမ္ဘာထဲမှာ Barbieကားတွေကြည့်ရင်းကြီးခဲ့သူဆိုတော့ကား၊ နောက်ခုထိလည်း ကလေးဆန်ဆန်ဘာဘီကားတွေကြည့်နေဆဲမို့လို့ ကိုယ့်လိုဘာဘီချစ်ပရိသတ်တွေကြည့်ဖို့ ဘာသာပြန်ပေးလိုက်တာပါနော်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ တစ်ခါတုန်းက ဂလက်ဆီမှာ ကြယ်တွေဟန်ချက်ပျက်ပြီးပျောက်ကွယ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ တဘောင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ ဘုရင်ကြီးက အထူးအဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအဖွဲ့အတွက် ဂလက်ဆီရဲ့တစ်နေရာမှာနေထိုင်တဲ့ဟိုဗာဘုတ်စီးကျွမ်းတဲ့ ဘာဘီကို ဘုရင်ကြီးက ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာဘီတစ်ယောက် ဘုရင့်နန်းတော်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုပြဿနာတွေဖြစ်ကြမလဲ။ ဘာဘီရဲ့ချစ်စရာ ကမောက်ကမနိုင်ပုံလေးတွေ…အဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်ဖို့ဘာဘီလုပ်ခဲ့တာလေးတွေနဲ့ စကြာဝဋ္ဌာကြီး အလင်းပြန်ရဖို့ သူတို့အဖွဲ့ ဘယ်လိုတွေကယ်တင်ကြမလဲ? ဘာတွေဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကိုတော့ အောက်ကlinkမှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် down ကြည့်လိုက်ပါနော် ဒါနဲ့ ဘာဘီက အရမ်းချစ်စရာကောင်းသလို ဇာတ်ဝင်တေးသီချင်းဖြစ်တဲ့ “shooting star” သီချင်းကလည်းအရမ်းနားထောင်ကောင်းတာမို့ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ကြဖို့ ဘာဘီချစ်သူတွေကို လက်တို့ပြီးတော့ ပြောလိုက်ပါတယ်နော်
Barcelona A Love Untold (2016)
ဖိလစ်ပိုင်အချစ်ဇာတ်ကားကောင်းကောင်းလေးတစ်ကားကိုညွှန်းပါရစေ..ကိစ္စတစ်ခုကြောင့် မိသားစုကိုအရှက်ရစေပြီးနောက် မီယာဟာဖခင်ဆီကချီးမွှမ်းခြင်းခံရတဲ့ သမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ပြန်လည်ကြိုးစားချင်တဲ့အတွက်စပိန်နိုင်ငံဘာစီလိုနာမြို့ကိုအလုပ်ရှာဖွေဖို့စွန့်စွန့်စားစားထွက်လာခဲ့ပါတယ်…. တစ်ဖက်မှာ အယ်လီဟာလည်းသူ့ရဲ့ပယောဂကြောင့် ချစ်သူသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့နောင်တကိုရင်မှာပိုက်ပြီး ချစ်သူရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက် ကာတွန်းတွေရုပ်ရှင်တွေဖန်တီးချင်တဲ့ဝါသနာကိုစွန့်ပြီး ကမ္ဘာ့ဗိသုကာမြို့တော်ဘာစီလိုနာမှာဗိသုကာပညာလာရောက်သင်ကြားရင်းမီယာဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့နှစ်ဦးသားတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်….မီယာဟာ တိုက်ဆိုင်စွာပဲ အယ်လီချစ်သူဟောင်းစီလင်းနဲ့ရုပ်ချင်းခွဲမရအောင်တူနေတဲ့အတွက်အယ်လီဟာမီယာကိုဘာစီလိုနာမှာကူညီစောင့်ရှောက်ပေးရင်းချစ်ကြိုးသွယ်သွားခဲ့တဲ့ လူငယ်သဘာချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်….ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာလူတိုင်းဟာအချစ်ခံရဖို့ထိုက်တန်ပါသလား ????ကျူးလွန်ခဲ့အပြစ်တစ်ခုကြောင့်တစ်သက်လုံးပြန်လည်ပေးဆပ်စရာလိုပါသလား ???လဲကျနေရာကနေပြန်လည်ရှင်သန်ဖို့ ဘယ်လိုခွန်အားတွေပေးခဲ့သလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကို တပြိုင်နက် အဖြေထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်….တကယ်ဆိုရင်တော့ ပရိတ်သတ်ကြီးအနေနဲ့ ဇာတ်ညွှန်းတောင်ဖတ်စရာမလိုပဲနာမည်ကြီးဖိလစ်ပိုင်စုံတွဲ Cathniel ပါတယ်ဆိုရုံနဲ့တင် ကြည့်ကောင်းမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဆိုတာ သိကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…
ကဲဒီတစ်ခါတော့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ IMDb rating 6.8 ထိ ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ ဇာတ်ကားလေးက အက်ရှင်ကားကြိုက်တဲ့ သဲထိပ်ရင်ဖို ကားတွေကိုမှ နှစ်သက်ကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် အကြိုက်တွေ့မယ်ဆိုတာ အာမခံပါတယ် အရင် NErve ကိုကြည့်လို့ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တယ်ဆို ဒီဇာတ်ကားလေးကို လဲကြိုက်နှစ်သက်မယ်ဆိုတာ ပြောနေစရာမလိုတော့ပါဘူး ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ဂိမ်းချန်ပီယံတွေကိုဆို ဂိမ်းကုမ္ပဏီတွေက သူတို့ရဲ့ဂိမ်းရဲက အမှားတွေ ပြစ်ချက်တွေကိုရှာဖို့ Beta version ကို ပေးဆော့လေ့ရှိပါတယ် ပြီးမှ လုံးဝအဆင်ပြေပြီဆိုမှ Publication လုပ်ကြတာပါ ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာလဲ ဂိမ်းချန်ပီယံ မက်စ်ဟာ မကြာမီမှာဖြန့်ချီတော့မယ် ဂိမ်းတစ်ခုကို အစမ်းဆော့ရာမှ မထင်မှတ်ပဲ ဂိမ်းဟာ အပြင်လောကမှာပါ ဂိမ်းထဲက အတိုင်းလိုက်ပါဖြစ်ပျက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့ အခါမှာတော့ ကဲ ဗျာ ပရိတ်သတ်ကြီးကပဲဆက်လက်ကြည့်လိုက်ပါတော့ ဗျို့ ဘာကြည့်နေတာလဲ မြန်မြန်သွားဒေါင်းတော့လေ 😛
IMbD Rating 6.0 ရထားတဲ့ဗီယက်နမ် Action/comedy ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ခုပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ဘစ်ကွိုင်း ဆိုတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေကြေးက ခေတ်စားနေတဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အချိန်လေးပါ၊ ဒါပေမယ့် ဘစ်ကွိုင်းကို တရားမဝင်ငွေကြေးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတာ့ ဒီငွေကြေးကအလွယ်တကူ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဘဏ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲ လွဲနိုင်လို့ပါ၊။ ဗီယက်နမ် ဆိုင်ဘာပြစ်မှုစုံစမ်းရေးကို ခေါင်းစားစေသလို နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်း ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ ဟက်ကာကို အပူတပြင်းလိုက်ရှာဖမ်းနေကြပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ ဟက်ကာ ကွန်ပျူတာတွေကို အွန်လိုင်းကနေ အုတ်ဂူလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဗိုင်းရပ်တစ်မျိုးဖြန့်ပြီး ဘစ်ကွိုင်းငွေကြေးတွေ အကြပ်ကိုင် တောင်းခံနေလို့ပါ ဒီလိုခြေရာဖျောက်ကောင်းတဲ့ ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ ဟက်ကာကို ဗီယက်နမ် ဆိုင်ဘာပြစ်မှုစုံစမ်းရေးကို ဘယ်လိုများနည်းလမ်းတွေနဲ့ ဖမ်းဖို့ကြံစည်ခဲ့သလဲ ဖမ်းမိမှာလဲ လွတ်သွားမှာလဲ ဝိညာဉ်ကဘယ်သူလဲဆိုတာကို မထင်မှတ်တဲ့ဇာတ်လမ်းအလှည့်အပြောင်းတွေနဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ုလိုက်ကြပါ
အချစ်ဆိုတာ အရာရာကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်တဲ့ ဟုတ်ပါ့မလား ငယ်စဉ်ဘဝကတည်းက တိတ်တခိုးဆွဲလမ်းနေခဲ့ရသော ဆမ် ကြီးလာတော့ မိမိချစ်သူ ဆူး ကို အကြိမ်ကြိမ်ဖွင့်ပြောဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်လည်း အခွင့်မကြုံပဲ အရာရာ တလွဲတွေသာ လုပ်မိတဲ့အခါမှာတော့ ဘယ်လိုတွေကြုံတွေ့ရမလဲ အချစ်ကြောင့် မိုက်ကန်းနေတဲ့ ချစ်လူမိုက်ကြီး ဗစ်တာနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခါမှာတော့ ဘယ်လိုတွေများ ရင်ဆိုင်ဖြေရှှုင်းကြမလဲဆိုတာ ဆက်လက် ကြည့်ရှူလိုက်ကြပါအုံးဗျာ
ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ ပရိသတ်တွေကော ဒါမျိုးလေးဖြစ်ဖူးလား “ပိတ်လှောင်ခံခဲ့ရဖူးလား…….ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်လမ်းပျောက်နေဖူးလား……………… ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာကိုယ် ပျောက်ဆုံးနေဖူးလား……..အချိန်တွေထဲမှာပျောက်ဆုံးဖူးလား………………… ထွက်မြောက်ခွင့်လေးရဖို့ လွတ်မြောက်ဖို့ကို…..အရမ်းကို ရုန်းကန်ကြိုးစားနေရတယ်……………….. လွတ်လမ်းမမြင်တော့အခြေအနေ……ကိုယ်ကိုတိုင် ဘာမှမတတ်နိုင်တော့အခြေအနေမျိုး…….” ဆူဇန်နာကေ့ချ်လန်ဆိုတာ မိန်းမချောလေး နယူးယောက်ပို့စ် သတင်းစာတိုက်က ဂျာနယ်နစ်လေးတစ်ယောက် ကိုယ့်ဘဝကို စိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်နေရင်း တက်သစ်စ အညွန့်တလူလူနဲ့ ပျော်ရွင်နေတဲ့မိန်းမပျိုလေးတစ်ယောက်ပါ။ ဒီလိုနဲ့ မမျှော်လင့်ဘဲ သူ့ဘဝမှာ ခုနကပြောထားတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါမှာတော့ -အများ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း စိတ်ဝေဒနာရှင်လို့ မြင်လာတယ် -ဆရာဝန်အများစုကလည်း စိတ်ရောဂါအမျိုးမျိုးကို တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ ရောဂါနာမည်တပ်ပြီးတော့ စိတ္တဇဆေးရုံသာပို့စေချင်ပေမယ့် တကယ်တော့ သူကစိတ်ဝေဒနာရှင်တစ်ယောက် မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေကို ဘယ်လိုရုန်းကန်ခဲ့ရလဲဆိုတာကို ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြပါ။ PS..ဒါက တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းလေးမှာ။ “ဆူှဇန်နာ့ကေ့ချ်လန်” ဆိုတဲ့ ဂျာနယ်လစ်စာရေးဆရာမလေးဟာ နယူးယောက်ပို့စ်မှာ အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်နေရင်း ကြုံတွေ့လာရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ။ သူ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကို ကိုယ်ကိုတိုင် Personal information အပြည့်အစုံနဲ့ကို Brain on Fire ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ဟာ အရောင်းရဆုံးစာအုပ်ဖြစ်ခဲ့သလို သူရဲ့စာအုပ်ကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ သူ့လိုရောဂါရှင်ပေါင်း မြောက်မြားစွာကို ကယ်တင်ကုသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကြောင့်ပဲ ဒီလိုရှားပါးတဲ့ ရောဂါအကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိလာပြီး ဒီရောဂါနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ကုသမှုနည်းပညာတွေကို Research လုပ်ရင်း ဒီရှားပါးတဲ့ရောဂါ ကုသရေးစင်တာတောင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဇာတ်လမ်းထဲက ဇာတ်ကောင်နာမည်နေရာမှာပါ သူ့နာမည်အတိုင်း ရိုက်ကူးထားပြီး ဂုဏ်ပြုထားတာပါ။
ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကတော့ ကယ်ဘင် ဆိုတဲ့ နေရာကို သူငယ်ချင်း ၅ယောက် သွားလည်ရာမှ မပြန်လမ်းကို မြန်းသွားပုံကို ရိုက်ကူးပြထားပြီး Horro တို့ရဲ့ ထုံးစံ အတိုင်း Rating တော့ အတော်နည်းတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျ ပုရိသအကြိုက်ကား မျိုးမို့ ကြောက်တာရယ် ဟွာရယ် ဆိုတဲ့ ရသ ၂မျိုးကို တပြိုင်နက် ခံစားရမှမို့ သိပ်လန်းမယ်ဆိုတာ တော့ ပြောစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ် သူတို့က ၅ယောက်စုသွားတယ် ကွီးတို့က ၁၈ယောက် စုကြည့်ကြပေါ့ 😛
BvS ရဲ့ Lex Luthor ကြီး ..မင်းသား Jesse Eisenberg နဲ့ Twilight မင်းသမီး Kristen Stewart တို့အပြင် Age of Adaline ရဲ့မင်းသမီး ..Deadpool မင်းသားကြီးရဲ့ ချစ်ဇနီးချော Blake Lively တို့ပါဝင်ထားတဲ့ဒီဇာတ်ကားကို နာမည်ကျော်ဒါရိုက်တာကြီး Woody Allen မှရိုက်ကူးထားပါတယ်။ ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်လောက်က Hollywood အငွေ့အသက်ကိုအခြေခံလို့ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာ Drama /Romance ကိုနှစ်သက်သူတွေ ကြည့်ရှုခံစားဖို့ အတော်ပဲသင့်တော်တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ဒီတစ်ခါတော့ Cell ဆိုတဲ့ Horror/Si-Fi တစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ Horror တို့ရဲ့ ထုံးစံ အတိုင်းပဲ rating နည်းနေတာကတော့ ပြောစရာ မလိုလောက်ပါဘူး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း ပရိတ်သတ်ကြီးနဲ့ မစိမ်းတဲ့ မင်းသား/မင်းသမီးတွေပါ ဇာတ်လမ်း ကလည်း ပုံမှန် Zombie ကားတွေလိုမဟုတ်ပဲ ဇာတ်လမ်းစပြီးကတည်းက ဇာတ်လမ်းရဲ့ Tempo ကိုမြင့်လိုက်တာက ကြည့်ရှူ သူတွေအတွက် တမူထူးခြားနေမှာပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ပြပွဲအတွက် ခရီးထွက်နေရတဲ့ မင်းသားကြီး ဟာ လေဆိပ်မှာ ခနနားနေတုန်း အိမ်က သားဖြစ်သူကို ဖုန်းဆက်နေရာမှ ထူးဆန်းတဲ့ Signal ကြောင့် ဖုန်းပြောနေသူအားလုံး စိတ်ရိုင်းဝင် အသိစိတ်လွတ်ပြီး အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်ကုန်တဲ့အခါမှာတော့ ဘယ်လိုများ ရင်ဆိုငိထွက်ပြေးမလဲ သားဖြစ်သူဆီကိုကောပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်ပါ့မလား ဆိုတာတွေကိုတော့ ဒေါင်းယူကြည့်ရှူလိုက်ပါအုံး
Chalk N Duster ဇာတ်ကားမှ ဖောက်ထွက်လာသော အတွေးများ ” ••••••••••••••••••••••••••• “ငါတို့တတွေဟာ ပညာရေးရဲ့ လင်းရောင်တန်ဆာ ဖြစ်ခဲ့တာမို့ ကမ္ဘာတစ်လွှမ်းလုံးထိ တိုင်အောင် တတ်စွမ်းသမျှလေး လင်းလက်ခဲ့ပါ့မယ် ” [ Song lyrics] ကျွန်မတို့က မြေဖြူတွေ။ ကျွန်မတို့က သင်ပုန်းဖျက် ပစ္စည်းတွေ။ မီးအိမ်ငယ်ငယ် ကို ကိုင်ဆောင်သူတွေ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ခြင်းတောင်းလေး ကိုင်ရင်း ဝါသနာလမ်းပေါ် လျှောက်လှမ်းလာကြတဲ့သူတွေ။ “ကျွန်မတို့က ဆရာမတွေ ” ______________________________ အမှန်ပြောရရင် ဒီလို ဇာတ်ကားမျိုးက ကြည့်ချင်လာအောင် ရေးပြရမယ့် Review မျိုးမဟုတ်ပါ။ ဇာတ်ဝင်ခန်း တစ်ခန်းချင်း ကို ကိုယ့်ငယ်ဘဝနဲ့ ပြန်တွေးရမယ့် ပုံပြင်ဆန်နေခြင်းမျိုးပါ။ ဒီပုံပြင်တွေထဲက သူရဲကောင်းတချို့ဟာ အပြင်လောကမှာ ရှိခဲ့ပါကြောင်း နားလည်ခဲ့ရမယ့် အတွေးမျိုးပါ။ ဒါပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ကို ပြောပါစို့ ။ KB ဆိုတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အသစ် ဖြစ်တည်လာတဲ့ အချိန်ကစလို့ အုပ်ချုပ်သူနဲ့ ဆရာမတွေ ကြား မသင့်မြတ်မှုလေးတွေက တစ်စ တစ်စ ကြီးထွားလာခဲ့တယ်။ စာသင်ခန်းမှာ ဆရာမ ထိုင်ခုံတွေ မထားရှိမှုတွေ။ ဆရာမ ရဲ့ သားသမီးဖြစ်လင့်ကစား ကျောင်းလခ ပြန်လည် ကောက်ခံမှုတွေက အချို့ဆရာမ များအား အခက်တွေ့စေခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ ဆရာမ Vidya ဟာ ကျောင်းသားတွေကို စာကူးခိုင်းနေတုန်း ခဏ နားနေမိခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီနေ့က သူမဟာ နာမကျန်းဖြစ်နေသော်လည်း တကယ် စေတနာပါပါ သင်ကြားနေခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူး က Vidya ကို အပြစ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ Vidya ရဲ့ မှတ်မိလွယ် သော သင်ကြားနည်းတွေက ရှေးရိုးဆန် လှကြောင်း / အင်တာနေရှင်နယ် မဆန်ကြောင်း ပြစ်တင်ပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ အချေအတင်ဖြစ်ပြီး မကြာမီ Vidya ဆီ အလုပ်ထုတ်စာ ရောက်လာခဲ့တယ်။ အကြောင်းပြချက် က ဆရာမအရည်အသွေး မပြည့်မီတဲ့ အတွက်ပါတဲ့ ဒီစာဟာ Vidya အတွက် စိတ်ထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ ယခင်ကတည်းက နှလုံးရောဂါ အခံရှိသူမို့ Shock ပါရသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမှာတော့ ဆရာမ Jyoti ကပဲ ကူညီစောင့်ရှောက်ခဲ့ရပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလဲ Vidya ရဲ့ သမီးငယ် ရယ် ခြေမသန်ခဲ့တဲ့ တွန်းလှည်းပေါ်က ခင်ပွန်းရယ် က ဆုတောင်းပေးရုံသာ တတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါတွေဟာ တချို့ဆရာမတွေရဲ့ အခြေခံ ဘဝတွေပါ။စာသင်လာကြတဲ့ ကလေးတွေကို ပြုံးပြတဲ့အခိုက်မှာမိသားစု ပြဿနာတွေကို သူတို့ခမျာ ခေါက်ရိုးချိုး ထားတတ်ကြပါတယ်။ အဆင်မပြေပေမယ့် အဆင်ပြေပြေ နေခဲ့ကြတယ်။ ဒါ့အတွက် ဆရာ / ဆရာမတွေ မည်သည်များ ပြန်လည် ရရှိခဲ့ပါသလဲ။ ချမ်းသာလောက်တဲ့ ငွေကြေးလား။ တပည့်တွေ မမေ့ကြတဲ့ ပြန်လည်သတိရမှု မျိုးလား။ လေးစားမှုတရားလား။ ဒီဇာတ်ကားဟာ အတွေးပေါင်းများစွာနဲ့ပါ။ ဆရာမတွေအတွက်ရော တပည့် ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး အတွက်တစ်ခါတည်းပစ်လိုက်တဲ့ ခဲလုံးလေးပါ။ အခုလည်း ဆရာမ Vidya ရဲ့ အလုပ်ထုတ်ခံရမှုက မီဒီယာထက်မှာပဲ ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။ 28 နှစ်ကျော် လုပ်သက်ရှိတဲ့ Vidya ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ နဲ့ တပည့်တွေက ဆရာမအပေါ် ပြန်သိတတ်ပုံတွေကလည်း တမျိုးလေး ချစ်စရာကောင်းနေပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အိန္ဒိယပညာရေးအပေါ် မေးခွန်းထုတ်လာမှုတွေကြားမှာ Vidya နဲ့ Jyoti တို့ အတူလက်တွဲပြီး ဖြေရှင်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဆရာမတစ်ယောက်ရဲ့ ပြင်ပ ဗဟုသုတ ပြည့်ဝမှု / အရည်အချင်း ပြည့်စုံနေမှု ကို လည်း သက်သေပြဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကား ရဲ့ ပြင်ပဗဟုသုတ စမ်းသပ်ပုံတွေကလည်း စိတ်ကူးဆန်းလှပါတယ်။ ” ဒလိုင်းလားမား ရဲ့ နာမည်အဓိပါ္ပယ်” “Yahoo ရဲ့ အရှည်ကောက် ” ” လွတ်လပ်ရေး သီချင်းအကြောင်း ” အစရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေပါ။ဇာတ်ကားကြည့်ရင်း ဗဟုသုတလည်း ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒိုင်ယာလော့တွေကလည်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ ထိမိစေခဲ့တာပါပဲ။ ” မင်းတို့ကို ABC သင်ပေးတဲ့ ဆရာမ နာမည်တွေ မှတ်မိကြပါရဲ့လား ” ဒီ ဒိုင်ယာလော့ဟာ အများကြီး တည်ဆောက်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အများကြီး တွေးမိစေခဲ့တယ်။ မင်းသားဆိုလို့လည်း အဓိက မရှိ။ မင်းသမီးနေရာက ဆိုလို့လည်း နှင်းဆီပန်းနီနီနဲ့ ဆရာမ လည်း မဟုတ်ခဲ့။ “ငွေသော်တာ ရောင်ခြည် ” သီချင်းဆိုမယ့် သူလည်း မရှိခဲ့။ ဒါဆို ဒီဇာတ်ကား ကြည့်ရင်း ဘာရမလဲ။ အဓိက ကတော့ “ကျင့်ဝတ်နဲ့ လောဘတရားတွေ အကြောင်း ” ။ ” အိန္ဒိယ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း စနစ်တွေ ” ” ဆရာ တပည့် လေးစားမှုတွေ ” ” ဆရာစစ် ဆရာမှန်တစ်ယောက် ရဲ့ ဂုဏ်ဒြပ် တရား တွေ ” ကိုပဲ သိမြင်ရရှိစေမှာပါ။ #အကယ်၍ ဒါတွေမရခဲ့ရင်တောင် ငယ်စဉ်ဘဝက ဆရာ / ဆရာမ တစ်ယောက်ကို တော့ သတိရစေမှာတော့ အမှန်ပင် ဖြစ်ပါကြောင်း ။
ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့် ကားလေးကတော့ Chasing လို့ အမည်ရပါတယ် ညတစ်ညမှာပဲ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ပြသာနာပေါင်းများစွာကို CEO တစ်ယောက်နဲ့ စုံထောက်တစ်ယောက်က တစ်ဖွဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေက တစ်ဖွဲ့ အပြိုင်ပုံဖော်ပေးထားတဲ့ Comedy အသားပေး Action ဇာတ်လမ်းလေးပါ… ရယ်ရတဲ့အပြင် ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း လူမှုရေးပညာပေးလေးလည်း ယူတတ်ရင် ရမယ့်ကားလေးပါ အဓိက သရုပ်ဆောင် တွေ အနေနဲ့ကတော့ မင်းသားကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Kim Seung woo နဲ့ Kim Jung Tae သူတို့ရဲ့ အပြိုင် အထက်တန်းကျောင်းသားလေးတွေအဖြစ်Vixx အဖွဲ့မှ Hyuk အပါအဝင် Shin Kangwoo, Kim Min Gyoo နဲ့ Moon Yong Seok တို့လေးယောက်က ပါဝင်အားဖြည့်ထားပါတယ်
ဒီကားလေးကတော့ အီဂျစ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘာသာရေးဆူပူအုံကြွမှုအကြောင်းရိုက်ထားတဲ့ 2016 ထွက်ဇာတ်ကားလေးပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့.. 2011 ခုနှစ်မှာသမ္မတသက်တမ်းအနှစ်၃၀အထိရှိခဲ့တဲ့ အီဂျစ်တော်လှန်ပုံကန်မှုကြီးပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒါနဲ့2012 ခုနှစ်ထဲမှာပဲသမ္မတအသစ်တင်မြောက်ခဲ့ပါတယ် ဖြစ်ချင်တော့ သမ္မတက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ပါတီကဖြစ်နေပါတယ် အဲ့ဒီတော့2013ခုနှစ်ထဲရောက်တော့အီဂျစ်မှာရှိတဲ့လူသန်းပေါင်းများစွာကဆန္ဒပြကြတော့တာပေါ့ သုံးရက်အကြာမှာပဲ စစ်တပ်ကသမ္မတကိုဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ် အဲ့မှာစတွေ့တော့တာပဲ … အီဂျစ်ပြည်သူတွေကလဲဆန္ဒပြ စစ်တပ်ကလဲဖမ်းဆီးရေးလုပ် ရှိသမျှမွတ်စလင်မ်မှန်သမျှကလဲ စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ပေါ့ ……. ဂျာနယ်လစ်၂ယောက်ကနေစလိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းကဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မယ် ဘယ်လိုရသတွေခံစားရမယ် ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တဲ့သူတွေကြောင့်ကြားထဲကအပြစ်မဲ့လူသားတွေပါဘယ်လိုတောင်မြေစာပင်ဖြစ်ကြရမလဲဆိုတာကတော့…….
မင်းသားကြီး Kevin Costner ရဲ့ ဇာတ်ကြမ်းကားပါ။ IMDb (6.3/10) ရရှိထားပါတယ်။ ဓါတ်ပူးမင်းသား Ryan Reynolds ဟာ CIA အေးဂျင့်တစ်ယောက်ပါ…ကမ္ဘာနဲ့ချီ ဒုက္ခရောက်မယ့် ကိစ္စတစ်ခုမှာ ဝင်ရောက်ကယ်တင်ရင်း မအောင်မြင်ဘဲ ဂန့်သွားပါတယ်….အဲ့ဒီမပြီးပြတ်သေးတဲ့ကိစ္စကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ သူ့ရဲ့ဦးနှောက်ထဲက မှတ်ဉာဏ်တွေကို လူကြမ်းကြီး Kevin Costner ထဲကို ကော်ပီကူး ရွှေ့ပြောင်းပါတယ်….။ အဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စကြီးအောင်မြင်သွားမလား…ကမ္ဘာနဲ့ချီဒုက္ခရောက်မယ့်ကိစ္စကြီးရော အောင်မြင်သွားမလား….လူကြမ်းကြီးရဲ့နှလုံးသားရော နူးညံ့သွားမလားဆိုတာ ရင်တမမကြည့်ရှုရမှာပါ။ Spoil လုပ်ရရင် လူကြမ်းကြီးရဲ့ နှလုံးသားကတော့ မင်းသမီး Gal Gadot (Wonder Woman ) ကြောင့် သေချာပေါက် အရည်ပျော်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်…:P ။
ရဲဌာနကတစ်ယောက်အသတ်ခံရမှုနဲ့ပက်သက်ပြီးအမှုပြန်လိုက်တဲ့ကားလေးပါ ပြည့်တန်ဆာအိမ်ကိုခဏခဏသွားပြီးတစ်ရက်မှာအသတ်ခံလိုက်ရပါတယ် သတ်တဲ့တရားခံကိုလဲမသိလိုက်ရဘဲအမှုပိတ်လိုက်ရတယ် အဲံ့ဒါကိုတစ်နှစ်ကအမှုလိုက်ရာပြသနာရှိခဲ့တဲ့တက်ဒက်ခ်ကဘာကြောင့်အသတ်ခံတယ်ဆိုတာသိလိုအမှုပြန်ဖွင့်လိုက်ပါတယ် BDSMတွေကိုအသားပေးရေးတဲ့စာရေးဆရာကသတ်တယ်လို့ထင်လို့အမှုကိုပြန်လိုက်ပါတယ် စာရေးဆရာနဲ့အသတ်ခံရတဲ့ရဲကအတူတူအဲ့ပြည့်တန်ဆာအိမ်ကိုသွားနေကြတာပါ စာရေးဆရာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာဟာ သူတို့ရဲဌာနကတစ်ယောက်သေတာနဲ့တူနေလို့စာရေးဆရာကိုခေါ်ပြီးစစ်ပါတယ် ခေါ်ပြီးစစ်တဲ့အချိန်မှာဘာမှမထူးခြားခဲ့ပါဘူး ရဲတွေနဲ့လူသတ်သမားကိုယ်တိုင်ပဲသိတဲ့ဒီလိုအချက်အလက်ကို စာရေးဆရာကဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲလိမ်မှာပေါ့ မုသားဖော်စက်နဲ့လဲစစ်တယ်ဒါပေမယ့်မထူးခြားပါဘူး သူများကိုသတ်ခိုင်းမှာပေါ့ အဲ့ဒါလဲစစ်ပါတယ် သူမခိုင်းခဲ့ပါဘူး ဒါဆိုအဲ့ရဲကိုဘယ်သူသတ်တာလဲနည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ် အဲ့တော့တက်ဒက်ခ်ဟာစာရေးဆရာရဲ့အိမ်ကိုစောင့်ကြည်တော့တာပဲ အဲ့မှာအခြားပက်သက်တဲ့သူတွေကိုတွေ့တယ် စာရေးဆရာရဲ့ကောင်မလေး ဒီအမှုကိုအရင်ကစုံစမ်းတဲ့ရဲချုပ်အာဒမ်တွေ့တယ် အိမ်မှာအမြဲအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့စာရေးဆရာရဲ့ကောင်မလေးသတ်တာလား ရဲချုပ်ကပဲသတ်တာလားဆိုတာသူသိအောင်လိုက်စုံစမ်းတယ် လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်စုံးစမ်းပြီးနောက်ဆုံးကောင်မလေးကိုခြိမ်းခြောက်အကြပ်ကိုင်ပြီးစာရေးဆရာလူသတ်ဆိုတာဝန်ခံခဲ့တယ် သူသတ်ပါတယ်လို့သတင်းရှာရှင်းလင်းပွဲလဲလုပ်ပြီးရောစာရေးဆရာကမှုခင်းဖြစ်နေချိန်မှာခရီးထွက်နေပါတယ် ဒါဆိုဘယ်သူသတ်တာပါလဲ သိချင်ရင်ဇာတ်လမ်းလေးကိုကြည့်လိုက်ပါလို့ပြောပါရစေ IMDB rating 5.1ရထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ
Day Lights End (2016)
နှစ်တွေက တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုက်စားပြီး ကမ္ဘာကြီးကို ပျက်စီးမှုတွေနဲ့လူသားတွေကို ဆာလောင်နေတဲ့ အရိုင်းအစိုင်း သားရဲများ အဖြစ်ပြောင်းလဲ သွားရာမှ ရည်ရွယ်ချက်မဲ့ လက်စားချေလိုတဲ့ လူတစ်စုက အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုတွေများ ကြိုးစားရှင်သန် ရမလဲ သွေးဆာနေတဲ့ အရိုင်းအစိုင်းကောင်တွေကို ဘယ်လိုများရင်ဆိုက်တိုက်ခိုက်ကြမလဲကို ပရိတ်သတ်ကြီးက ဆက်လက်ဒေါင်းယူ ရှူ စားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်
အိပ်နေရင်းနဲ့အိပ်မက်ထဲမှာ သွက်ချာပါဒဖြစ်ပြီး လှုပ်ရှားမရအသံထွက်မရဖြစ်ဖူးပါသလား လူတိုင်းဘဝမှာတစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့ဖြစ်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ် တစ်ချို့ဆို လှုပ်ရှားမရဖြစ်နေတုန်းမှာ တစ်စုံတစ်ခုကိုပါမြင်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအရာဟာစုန်းမတစ်ယောက်ဆိုရင်သင်ယုံပါသလား မယုံကြည်တဲ့လူတွေကတော့ဘာမှဆက်မဖြစ်တတ်ပေမယ့် ယုံကြည်သွားတဲ့လူတွေမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်တတ်သလဲဆိုတာကိုရိုက် ကူးထားတဲ့horrorဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။ ကျန်းမာရေးကောင်းနေတဲ့လူတော်တော်များများဟာအိပ်နေရင်းသေဆုံးသွားတတ်တာကိုကြားဖူးကြမှာပါ။ တကယ်ပဲဒီဇာတ်ကားထဲအတိုင်းလားဆိုတာကို CMပရိသတ်ကြီးဒီဇာတ်ကားလေးကိုကြည့်ရှုရင်း ဆုံးဖြတ်ကြည့်ကြပါ
နေ့စဉ်ဓူဝ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ လူ့ဘဝကြီးထဲမှာ အောင်မြင်သောဘဝကိုရရှိဖို့ အခက်အခဲမျိုးစုံကို ဖြတ်သန်းနေရပါတယ်။မအောင်မြင်ခင်မှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားဖို့ မိဘနဲ့ မိမိရဲ့ အရင်းအနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အားပေးကူညီမှုတွေကို လိုအပ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ ကူညီမှုသာမပါရင် ကျော်ဖြတ်ဖို့ တော်တော်လေးပင်ပန်းခက်ခဲမှာပါ။ မိတ်ဆွေကောင်းတွေရဲ့ အကြံဉာဏ်တွေက ကျွန်တော့်တို့ရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းရမယ့် ဘဝအတွက်တော့ အကောင်းဆုံးခွန်အားပါပဲ။ Kaira (Alia Bhatt) က အရည်အချင်းရှိတဲ့ Cinematographer တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ဘဝကို ဒီထက်အောင်မြင်မှုရဖို့ကြိုးစားနေသူပါ။ဒါပေမဲ့ နှလုံးသားရေးမှာတော့ ကံမကောင်းသေးပါဘူး။ သူမနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အချစ်စစ်ကိုရှာဖွေနေတုန်းမှာပဲ အသည်းကွဲခံလိုက်ရပါတယ်။ Goa မှာရှိတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကြော်ငြာရိုက်ဖို့အတွက် မွေးရက်မြေကို ပြန်ဖို့ဖြစ်လာသောအခါ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး ရည်မှန်းချက်ပျောက်နေတဲ့ Kaira တစ်ယောက် စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ Dr. Jehangir Khan (Shah Rukh Khan) ရဲ့ ဟောပြောမှုကိုနားထောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူမရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ စိတ်ပျက်မှုကိုပပျောက်ဖို့အတွက် Dr.Jug နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ပုံမှန်သမာရိုးကျမဟုတ်တဲ့ ကုသမှုတွေနဲ့ Kiara ရဲ့ အတိတ်ဘဝ၊လက်ရှိကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းပေးတဲ့အခါ
Death Noteဆိုရင်တော့မသိသူမရှိပါဘူး။ သေမင်းရဲ့စာအုပ်ထဲမှာကိုယ်သတ်ချင်တဲ့သူရဲ့နာမည်နဲ့သေရတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုရေးလိုက်ရုံနဲ့ ထိုသူရုတ်တရတ်သေဆုံးသွားရတဲ့စာအုပ်လေးကိုအခြေခံထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ။ ယခင်ထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့ကားတွေရဲ့နောက်ဆယ်နှစ်ကိုအစပြုပြီးဒီကားလေးကိုဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ထားတာပါ။ လူ့လောကကိုအနောက်ထပ်Death note၆အုပ်ပို့ပြီးတော့Shinigami ကကီရာရဲ့စာအုပ်ကိုကိုင်ဆိုင်သူကိုရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၆ခုနှစ်လူ့လောကမှာဆိုင်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေကြီးစိုးနေချိန်မှာပဲကမ္ဘာတဝန်းမှာကီရာအသစ်ပေါ်ထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာလတွေနဲ့အတူလူသတ်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လူသတ်မှုတွေကိုခြေရာခံရင်း Death Note Task Forceဆိုတဲ့ဆုကုရာမိရှိမာဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့ကိုအယ်လ်(L)ရဲ့အမွေဆက်ခံသူယုဇာကီကထောက်ပံပေးထားတာပါ။အဖွဲ့ဟာလူသတ်မှုတွေကိုလိုက်လံစုံစမ်းရင်း ဆာကုရာအိုင်ဆိုသူပိုင်ဆိုင်တဲ့Death Noteစာအုပ်တခုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ပိုင်ရှင်ကိုနောက်ထပ်DeathNoteyပိုင်ရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဆိုင်ဘာအကြမ်းဖက်သမားယုကီရှိန်းကသတ်ခဲ့တာပါ။ ယုဇာကီနဲ့အဖွဲ့ဟာသူတို့ရရှိခဲ့တဲ့စာအုပ်ကိုပိုင်ဆိုင်သူသေမင်းဘီပိုကိုစစ်မေးတဲ့အခါမှာတော့ လူ့လောကမှာDeathNoteစာအုပ်၆အုပ်ရှိကြောင်းသိခဲ့ရတာပါ။ ရှိန်းကလည်းတဖက်မှာမီဆာအာမန်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးသူ့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကိုပြန်ဖော်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာဆိုင်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပဲရှိန်းတယောက်ဘယ်လိုတွေလုပ်သွားမလဲ။ ယုဇာကီနဲ့အဖွဲ့ကရောဘယ်လိုတွေရင်ဆိုင်သွားမလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။
ကဲ ဒီတစ်ခါတော့ ခပ်လန်းလန်း အက်ရှင်ကားတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်တယ် ဇာတ်ကားက သစ္စာတရား က ဘာလဲဆိုတာကို ပြထားတယ် ဇာတ်ကား အကျဉ်းက သိန်းထောင်ချီတန်တဲ့ လည်ဆွဲ အတွက် အခန်းဖော် သူယ်ချင်း က သစ္စာဖောက်သွားတာကို ရိုက်ပြထားတာ ဖြစ်တယ် ကဲ ဒေါင်းပြီးသာကြည့်စေချင်တယ်
ငါ မုဒိန်းကျင်ခံလိုက်ရတယ် ဘာ… နင် ရဲကိုအကြောင်းကြားပြီးသွားပြီလား ဘာလို့ အကြောင်းကြားရမှာလဲ ” ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးလောကမှာ လေးစားမှုအများ ဆုံးရယူထားနိုင်ခဲ့သောအနုပညာ ဖန်တီးမှု ဒီဇာတ်ကား ရဲ့ အမျိုးအစားက Crime ၊ Drama Thriller ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ထွက်ရှိ ထားခဲ့ပြီးတော့ တစ်ကား ကြာချိန် ၁၃၀ မိနစ် ရှိပါတယ်။ IMDb Rating 7.2 ၊ Rotten Tomatoes average rating 8/10 ၊ Metacritic 89/100 ရရှိထားပါတယ်။ ဘာလို့ ဒီလောက် Rating တွေမြင့်နေရတာလဲ ဆိုတာကို ဇာတ်ကားကြည့်ပြီးမှ ဝေဖန်လိုက်ပါ။ ဒီဇာတ်ကား က ပြင်သစ်စကားပြော ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားက Phillippe Djian ရဲ့ Oh ဆိုတယ့် ဝတ္တုကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတယ့် ကားပါ။ ဒီဝတ္တုက ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားပြီး အမျိုးသားစာပေဆုကိုရရှိခဲ့တယ့် ဝတ္ထုပါ။ ဝတ္တု မှာကတည်းက အရှိန်အဝါကြီးခဲ့တာပါ။ ဒီဝတ္တု ကို ဒါရိုက်တာ Paul Verhoeven က ပြန်လည်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဒီဒါရိုက်တာက ၂၀၀၆ ခုနှစ်တုန်းက Black Book ဇာတ်ကားရိုက်ကူး ခဲ့ပြီး ပထမဆုံးပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတယ့် Masterpiece ပါဘဲ။ ဒီရုပ်ရှင်ကားက ရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲတော်တော်များများ ကို ကြီးကြီး မားမားဝင်ရောက်ချယ်လှဲခဲ့ပါသေးတယ် Cannes Flim Festival ၊ Academy Awards ၊ Cesar Award တို့လို သြဇာကြီးမားတယ့် ဆုပေးပွဲ တွေ အပါအဝင် အမေရိက ၊ ဥရောပတစ်လွှား က ရုပ်ရှင် ဆုပေးပွဲပေါင်း ၄၀ မှာ ဆုအားလုံး ပေါင်း ၇၈ ခုထိ ဇကာတင်စာရင်း ဝင်ထားခဲ့ပြီး ဆု ၃၅ ဆု ကို ရရှိထားခဲ့ပါတယ်။ ဝေဖန်ရေး စာရင်း ၄၉ ခုမှာ ထိပ်ဆုံး ၁၀ နေရာထဲကို ဝင် ရောက်နေရာယူထားခဲ့ပါတယ်။ ဆုတွေ ကြည့် ရုံနဲ့ရှိန်ပြီး အဖျားပါတက်သွားလောက်တယ်။ အဓီက ကတော့ ဝေဖန်ရေးဆရာတွေ ပါးစပ်ဖျား မှာ တသသဖြစ်သွားစေနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာပါဘဲ။ အဓိက သရုပ်ဆောင်တွေ က မင်းသမီးကြီး lsabelle Huppert ၊ မင်းသား Laurent Lafitte ၊ Anne Consigny ၊ Charles Berling တို့အပြင်တစ်ခြားဇာတ်ဆောင် တွေ ပါပါတယ်။အဓီက ကတော့ မင်းသမီး Huppert ရဲ့ဇာတ်ကားဆိုလဲ မမှားပါဘူး ၊ဒီ ကားမှာ သူက main role အနေနဲ့သရုပ်ဆောင် ထားပြီး အနုပညာဖန်တီး အရသာစစ်တွေ ကိုချပြလိုက်ထားပါတယ်။ဒီတော့ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အဓီက ပဲ့ကိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ့် မင်း သမီးကြီအကြောင်းကိုနည်းနည်းလောက်ပြောပြ ပေးပါမယ်။ ဒီမင်းသမီးကြီးက ပြင်သစ်နွယ်ဖွားရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်ပြီး အသက် ၆၄ နှစ်ရှိပြီးဖြစ် ပြီး သူမပထမဆုံးရုပ်ရှင် ကို ၁၉၇၁ မှာထွက်ရှိ ခဲ့ပြီး များမကြာမီမှာဘဲ ထိပ်တန်း သရုပ်ဆောင် စာရင်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ သူမရိုက်ကူးခဲ့တယ့် ဇာတ်လမ်းတွေ က ဒီဇာတ်ကားလို ဘဲ လူ့အသိုင်းဝိုင်းထဲမှာ ပုန်းအောင်းနေတက် တယ့် စန်းကျယ်တယ့် လူ့သဘာဝတွေ အကြောင်းကို ဘဲရိုက်ကူးထားတယ့် ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ psycho ဆန်ပြီး လိင်မှုကိစ္စတွေ နဲ့ ဆက်နွယ်နေတယ့်ကားတွေ ပေါ့။ သူမသရုပ် ဆောင်ထားတယ့် ဇာတ်ကားတွေက အပြင်လော ကမှာ လူတွေ စပ်စုချင်ကြပြီး အတင်းပြောလို့ ကောင်းတယ့် ဇာတ်ကောင်မျိုးတွေပါ။ သူမဟာကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ဆု အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု ၂ ဆုရရှိထားပြီး တစ်ခြားဆုတွေ တော်တော်များများလဲရရှိထားပါတယ်။ သူမမှာ သားသမီး ၃ ယောက်ရှိပြီး တစ်ယောက်က မင်းသမီးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ ဒါကတော့ ဇာတ်ကားနောက်ခံသမိုင်းကြောင်း နဲ့ဆက်စပ်တာတွေ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဇာတ်လမ်းပိုင်းကို သွားပါမယ်။ဒီဇာတ်ကား က လူတွေ ကို super heros ဇာတ်လမ်းမျိုးတို့ Action ဇာတ်လမ်းမျိုးတို့လိုလူအများစုကို အာရုံစိုက်စရာဖြစ်နေချင်မှဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် ၊ ဒီဇာတ်ကားအမျိုးအစားက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ကိုတွေ အေးဆေးကြည့်ပြီး ထဲထဲဝင်ဝင် ခံစား တက်တယ့် သူမျိုးတွေ အတွက်ကြည့်သင့် တယ့် ဇာတ်ကားမျိုးပါ။ တစ်နည်းပြောရရင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ကို pro ဆန်ဆန်ကြည့် တက်တယ့် သူတွေ အတွက်ပါ။ဒီလို ဇာတ်ကား မျိုးကို ၁၈+ ဆန်တယ့် လို့ခေါ်တာတက် ရုပ်ရှင်ကို အချိန်ဖြုန်းဖို့ ကြည့်တယ့် သူတွေ အတွက် မဟုတ်ဘူး လို့ဆိုရင်ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဇာတ်ကားက Crime လို့ပြောတာထက် လူတွေ ရဲ့တဏာရမက် အာသီသ ကိုခေါ်ထုတ် ဆွဲခေါ်ပြီး စင်ပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ့် ဇာတ်လမ်း မျိုးပါ။ ဒီဇာတ်ကားကို အပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့ လိင်ကိစ္စ အကြောင်းလို့ထင်ရနိုင်ပါတယ်။ လူ့တွေ ရဲ့ထူးဆန်းတယ့် တပ်မက်မှု တွေ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြသာနာတွေ ၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေ၊ လစ်လျူ မှုတွေ ၊ အသိုင်းဝိုင်းတစ်ခုရဲ့ဆက်ဆံ ရေးတွေ ကို ထဲထဲဝင်ဝင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရိုက်ကူးထားတယ့် ကားပါ။ ဇာတ်လမ်းတည်းဆောက်ထားပုံက တစ်ချို့ အခန်းတွေ မှာတစ်ချက်တစ်ချက် လန့်သွားစေပြီး၊ မင်းသမီးအပေါ်သနားစိတ် ၊ သူ့မရဲ့ တပ်မက်မှု အာသီသ တွေ ၊ ခန့်မှန်းလို့မရတယ့် လူ တွေ စိတ်သဘောထားတွေ ၊ ဆန်းကျယ်တယ့် လူ့စိတ်သဘာ၀ ၊ မြုပ်ကွက်တွေ နဲ့ တည် ဆောက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ချင်းစီမှာ မတူညီတယ့် စိတ်နေအခြေနေနဲ့ သူ့တို့ရဲ့ဖုံးကွယ်နေထားအနက်ရောင် စိတ်အခြေနေတွေ ပိုင်ဆိုင် ထားတယ့် ဝတ္တုဖွဲ့ စည်းထားမှုက လေးစား လောက်စရာပါ။ ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲ သူတို့ဖုံးကွယ်ထားတယ့် အနက်ရောင် စိတ် အခြေနေတစ်ခု စီရှိကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအခြေနေကို အများစုက တစ်ကိုယ်တည်းရှိနေတယ့် အခါ မျိုးမှာ ဖော်ထုတ်ပြတက်ကြပါတယ်။ ပြင်သစ်စကားပြောဇာတ်လမ်းဖြစ်လို့ အင်္ဂလိပ် အသံထွက်ထက်စာရင် ဇာတ်ကားရဲ့အရသာကို အပြည့်အဝမခံစား ရဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရာမြောက်တယ့် ဒါရိုက်တာနဲ့ ဆရာကျတယ့် သရုပ်ဆောင်ချက်တွေ နဲ့ ချပြသွားတယ့် မင်းသမီး နဲ့ တစ်ခြားသရုပ် ဆောင်တွေ ကြောင့် ဇာတ်လမ်းအရသာပျက် မသွားခဲ့ပါဘူး။ စရိုက်တစ်မျိုးစီပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ် ဇာတ်ဆောင်တွေ က ခံစားမှု ရသတစ်မျိုး စီပေးနေပါတယ်။ တစ်ချို့ သူတွေ အတွက် ဒီထဲမှာပါတယ် ဇာတ်ကွက်တွေ က မဖြစ်နိုင် စရာလို့ ယူဆနိုင်ပေမယ့် အပြင်လောကမှာ တစ်ကယ်ရှိနေပါတယ်။ ပိန်ပိန်ပါးပါး အသက် ၅၀ ကျော် အိမ်ထောင်ကွဲ ၊ လူလွတ် ၊ဂိမ်းကုမ္မဏီ ပိုင်ရှင် တဏာ ရမက်ပြင်းထန်ပြီး စိတ်ဒဏ်ရာရနေတယ့် အမျိုးသမီး မီရှယ်၊ သူ့ကိုကြည့်ပြီး သနားစိတ် ဖြစ်မိသလို အားမရတာတွေ ငါသာ သူ့နေရာမှာဆို ဘယ်လိုလုပ်မလိုက်မှာ ဆိုပြီး မချင့်မရဲ့ဖြစ်မိပါတယ် ၊ သန့်သန့်ပြန့် ပြန့်ရုပ်ရည်နဲ့ ဘာသာရေးလိုက်စားတယ့် အမျိုးသမီးနဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ကြွေလောက်တယ့် တည်ကြည်တယ့်အနေအထိုင် ခန့်ညားမှုတွေ နဲ့ အတူ ထင်မှတ်မထားလောက်တယ့် စရာ စရိုက်ရှိတယ့် ပတ်ထရစ် သူ့စိတ်အခြေနေက ထူးဆန်းတယ် တစ်ချို့ဇာတ်ကွက်တွေ မှာ ဗိုက်အရမ်းဆာနေတယ့်အချိန် မျော်လင့်ချက် အပြည့်နဲ့ ထမင်းဆိုင်သွားခါမှာ အားလုံးကုန် သွားပြီလို့ပြောခံလိုက်ရတယ့် ခံစားချက်ကို ကို ပေးအောင်လုပ်နိုင်တယ့် သူ ၊ မီရှဲ အမေဖြစ် ပြီး သမိုင်းမှာ လူတွေ မမေ့နိုင်လောက်စရာ လူသတ်မှုကိုလုပ်သွားတယ့် အမျိုးသားရဲ့ မိန်းမ အသက်ကြီးပိုင်းအရွှယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတယ် တဏှာအာသီသ ကို ဖြစ်ချင်တယ့်အတိုင်း လုပ်ပြီး တစ်ခြားသူအမြင်ထက် ကိုယ်ပျော်ဖို့ သာအရေကြီးတယ် လို့ ခံယူထားတယ့် အီရမ် ၊ သူကဇာတ်ကောင်စရိုက်ကိုကြည့်ပြီး အပြစ်အရင်ဆုံးပြောကြလိမ့်မယ်ဆိုတာ သိပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် သူနေရာသူဘာလို့ဒီလိုလုပ် တာလဲ ဆိုတယ့် သူ့ဘက်ကဖြစ်နေတယ့် စိတ် လေးကိုဝင်ကြည့်ပြီး နားလည်းနိုင်မှပြောတာ ပိုကောင်းပါတယ် အသက်ကြီးသူတွေနဲ့ လိင်ကိစ္စ သက်ဆိုင်မှုမရှိဘူး လို့ မြင်နေကြတယ့် လူအဖွဲ့အစည်းအတွက်တော့ အငြင်းပွားစရာပါဘဲ ၊ေနာက်တစ်ယောက်ထပ်ပြောချင်တာက မီရှဲ ရဲ့သား ကြောင်တောင်တောင် နှုံတုံတုံ ပုံစံနဲ့ အလုပ်အကိုင်အတည်တကျမရှိဘဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ကြိုက်ပြီး ဘာမှမမြင်တော့တယ့် သောက်ငနွား ဗင်ဆင့် ၊ သူ့နဲ့ကြိုက်တယ့် မိန်းကလေးက လူဖြူ သူလဲ လူဖြူ သူကောင်မလေးမွေးလာတော့ ကပ္ပလီလေး အားလုံးကနင့်သာမဟုတ်ဘူးလို့ ဝိုင်းပြော သူလဲမဖြစ်နိုင်မှန်းသိပေမယ့် ဇွတ် သူ့သားဆိုပြီး စရိုက်ဆန်တယ့် အမျိုးသမီးတစ် ယောက် ကြောင့် ဘာကိုမှမမြင်တော့တယ် ဇာတ် ကောင်ကို ကြည့်ပြီး သူ့ကိုမြင်မီတိုင်း ငနွားကြီး ငနွားကြီးလို့စိတ်ထဲမှာ မရိုးမရွှဖြစ်လာပါတယ် ၊ သူ ပဲ သရုပ်ဆောင်ကောင်းလို့လား တော့မသိပါဘူး ၊ သူ့နေရာက ဝင်ကြည့်မယ် ဆိုရင် သူ့ကိုနားလည်ပေးလို့ရပါတယ် အချစ် စစ်လို့ခေါ်မလား ဘာလားပေါ့ ၊ နောက်ဆုံးတစ် ယောက်ကို မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ မီရှဲ ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်း အလုပ်လဲ တူတူ လုပ်ကြတယ် ခင်မင်လာတာလဲ တော်တော်ကြာ နေပြီး စိတ်ကောင်းအရှိဆုံး အမျိုးသမီးအန်နာ၊ သူကတော့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပျော်ပျော်နေပြီး သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက် ဒါပေမယ့် ကံကြမ္မာက သူ့ကိုလွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မပေးပါဘူး၊ သူ့ယောကျာ်း ဖောက်ပြန်နေတာကို ရိပ်မိ ပြီး နောက်ဆုံးသူ့ယောကျာ်ဖောက်ပြန် နေတယ့်သူ့ကို သိလိုက်ချိန်မှာ သာမန်သူဆို ရင် နင်လာငါလား တစ်ပွဲတစ်လမ်းတော့လုပ်မိ မှာပါ ၊ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ခွင့်လွှတ်နိုင်မှု လား စိတ်ကောင်းရှိတာလား တော့မသိဘူး အံ့သြ လောက်စရာကောင်းတယ့် စိတ်ဓာတ်ကို နောက် ဆုံးပိုင်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားက လူတွေ ရဲ့ဆန်းကျယ်တယ့် လိင်စိတ်ခံစားမှုတွေ ၊ သူတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေ ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ရှိ တယ့် လူတွေ ရဲ့ဆန်ပြားတယ့် စိတ်အာသီသ တွေ ကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဒီဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကို ခြုံကြည့်လိုက်ရင် ဇာတ်ကားထဲမှာပါတယ့် အမျိုးသားအားလုံးက တစ်ယောက်တစ်မျိုး မကောင်းဘူးဆိုပြီးညွှန်းဆိုနေသလို ပါဘဲ။ အဲ့ဒါတော့ မမျှတဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားထဲ က ဇာတ်ကွက်တိုင်းကို IQ level ၁၂၀ လောက် ခဏထားပြီးကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် လူတွေ မှာဒီလိုစိတ်မျိုးမရှိကြ ဘူးဆိုရင် pron sites တွေမှာ Ugly ၊ Granny child ၊ Slave ၊ Animals တို့လို categories တွေရှိနေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော် H.L.K ပါ။
IMDb (6.7/10) နဲ့ Asian wiki Rating (94) ရရှိထာတဲ့ဂျပန်ဇာတ်ကားလေးပါ။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့….. ဆာယာက (Mitsuki Takahata) ဟာ သာမန်ရုံးဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အချစ်ရေးရော အလုပ်မှာပါ အဆင်မပြေသူတစ်ယောက်ပေါ့… တစ်ညတော့အိဆုကိ(Takanori Iwata) ကို အိမ်ရှေ့မှာတွေ့လိုက်ရပြီး အတူတူနေဖို့ အကြောင်းဖြစ်လာတယ်… အိဆုကိဟာ ဆာယာကကို ဟင်းချက်သင်ပေး အပင်တွေအကြောင်းရှင်းပြရင်း ရင်းနှီးခဲ့ပေမယ့် တကယ်တော့အိဆုကိမှာ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့လျို့ဝှက်ချက်ရှိပါတယ်… လျို့ဝှက်ချက်က ဘာဖြစ်မလဲ?? ဆာယာကနဲ့အိဆုကိတို့နှစ်ယောက် တကယ်ရေစက်ဆုံနိုင်မလားဆိုတာတော့ ဇာတ်လမ်းလေးကို ကြည့်ပြီး အဖြေရှာလိုက်ကြပါတော့…။
ဒီဇာတ်လမ်းဟာ ဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်လမ်းတွေရဲ့ မှော်လောကထဲမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပါပဲ။ ဒါပေမယ် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကာလဟာ ၁၉၂၆ ဖြစ်ပြီး ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး အဲဘတ်စ် ဒန်ဘယ်လ်ဒိုးရဲ့လူငယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကာလရဲ့ နာမည်ကြီးမှော်နက်ဆရာကတော့ ဟယ်ရီစာအုပ်ထဲမှာ နာမည်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဂရင်ဒီဝေါလ်ပါ။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင်ကတော့ မှော်ပညာ နဲ့ မှော်သတ္တဗေဒ ပညာရှင် နျု စကန်မန်ဒါပါ(ဟယ်ရီတို့ ကာလမှာ နျုရဲ့စာအုပ်တွေဟာ ကျောင်းအတွက် ပြဌာန်းစာအုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ဟက်ဂရစ်လက်စွဲပေါ့)။ နျုဟာ လန်ဒန်ကနေ နယူးယောက်ကို မှော်သတ္တဝါဆန်းတွေ အပြည့်ပါတဲ့ လက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံးနဲ့ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ နယူးယောက်မှာ အဖြေရှာမရတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။ အမေရိကန်အခေါ် No-Maj (ဗြိတိန်အခေါ် မက်ဂယ်) မှော်ပညာမတတ်တဲ့ သာမာန်လူသားတစ်ဦးနဲ့ မတော်တဆအလွဲတွေ ဖြစ်ရင်း သူ့ရဲ့သေတ္တာထဲကနေ သတ္တဝါအချို့လွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါ တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အကြောင်းရင်းဟာ သူ့ကြောင့်လို့ သံသယဖြစ်စရာတွေပေါ်လာပြီး ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားရပါတော့တယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ ၅ ကားအထိ ဆက်ရိုက်ဖို့ သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာမို့ ဒီကားလေးကြည့်ပြီးရင် နောက်နှစ်တွေအတွက် ဆက်ပြီး စောင့်မျှော်ကြတာပေါ့ဗျာ။
ဒီဇာတ်ကားဟာ Force ပြီးလို့နောက်ငါးနှစ်ကြာမှ ထွက်ခဲ့တာဆိုပေမယ့် အောင်မြင်မှု့အနေနဲ့IMDB 6.5/10 နဲ့ RT90% အထိရရှိထား ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အက်ရှင်ခန်းတွေဟာ ဘောလီဝုဒ်ကားဆိုပေမယ့် ဟော်လီးဝုဒ်ကို တင်ဆက်ထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ အိန္ဒိယတွက် သူလျှိုလုပ်ပေးနေတယ့် RAW အေးဂျင့်တွေကို တစုံတယောက်ရဲ့ သတင်းပေးမှု့ကြောင့် တရုတ်အစိုးရက သိခဲ့ပြီး အေးဂျင့်တွေကို လိုက်လံနှိမ်နင်းပါတော့တယ့် ဒီအေးဂျင့်တွေထဲမှာ ရဲဝန်ထမ်း ရက်ရှ်ဗါဒန် ငယ်သူငယ်ချင်း ဟရေ့ရှ်လည်းပါဝင်နေပါတယ်။့ ဟရေ့ရှ်က သူ့သူငယ်ချင်းစီကို စာအုပ်တအုပ်ကနေတဆင့် သတင်းပေးကို ဖော်ထုတ်ပြီး အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာတော့ ရာရှ်ဗါဒန်အနေဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ ကိစ္စကို ကိုယ်တိုင်ဝင်ပါဖြေရှင်းဖို့ဖြစ်လာရပါတော့တယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာလည်း Mystery / Crime အမျိုးအစားဖြစ်သလို တကားလုံးကို လှည့်ကွက်အပြည့်နဲ့ အချိန်ပေးရတာ တန်တယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ လက်အလွတ်မခံပါနဲ့လို့ပဲ ထပ်ပြောချင်ပါတယ်။
အကြိုက်တွေ့ဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ရဲရဲကြီးအာမခံပါတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကတော့ဒေါင်းကြည့်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ကြပါလို့ပြောကြားရင်းကြည့်လိုက်ကြပါဦးလို့(ဇာတ်ကားအညွန်း နဲ့ ဘာသာပြန်ကတော့ ကိုစိုးထွေးပါ
အရမ်းကို ဘာသာရေး လုပ်ပြီး ရှေးရိုးစွဲကြီးတဲ့ အိမ်မှာ ဆာရူး ဆိုတဲ့ သမီးတစ်ယောက် ရှိတယ် သူက ပုံတုံးတယ် ရိုးတယ် အ တယ် သူ့ကို လူတိုင်းက အသုံးချလဲ သူခံတယ် အမြဲတမ်း မျက်နှာလေးကို ပြုံးပြုံးထားတယ်… သူက ဉာဏ်ကောင်းပြီး တော်ပေမဲ့ အိမ်က ပေးစားတဲ့ ယောင်္ကျားကို ယူရဖို့ပဲ စောင့်နေရတဲ့ သမီးကြီးပေါ့ သူ့အောက်က ညီမဖြစ်သူကတော့ ခေတ်ဆန်ပြီး ရည်းစားရှိတယ် India တွေ ထုံးစံ အတိုင်း အကြီး မင်္ဂလာဆောင်မှ အငယ်က မင်္ဂလာဆောင်ရတယ် ဒီတော့ ညီမ ဖြစ်သူကလဲ ယောင်္ကျားမရသေးတဲ့ ဆာရူး ကို အမြဲလိုလို နှိမ်နေခဲ့တယ်… ဆာရူး အိမ်က သက်မှတ်ထားတာကလဲ နိုင်ငံခြား ဘွဲ့ ၂ ခုလောက် အနည်းဆုံးရထားပြီး မျိုးရိုးမြင့်တဲ့ မိသားစု ကို သားမက်တော်ချင်တာ ဒါပေမဲ့ အတော်များများက ဆာရူးကို လာကြည့်ပြီး ပုံတုံးလွန်းလို့ ခေါင်းခါထွက်သွားတာ ၁၀ ယောက်ထက် မနည်းတော့ဘူး… ဒီလိုကံဆိုးနေတာ ဆာရူး တစ်ယောက်ပဲ ရှိမယ် ထင်ရတယ်… ဆာရူး တို့ ကွန်ဒိုတိုက်မှာ အခန်းငှားနေတဲ့ ဂျလေဘီ ဆန်ဆန် ကောင်လေး တစ်ယောက် ရှိတယ် တစ်ကိုယ်လုံး တက်တူးတွေနဲ့ အမြဲတမ်း ဘီယာလေး တမြမြ နဲ့ မူးနေတဲ့သူ သူ့အခန်းဆိုရင်လဲ ညတိုင်း မိန်းမပျက်တွေ ဝင်ထွက်နေတဲ့နေရာ နာမည်လေးကလဲ ဆိုးသေး လူသတ်မှုနဲ့ ထောင်က လွတ်လာသူ သူ့နာမည်က အင်ဒါ တဲ့ ရုပ်ချောပြီး ဗလ ခပ်တောင့်တောင့် နဲ့ ကောင်လေးပေါ့… တစ်ရက် ဆာရူး ရဲ့ အဖြစ်ကို အင်ဒါ မြင်သွားတယ် သနားသွားမိတယ် ဆာရူး အလုပ်လုပ်တဲ့ စာကြည့်တိုက်မယ် စာအုပ်တွေ သွားငှားပေါ့… အင်ဒါ ရဲ့ လက်ရှိရည်းစားကလဲ နာမည်ကြီးဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ တစ်ယောက် ဆိုတာ ဆာရူး သိတဲ့နောက်မှာ လူခြေတိတ်ချိန်လေး အင်ဒါ အခန်းကိုသွား အင်ဒါ ရည်းစားဆီမယ် သူမ ပုံစံကို ပြောင်းလဲပေးဖို့ အကူအညီတောင်းခဲ့တယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ မူးနေတဲ့ အင်ဒါ ရည်းစားရောက်လာ ရန်တွေဖြစ်ကြ အင်ဒါ ဒဏ်ရာ ရသွားလို့ ဆာရူးက ဆေးခန်းလိုက်ပို့ နဲ့ တိုက်ခန်းက လူတွေကတော့ ဒီကောင်လေး နဲ့ ကောင်မလေး ညားနေပြီဆိုပြီး ဆာရူးအဖေကြီးကို ချွန်တွန်းလုပ် ဟိုရှေးရိုးစွဲ အဖေကြီးက ဆာရူး ကို အိမ်က နှင်ထုတ်လိုက်တယ်… ဘ၀ မှာ မိသားစုကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ မရှိဖူးတဲ့ ဆာရူး တစ်ယောက် လေလွင့်ရတော့မယ့် အခြေအနေမှာ အင်ဒါက ဘေးနားက ကိုယ်ရံတော်လို မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးပြီး အစွဲကြီးတဲ့ ဆာရူး တို့ အဖေ ဘယ်လို ပြန်ခွင့်လွှတ်လာအောင် ကူညီမလဲ ဆာရူး ရဲ့ နဖူးစာ မှာပါတဲ့ ချစ်သူကရော အင်ဒါဖြစ်လာမှာလား ဆိုတာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါစို့…
The story ofaformer boxer who quits boxing followingafallout with the authorities over the underlying politics but goes on to coachafisherwoman to fulfill his dream through her. Thisi isasimultaneously shot Hindi version of the Tamil film Irudhi Suttru. Imdb rating 7.6/10 ရှိထားတဲ့ဘောလိဝုဒ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ။ အက်ရှင်ဒရာမာဇာတ်ကားဖြစ်သလို အားကစားအကြောင်းအခြေခံထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဝှေ့အားကစားအကြောင်းကိုရိုက်ထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ။ အနားယူလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့လက်ဝှေ့ကစားသမားဟောင်းတစ်ယောက်က အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ကို လက်ဝှေ့ပညာမှာထူးချွန်အောင်လေ့ကျင့်ပေးရင်းနဲ့ လက်ဝှေ့သမားတွေရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို အပြည့်အဝခံစားရမယ့်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ် လက်ဝှေ့ကားကြိုက်တတ်တဲ့CMပရိသတ်တွေကျေနပ်နိုင်ကြမယ့်ဇာတ်ကားလေးပါ။
mmbusticketIMDb (8.2)..Rotten Tomatoes (100%)အမျိုးသမီးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်..အခွင့်အရေးတွေကို ပညာသားပါပါထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားလို့ နာမည်ကြီးတဲ့Bollywood ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်ပြီး Rating တွေလဲကောင်းမွန်လှပါတယ်။ဇာတ်လမ်းကတော့…… မီနယ်အရိုရာ၊ ဖယ်လက်အ လီနဲ့ အန်ဒရီယာတို့ သုံးယောက် ဟာ ဒေလီတောင်ပိုင်းက လူကုံ ထံရပ်ကွက်တစ်ခုမှာ အိမ်ငှားနေ ကြပြီး လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ အလုပ်ဝင်နေကြသူတွေပါ။တစ်ညမှာ တော့ ရော့ခ်ဂီတပွဲကြည့်အပြီးမှာ ရာ့ဂျ်ဗီးရားဆိုသူက ညစာစားပွဲ ဖိတ်ကြားတဲ့အတွက် သွားခဲ့ကြပါ တယ်။ ရာ့ဂျ်ဗီးရားက ဒေလီတောင်ပိုင်းက အာဏာရှိနိုင်ငံရေး သမားရဲ့တူပါ။ ဒီလိုနဲ့ အပန်းဖြေအိမ်တစ်ခု မှာ မင်နယ်တို့ သုံးယောက်ရယ်၊ ရာ့ဂျ်ဗီးရားနဲ့ သူ့အပေါင်းအသင်း နှစ်ယောက်ရယ် စားကြသောက် ကြပြီး အခွင့်အရေးကို စောင့်နေ တဲ့ အမျိုးသားသုံးယောက်ဟာ ကောင်မလေးသုံးယောက်နဲ့ တစ် တွဲစီဖြစ်အောင် ကြံဖန်ခဲ့ကြပါ တယ်။ တကယ်တော့ မင်နယ်နဲ့ ရာ့ဂျ်ဗီးရားတို့ဟာ သာမန်မိတ် ဆွေအဆင့်သာ ခင်မင်ကြတာဖြစ် ပြီး ရာ့ဂျ်ဗီးရားက မင်နယ်ကို ဗလက္ကာရလုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာ ကြောင့် မင်နယ်က အနားက ပုလင်းကို ရိုက်ခွဲပြီး ရာ့ဂျ်ဗီးရားရဲ့ မျက်လုံးကို ထိုးခဲ့ပါတယ်။ မင်နယ်ရဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကလည်း ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားတာကို လက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။ရာ့ဂျ်ဗီးရားနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း တွေဟာ ဖြစ်ခဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကောင်မလေးသုံးယောက်ဆီကို ဖုန်းဆက်ပြီး ခြိမ်းခြောက်တာတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ မင်နယ်ဟာ ရဲဌာနကိုသွားပြီး ရာ့ဂျ်ဗီးရား နဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကို အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ရာ့ဂျ်ဗီးရားရဲ့ မိသားစု နောက်ခံအနေအထားကိုသိတဲ့ အမျိုးသမီးရဲအရာရှိဟာ မင်နယ်အမှုဖွင့်တာကို လက်မခံခဲ့ပါဘူး။ ရာ့ဂျ်ဗီးရားကလည်း ဦးလေးရဲ့ အာဏာပါဝါကိုသုံးပြီး အမှန်ကို အမှားဖြစ်အောင် ဖန်တီးကာ မင်နယ်တို့သုံးယောက်ကို မိန်းမပျက်တွေလို့ စွပ်စွဲပြီး မင်နယ်ကို အသက်ကိုရန်ရှာမှုနဲ့ တရားစွဲခဲ့ပါ တယ်။ အကယ်၍သာ အမှုရှုံးသွားခဲ့ရင် မင်နယ်ဟာ ထောင် ၁၀ နှစ်လောက် ကျခံရဖို့ရှိနေပါတယ်။စိတ်ကျရောဂါခံစားနေရတဲ့ အငြိမ်းစားရှေ့နေကြီး ဒီပက်ဆာဂေါလ်ဟာ မင်နယ်တို့သုံးယောက်ရဲ့ အိမ်နီးချင်းဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ ပြဿနာအစအဆုံးကို သိရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ရှေ့နေကြီးက သူ့ဇနီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီး ဒုက္ခတွေ့နေတဲ့ မိန်းကလေး သုံးယောက်ရဲ့အမှုကို လိုက်ဖို့ဆုံး ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။မိသားစုနောက်ခံအင်အားသုံးပြီး မတရားမှုလုပ်နေတဲ့ ရာ့ဂျ်ဗီးရားတို့အမှုပေါ်အောင် မစ္စတာ ဒီပက်က ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။ မင်နယ်တို့သုံးယောက်အတွက် အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ခွင့်ရမှလားဆိုတာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါဦးနော်။ တရားခွင်မှာ အမှန်တရားထွက်လာအောင် စစ်ဆေးဖော်ထုတ်တာတွေကို ရှုစား ရမှာဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေအတွက် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမယ့် ဇာတ်ကားလေးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ အဓိကသရုပ်ဆောင်ထားသူတွေက အမီတာဘက်ချန်း၊ တာ့ပ်ဆီပန်နူး၊ ကာတီကာလ်ဟာရီ၊ အန်ဒရီရာတာရီအန်း၊ အန်ဂတ်ဘီဒီ စသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ ၂၀၁၆ ရဲ့ နာမည်ကြီး ဇာတ်ကား တစ်ကားဖြစ်တဲ့ Now You See Me2ဆိုတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ပဉ္စလက်ပညာရှင်လေးဦး ရဲ့ မျက်လှည့် ပြကွက်တွေကို တင်ဆက်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကို အခုလေးပဲ ဘာသာပြန်ဆိုမှု ပြီးသွားတဲ့အတွက် CM ချစ်သူတွေကြည့်လို့ရပါပြီ ရှင်ဒီကားရဲ့ ပထမဆုံးကား Now You See Me မှာ တုန်းက အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ မြင်းစီးသမားလေးယောက်တို့ ရဲ့ မျက်လှည့်ပြကွက်တွေနဲ့ ပရိသတ်ကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ အခု ဒုတိယမြောက်ကားမှာလဲ မြင်းစီသမား လေးယောက်လုံးပြန်လည် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ပထမကားမှာတုန်းက မိန်းကလေးမျက်လှည့် ဆရာအနေနဲ့ ဟန်လေပါဝင်ခဲ့ ပေမဲ့ အခုတော့ ဟန်လေ အစား ငပြောင်မလေး လူလာက ပါဝင်ထားပါတယ်.. မြင်းစီးသမားတွေနဲ့ အက်ဖ်ဘီအိုင် အေးဂျင့် ဒိုင်လန်တို့ ဆော့ဖ်ဝဲ ကုမ္ဗဏီ အော့တ်တာ ရဲ့ စီအီးအို အိုဝင်အကြောင်းကို ဖော်ထုတ်ဖို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ မမျှော်လင့်ဘဲ မြင်းစီးသမားတွေအားလုံးရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ အားလုံး ဖော်ထုတ်ခံလိုက်ရပါတယ် ပထမကားမှာ သေသွားတဲ့ ဂျက် ဝိုင်းလ်ဒါ တစ်ယောက်က တကယ်မသေသေးတဲ့ အကြောင်း.. အက်ဖ်ဘီအိုင် အေးဂျင့် ဒိုင်လန် ရုဒ်စ် ဟာ မြင်းစီးသမားအဖွဲ့ ဝင် တစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ခံရပြီးနောက် သူတို့တွေ ဝရုန်းသုန်းကားနဲ့ ပြေးကြရရင်း လူဆိုးတွေ ဆင်ထားတဲ့ ထောင်ချောက်ထဲ တည့်တည့် တိုးဝင်မိရင်း မကာအိုကို ရောက်သွားပါတော့တယ်မကာအိုမှာ သူတို့ ဘယ်သူနဲ့ တွေ့ ပြီး ဘယ်လို အစီအစဉ် ဘယ်လို လှည့်ကွက်တွေနဲ့ လူဆိုးတွေကို အနိုင်ပိုင်းမလဲ ဆိုတာရယ်…ဒိုင်လန်နဲ့ မြင်းစီးသမား အဖွဲ့ သားတွေ ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ဟာမိုနီကျကျ အကွက်ကျကျနဲ့ နောက်ဆုံးမျက်လှည့် အကွက်အတွက် ဘယ်လိုတွေ ခေါ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာကိုတော့….. Now You See Me2ဇာတ်ကားမှာ ဆက်လက် ကြည့်ရှု ပေးကြပါလို့…ဘာသာပြန်ဖို့ အတွက် ပါဝင်ကူညီပေးတဲ့ ကျော်ကျော်ဇင်ဖြိုး (Little Neo) နဲ့ ကောင်းမြတ်သူ(seniorkaung)ကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ဒီဇာတ်ကားကို ကျွန်တော်ဟာ ဂူဂူး(Liu Yifei)ကြောင့်သာ ကြည့်ခဲ့ပေမယ့် သာမန်ဇာတ်ကားလိုသာ မျှော်လင့်ခဲ့မိတာ အသေအချာပါ။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းခံစားကြည့်တော့ မမျှော်လင့်တဲ့ ခံစားချက်တချို့ ကြမ်းရှသွားခဲ့…….။ဂူဂူးဟာ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာထက် ပိုကဗျာဆန်စွာ နူးညံ့ချက်က ပိုးဇာကောင်လေးတွေအလား။ လိပ်ပြာတစ်မျိုးကို အခြေခံလို့ သူမရဲ့အနုပညာက သက်ဝင်လွန်းနေ။ အချစ်လား…. ခံစားချက်တွေ ပြတ်သားလွန်းနေသလိုလို…. နွဲ့နှောင်းလွန်းနေသလိုလို….ရှုပ်ထွေးနေခဲ့ပေမယ့် ရိုးရှင်းလွန်းခဲ့တာကြောင့်ဆိုတာ လူသားကျွန်တော် ခံစားမိနေ။ဒါဟာ ဇာတ်ကားတစ်ကားလား… မော်ဒန်ကဗျာတစ်ပုဒ်လား… ကျွန်တော် ဝေခွဲမရတတ်။ ကြိုက်တယ်လို့ မခံစားမိပေမယ့် မှိုင်းပြာမှုတစ်ချို့ကို ပါးလျလျရေးခြစ်မိ။ ဇာတ်လမ်းကို ဖော့လွန်းထားပေမယ့် ကျွန်တော့်မှာတော့ ဒီလောက်နဲ့တင် အတော်နှောင်တွယ်မိနေပြီ။ အတွေးတွေကို အတောင်ပံတပ် ဆက်ပြီး ခံစားနေရတာကို ဘဝင်မကျမိအောင် ကြိုက်မိပါတယ်။သြော်..ဂူဂူးလေးရယ်… မင်းလေးဟာ Screen ထဲက ပြုစားတဲ့ မှော်ဆရာမလေးလားကွာ။
ဒီရုပ်ရှင်ကားလေးဟာ နာမည်ကျော် ရုပ်ရှင်မင်းသား မင်းသမီးများစွာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပေးထားပြီး အကောင်းဆုံး သီချင်းတွေ နဲ့ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်…ပိုပြီးထူးခြားတာက မကြာသေးခင်ကမှ နတ်ရွာစံတော်မူသွားတဲ့ ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ် ဘူမိဘော ရေးထားတဲ့ သီချင်းတွေကိုဒီရုပ်ရှင်မှာ ထည့်သွင်း အသုံးပြုပြီး ထည့်ထားလို့ရုပ်ရှင်ကားကို ပိုပြီး အသက်ဝင်စေပါတယ်…နှစ်သစ်ကူးတော့မယ် ဒီဇင်ဘာ လမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အချစ်ဇတ်လမ်းလေး ၃ ခု ကို ဒီရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုထဲမှာ ချိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်…ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲက မင်းသမီးလေးတွေကချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းလို့ ၂ ခါပြန်တောင် ကြည့်ရပါတယ် မင်းသားတွေဆိုရင်လဲ ATM ရုပ်ရှင်ကားထဲက မင်းသားI Fine..Thank You..Love You ရုပ်ရှင်ကားထဲက မင်းသား တို့ပါဝင်ပါတယ် သူတို့ကတော့ CM Fan တွေ နဲ့ မစိမ်းလောက်ပါဘူးနော်…ကဲပါ ကျနော် ဇတ်လမ်းကို ပြောမပြချင်ပါဘူး ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်ပါသင့်ဘ၀ မှာ ကြည့်ရလို့ နောင်တ မရစေမယ့် ရုပ်ရှင်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်
မွန်းစတားလေးတွေနဲ့ စွန့်စားခန့်ဖွင့်တဲ့စိတ်ကူးယဉ်ကားတွေကို နှစ်သက်ပါသလား။ဒါဆိုရင် ဒီကားဟာ သင်တို့အတွက်ပါ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းမှာတော့ ရေနံကုမ္မဏီကြီးတစ်ခုဟာ ရေနံတူးရင်းနဲ့မြေအောက်နက်တစ်နေရာက ရှေးဦးကုန်းနေရေနေသတ္တဝါဆန်းတွေ နေတဲ့နေရာကို တူးမိသွားပြီး အကောင်ဆန်းအချို့ မြေပေါ်ကို လွတ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ရေနံတူးခွင့်ပိတ်သွားပြီ စီးပွားရေးထိခိုက်မခံနိုင်တာကြောင့်မြေအောက်က သက်ရှိတွေရှိတဲ့အကြောင်းကို ဘယ်သူမှမသိနိုင်အောင်အဲဒီ သတ္တဝါဆန်းကြီးတွေကို နှုတ်ပိတ်ရှင်းလင်းဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။လွတ်သားတဲ့ အကောင်လေးဟာ ကားဝါသနာအိုး ထရစ် နဲ့တွေ့ပြီးမိတ်ဆွေတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ထရစ်ရဲ့ ကားအစုတ်ဟာလည်းသတ္တဝါလေးရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့အစွမ်းကြောင့်ဘယ်ကားနဲ့မှ မတူတဲ့ ကားတစ်စီးဖြစ်လာခဲ့ပြီး သူတို့တွေပူးပေါင်းပြီး ရေနံကုမ္မဏီကဖမ်းထားတဲ့ အကောင်တွေကို ကယ်ဖို့နဲ့သူတို့အားလုံး အိမ်ကိုပြန်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြပုံလေးပါ။
mmbusticketဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ 2016 မှာထွက်ရှိထားတဲ့ အလယ်တန်းကျောင်းသားဟာသကားလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ ‘ရေးဖ်’ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တတ်ပြီး အမွှေဇယားတွေဖန်တီးတတ်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါအရင်ကျောင်းတွေကနေ ကျောင်းထုတ်ခံရပြီးနောက် စည်းကမ်းတင်းကျပ်တဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းကို’ရေးဖ်’တစ်ယောက် ရောက်ရှိသွားရာမှစပြီး ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို ကြည့်ရှူ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာသအမျိုးအစားလေးဖြစ်ပေမဲ့ မိသားစုပြဿနာများ ညီအစ်ကိုမောင်နှမသံယောဇဉ်များကို ရိုက်ကူးဖော်ပြထားသဖြင့် လက်မလွှတ်တမ်းကြည့်ရှူ့ရမည့် ရုပ်ရှင်ကားကောင်းလေးတစ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်
Mat Na Mau (2016)
mmbusticket ၂၀၁၆ ခုနှစ်ထွက် ဇာတ်ကားလေး တစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်ကားလေးက မလေးရှား လား အင်ဒိုလား လို့ထင်ခဲ့ပေမယ့် တကယ်ကတော့ ဗီယက်နမ်ကားလေးပါ သရဲကားထဲမှာ ဗီယက်နမ်ကားကို မကြည့်ဘူးကြဘူးဆိုရင်တော့ ဒီကားလေးကို မြည်းစမ်းကြည့်လိုက်ပါ ဇာတ်ကားလေးက စုန်းကားလေးမို့ စုန်းကေ၀ ကြိုက်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေအနေနဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်မှာသေချာပါတယ် ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကတော့ ပျော်ပွဲစားထွက်ကြတဲ့လူငယ်လေးတစ်စု တောတွင်းမှာ မလုပ်သင့်တာတွေလုပ်မိကြတဲ့အခါမှာ မဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်ကုန်ကြပါတော့တယ် ကဲ ပိုစတာထဲက ပါတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဒေ အကုန်သေမလား ရှင်မှာလား ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမှာလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်ကြည့်လိုက်ကြပါ တော့ဗျာ
Louisa Clark ဆိုတဲ့မိန်းကလေးဟာ ငယ်ရွယ်သွက်လက်ပြီး ပျော်ပျော်နေတတ်သူ။ သူ့မိသားစုအတွက်ဆိုပြီး အလုပ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလုပ်နေရတယ်။ သို့ပေမဲ့ တစ်ရက်မှာတော့ Clark ဟာ အက်စီးဒင့်ဖြစ်လို့ အောက်ပိုင်းသေနေတဲ့ Will Treynor ဆိုတဲ့ လူငယ်သူဌေးလေးတစ်ယောက်ကို ပြုစုစောင့်ရှောက် ပေးရမဲ့ caregiver ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ သူ့ရဲ့ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ စိတ်ထားဟာ နှစ်ယောက်လုံးအပေါ်မှာ သက်ရောက်လာပါတော့တယ်။ သူ့ကြောင့် Will ဟာ အသက်ဘာကြောင့်ရှင်သန်သင့်သလဲဆိုပြီး အောက်ပိုင်းသေနေပေမဲ့ ဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရင်ဆိုင်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အပြင် နှစ်ယောက်ကြားမှာလည်း ဘယ်သူမှမမှန်းဆနိုင် မသိနိုင်တဲ့ သံယောဇဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ Game Of thrones ထဲမှာ နဂါးမိခင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ ခယ်လီဆီ (Emilia Clarke) မင်းသမီးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။IMDB Rating 7.6 အထိ ရထားတဲ့ ကားပါ။
Kabali ( 2016 )
ခပ်ကြမ်းကြမ်းအက်ရှင်ကားတွေကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်..IMDb ကတော့ 6.4 ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့နာမည်က ကာဘာလီ..လူတိုင်းလေးစားရတဲ့သူတစ်ဦး…ဂိုဏ်းစတားတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပြန်တယ်..သူဟာ လူအများကြီးရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ မတရားစွပ်စွဲခံရပြီး ထောင်ဒဏ် ၂၅ နှစ်တိတိချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်သူ့မိသားစုတစုလုံးဟာလည်း..အဲ့ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးသေဆုံးခဲ့တယ်..လူမသေပေမယ့် ဘဝသေသွားတဲ့ကာဘာလီ..ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ ပြန်လွတ်လာတဲ့အခါမှာသူချစ်ရတဲ့မိသားစု..အတွက်..သူ့ကိုမကောင်းကြံခဲ့တဲ့သူတွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေရေးစတင်ပါတော့တယ်..ဒီလိုနဲ့နောက်ကွယ်က အဖွဲ့အစည်းကြီးတခုနဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာတော့……………
သဲထိတ်ရင်ဖိုကားလေးတစ်ကားကို ကားလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးနာမည်ကတော့Heavenhurst (2016)ပါ။Heavenhurst ဆိုတဲ့ နေရာကိုပြောင်းရွေ့လာခဲ့တဲ့ အရက်စွဲနေတဲ့အမျိုးသမီးလေး Jackie…အဲ့ဒီတိုက်ခန်းမှာပဲ ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ သူမရဲ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်…ထူးဆန်းစွာနားလည်ရခက်တဲ့ အိမ်ရှင်အဖွားကြီး… အဲ့ဒီအိမ်ကိုပြောင်းရွေ့လာပြီးနောက်ပိုင်း အရမ်းထူးဆန်းတာတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာရပြီး အိမ်ကြီးကနေ ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ သူမလွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား။ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုရောသူမ အချိန်မှီသိရှိနိုင်ပါ့မလား။ဒီလိုသဲထိတ်ရင်ဖိုကားတွေကိုမှ နှစ်သက်တဲ့ CMပရိသတ်ကြီး ရင်တစ်ဖိုဖိုခံစားကြည့်ရှုနိုင်ဖို့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မိုလီနဲ့ နစ် သဲကန္တာရထဲက လေယာဉ်ကွင်းကို လာခဲ့ကြရင်း ကားက သဲထဲနစ်သွားတယ်။အဲ့အချိန် Zombieတစ်ယောက်ယောက်ရောက်လာတယ်။သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ပေမဲ့ ဘယ်လိုမှ မသေဘူး။ နစ် သေသွားခဲ့တယ်။ လေယာဉ်ကွင်းရောက်ဖို့က မိုင်၃၀လောက်လိုသေးတယ်။ မိုလီတစ်ယောက်တည်း လေယာဉ်ကွင်းကို ဘယ်လိုရောက်အောင် သွားမလဲ။Zombieကရော မိုလီကို သတ်စားမှာလား။ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကို It stains the sands redမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါ
Ip Man3( 2016 )
IP Man3ကို Bluray 720p 5.1 CH နဲ့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်IMDb Rate ကလည်း 7.8 အထိရရှိထားတာကိုသိရပါတယ်.သာမန်သိုင်းကား အတိုက်အခိုက်တဲ့ရသတွေပေးတဲ့ကားမဟုတ်တာတော့သေချာတယ်ကမ္ဘာ့ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံဟောင်းကြီးမိုက်တိုက်ဆန်ကလဲသူ့အခန်းမှာ ကျကျနနပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်သွားတာကလဲ ဒီကားရဲ့အမှတ်ရစရာ အချက်တခုပါ…ဒီကားရဲ့အစမှာလဲအရင်ကားရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့ ဂျီကွမ်တိုကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့သိုင်းပညာဂုရုကြီး ဘရုစ္စလီနဲ့ပြန်စထားပါတယ်ဒုစရိုက်မှုတွေနဲ့ ခြေရှုပ်နေတဲ့ ဟောင်ကောင်မြို့ရဲ့တခေတ်တချိန်မှာ-တာဝန်ယူမှုတွေနဲ့ မိသားစုကိုဂရုမစိုက်သလိုဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ ယိမန်ရဲ့အကြောင်း…အရည်အချင်းရှိသူပြည့်ဝသူတယောက်ဟာတခြားလူကိုတိုက်ခိုက်ပြီးမှနေရာမယူတတ်ဘူးဆိုတာကိုပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်သွားတဲ့ မင်းသားဒန်နီယမ်း…သူနောက်ဆုံးပြောသွားခဲ့တဲ့ မင်းနားမှာရှိတဲ့မင်းချစ်တဲ့လူတွေလောက်ဘယ်ဟာမှအရေးမကြီးဘူးဆိုတဲ့စကားဟာ လဲမှတ်သားစရာပါသာမန်လန်ချားဆွဲဘဝကနေ နံမည်ကျော်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ Cheung Tin Chi. ဟာလဲ ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာမြင်ရမှာပါမလွတ်တမ်းကြည့်သင့်တယ်လို့ဆိုတာထက် ကြည့်ရမယ်လို့ပဲညွှန်းပါရစေဘာသာပြန်သူအညွှန်းရေးသူ မြန်မာကြီးဖြစ်ပြီး encoder ကတော့ LK ဖြစ်ပါတယ်
Inside or Outside ဇာတ်ကားဟာ 2016ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့တဲ့တရုတ်အက်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် IMDB rating 6.3 ရရှိထားပြီး Action Comedy အမျိုးအစားဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသူများကတော့ကိုးရီးယားနာမည်ကြီးမင်းသား Jang Hyuk တရုတ်မင်းသား Wallace Huo,Simon Yam စသည့်သရုပ်ဆောင်တို့ပါဝင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ နာမည်ကြီးအိုင်တီပညာရှင် အိုးကျန့်တစ်ယောက်သူ့မိန်းမကလေးမွေးတဲ့အခါမှာ သူ့ကလေးမဟုတ်ဘူလို့ သံသယဝင်နေပါတယ် မိန်းမဖြစ်သူကလည်း စိမ်းကားသွားပြီး့ အပြင်မှာဖောက်ပြန်နေတယ်လို့လဲသံသယဝင်နေပါတယ်ထို့ပြင်အိုးကျန့်တစ်ယောက် မကြာခဏလုပ်ကြံမှုများကြုံလာရသောအခါ…..ဘယ်သူနောက်ကွယ်မှာရှိနေလဲ…….စုံထောက်ဖေ့ရှင်းနှင့်မိတ်ဆွေအငြိမ်းစားရဲချိုလာ့တို့ကို အိုးကျန့်ရဲ့မိန်းမဖြစ်သူက သူ့ခင်ပွန်းသည်အားစုံစမ်းပေးဖို့ငှါးရမ်းလာသောအခါ ဘယ်လိုဖုံးကွယ်ထားတာတွေသိလာရမလဲ……နောက်ကွယ်က အမှန်တရားပေါ်ပေါက်လာမှာလားဆိုတာကိုတော့ ……..ကဲ ပရိတ်သတ်ကြီးကပဲ ဆက်လက်ကြည့်လိုက်ပါတော့နော်
အမေကွယ်လွန်သွားလို့ ခံစားနေရတဲ့ ဆေးကျောင်းသူ နန်စီ အဒမ် (Nancy Adams) ဟာ သူ့ရဲ့ ရင်တွင်းဝေဒနာတွေ ဖြေဖျောက်ဖို့အတွက် လူသူ အရောက်အပေါက်နည်းတဲ့ ကမ်းခြေတစ်ခုဆီကို ထွက်လာခဲ့ပါတယ် … အစကတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လာတာဆိုပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သူတစ်ယောက်တည်း ရေလွှာလျှောစီးဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် … အဲ့အချိန်မှာပဲ သူတစ်ယောက်တည်း ရေလွှာလျှောစီးနေတုန်းမှာ ငါးမန်းကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ ရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ နန်စီဟာ သူရောက်နေတဲ့ နေရာနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ ရှိတဲ့ ကျောက်ဆောင်တစ်ခုဆီကို ကူးသွားဖို့ ဖြစ်လာပါတော့တယ် … ကျောက်ဆောင်ပေါ်ရောက်သွားတဲ့ အချိန်မှာ ငါမန်းကလည်း အဲ့ပတ်ဝန်းကျင် တဝိုက်မှာပဲ လှည့်လည်နေပါတယ် … ဒဏ်ရာကလည်း ရထား ဒီရေကလည်း တဖြည်းဖြည်းတက်လာရာက မကြာခင် သူနေနေတဲ့ ကျောက်ဆောင်ကို ဖုံးလွှမ်းခါနီး အချိန်မှာတော့ … နန်စီ တစ်ယောက် ဘာလုပ်မလည်းဆိုတာ မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် … June လမှ ထွက်ရှိတဲ့ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပြီး မင်းသမီး Blake Lively က ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်အောင် သရုပ်ဆောင်သွားထားပါတယ် … အသုံးစရိတ် 17 million USD ကိုသာ အသုံးပြုထားပြီး Box Office မှာ ဝင်ငွေ 118.3 million USD ပြန်လည်ရရှိထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ် … Rating တွေကတော့ IMDb မှာ 6.4 နဲ့ Rotten Tomatoes မှာ 77% ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်
အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ ၂၀၁၆ ရဲ့ နာမည်ကြီး ဇာတ်ကား တစ်ကားဖြစ်တဲ့ Now You See Me2ဆိုတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ပဉ္စလက်ပညာရှင်လေးဦး ရဲ့ မျက်လှည့် ပြကွက်တွေကို တင်ဆက်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကို အခုလေးပဲ ဘာသာပြန်ဆိုမှု ပြီးသွားတဲ့အတွက် CM ချစ်သူတွေကြည့်လို့ရပါပြီ ရှင်ဒီကားရဲ့ ပထမဆုံးကား Now You See Me မှာ တုန်းက အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ မြင်းစီးသမားလေးယောက်တို့ ရဲ့ မျက်လှည့်ပြကွက်တွေနဲ့ ပရိသတ်ကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ အခု ဒုတိယမြောက်ကားမှာလဲ မြင်းစီသမား လေးယောက်လုံးပြန်လည် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ပထမကားမှာတုန်းက မိန်းကလေးမျက်လှည့် ဆရာအနေနဲ့ ဟန်လေပါဝင်ခဲ့ ပေမဲ့ အခုတော့ ဟန်လေ အစား ငပြောင်မလေး လူလာက ပါဝင်ထားပါတယ်.. မြင်းစီးသမားတွေနဲ့ အက်ဖ်ဘီအိုင် အေးဂျင့် ဒိုင်လန်တို့ ဆော့ဖ်ဝဲ ကုမ္ဗဏီ အော့တ်တာ ရဲ့ စီအီးအို အိုဝင်အကြောင်းကို ဖော်ထုတ်ဖို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ မမျှော်လင့်ဘဲ မြင်းစီးသမားတွေအားလုံးရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ အားလုံး ဖော်ထုတ်ခံလိုက်ရပါတယ် ပထမကားမှာ သေသွားတဲ့ ဂျက် ဝိုင်းလ်ဒါ တစ်ယောက်က တကယ်မသေသေးတဲ့ အကြောင်း.. အက်ဖ်ဘီအိုင် အေးဂျင့် ဒိုင်လန် ရုဒ်စ် ဟာ မြင်းစီးသမားအဖွဲ့ ဝင် တစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ခံရပြီးနောက် သူတို့တွေ ဝရုန်းသုန်းကားနဲ့ ပြေးကြရရင်း လူဆိုးတွေ ဆင်ထားတဲ့ ထောင်ချောက်ထဲ တည့်တည့် တိုးဝင်မိရင်း မကာအိုကို ရောက်သွားပါတော့တယ်မကာအိုမှာ သူတို့ ဘယ်သူနဲ့ တွေ့ ပြီး ဘယ်လို အစီအစဉ် ဘယ်လို လှည့်ကွက်တွေနဲ့ လူဆိုးတွေကို အနိုင်ပိုင်းမလဲ ဆိုတာရယ်…ဒိုင်လန်နဲ့ မြင်းစီးသမား အဖွဲ့ သားတွေ ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ဟာမိုနီကျကျ အကွက်ကျကျနဲ့ နောက်ဆုံးမျက်လှည့် အကွက်အတွက် ဘယ်လိုတွေ ခေါ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာကိုတော့….. Now You See Me2ဇာတ်ကားမှာ ဆက်လက် ကြည့်ရှု ပေးကြပါလို့…
ကာလရှည်ကြာစွာ စောင့်မျှော်နေရတဲ့ Conjuring 2နောက်ဆုံးမှာတော့ Bluray ကွာလတီနဲ့ ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။သရဲကား ဘာသာပြန်နေကျသူတွေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မအားလပ်တာနဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ ပထမဆုံးဘာသာပြန်ဖြစ်တဲ့ သရဲကား ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒီဇာတ်လမ်းဟာလည်း ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကျဉ်းပြောရရင်တော့ တစ်ခုလပ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့သားသမီး ၄ ယောက် ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ အိမ်မှာကြောက်စရာ ဖြစ်ရပ်တွေ စတင်လာခဲ့ပြီး လူတွေနဲ့မီဒီယာတွေ အာရုံစိုက်မှု ရလာတဲ့အခါ ဘုရားကျောင်းရဲ့အကူအညီတောင်းမှုအရ ဝါရမ် လင်မယားလာရောက်စုံစမ်းရတာပါပဲ။ဒီအမှုကိုတော့ သူတို့လင်မယားလိုက်ခဲ့တဲ့ အမှုတွေထဲကကြောက်စရာ အဆိုးရွားဆုံးတွေထဲက တစ်ခုလို့အပြင်မှာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မထင်မှတ်တဲ့ လှည့်ကွက်တစ်ခုနဲ့တန်ဆာဆင်ထားတာကိုလည်း တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဇာတ်လမ်းအဆုံးမှာလည်း တကယ့် ဖြစ်ရပ်မှန်အသံသွင်းတိပ်ခွေကို ဘာသာပြန်ထားတာလေးနားထောင်ကြည့်ဖို့ မကျန်ခဲ့ဖို့နဲ့မူရင်းဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း တွေ့ရှိနိုင်ကြောင်းပြောပြရင်း တင်ပေးလိုက်ပါပြီ…
Train to Busan 2016 (Eng Subtitle)
Sok-woo,afather with not much time for his daughter, Soo-ahn, are boarding the KTX,afast train that shall bring them from Seoul to Busan. But during their journey, the apocalypse begins, and most of the earth's population become flesh craving zombies. While the KTX is shooting towards Busan, the passenger's fight for their families and lives against the zombies - and each other.
ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာဂရုဏာတော်ကို အောက်မေ့တမ်းတဖွယ် တင်ဆက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။Ben-Hur ရုပ်ရှင်ဟာ ဒီနှစ်ရဲ့ သြဂုတ်လ 16 ရက်မှာ စတင်ရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ သမိုင်းနောက်ခံ အက်ရှင်ဒရာမာကားတစ်ကားပါ။ 2016 အတွင်း ဘတ်ဂျက်ကြီးကြီးမားမားနဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ကားတွေထဲမှာ အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ 1959 ခုနှစ်က အောင်မြင်ထင်ရှားခဲ့တဲ့ သမိုင်းနောက်ခံ Ben-Hur ခေတ်ဟောင်းရုပ်ရှင်ကိုပဲ ပြန်လည်းဆန်းသစ်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ပါ။ ရာဇဝင်ကားကြီးတွေ၏ ထုံးစံအတိုင်း လူအင်အားကောင်းကောင်း၊ ဆက်တင်ကြီးကြီးတွေနဲ့ အားထုတ်ရိုက်ကူးခဲ့ပေမဲ့ ရုံဝင်ငွေကတော့ မျှော်မှန်းသလောက် အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါဘူး။ရုပ်ရှင်ကိုတော့ ခရစ်တော် သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ် ရောမခေတ်ကို ဇာတ်အိမ်ယူထားပါတယ်။ ဂျူးလူမျိုးနဲ့ ရောမသားဆိုတဲ့ မွေးစားညီအကိုနှစ်ယောက်ကြား ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းနဲ့အတူ၊ အရမ်းချစ်ခင်ကြတဲ့ ညီအကိုနှစ်ဦးရဲ့ အိမ်အပြန်ခရီးတွေဟာ သူတို့မိသားစုအတွက် မမျှော်လင့်လောက်အောင် ခက်ခဲတဲ့ အနာဂတ်တွေကို သယ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်မှာတော့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့အတူ အမုန်း၊ အာဃာတ၊ အာဏာတွေကြားက အားပြိုင်မှုတွေကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရောမခေတ်က စစ်ရထားပြိုင်ပွဲကြီးတွေကိုလည်း ရင်တစ်ဖိုဖိုနဲ့ ကြည့်ရူ့ရမှာပါ။ ဒီရုပ်ရှင်မှာ ထိုစဉ်အချိန်က သက်ရှိထင်ရှားရှိဆဲ ခရစ်တော်၏ ပုံရိပ်ကိုပါ ထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားပါတယ်။Rating ကောင်းမှ ကြည့်သူတွေအတွက် သတိပေးလိုတာကတော့ ဒီကားဟာ rating ပိုင်းမှာ အားနည်းခဲ့ပေမဲ့ ကြည့်လို့အဆင်ပြေပါတယ်။ သမိုင်းနောက်ခံ ရာဇဝင်ကားကောင်းတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအဖို့ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ အနီးစပ်ဆုံးနှိုင်းပြရရင် နာမည်ကျော် ရောမကားဖြစ်တဲ့ Gladiator နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာ ဖန်တလဲလဲမြင်နေရတဲ့ ကိုးရီးယားစီးရီးတွေ၊ လူစွမ်းကောင်းရုပ်ရှင်တွေကနေ သွေဖယ်ပြီး ရာဇဝင်ကားကောင်းတစ်ကားကို ဖြေးဖြေးနဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေးကြည့်ချင်သူတွေအဖို့ နှစ်ခါမစဉ်းစားသင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းဆိုတာလောက်ပဲ အညွှန်းပေးချင်ပြီး ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရူ့ခံစားကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။(PG-13 အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်)
ဒီကားလေးက 2016မှာ ထွက်ရှိထားပြီး IMDb rating 6.1 ရထားတဲ့ korea animationကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ Train to busan မထွက်ခင်က ထွက်ထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကဆိုးလ်ရထားဘူတာကို ဗိုင်းရပ်ကူးနေတဲ့ အိမ်ယာမဲ့တယောက် ရောက်လာတာကနေ တမြို့လုံးကို ပြန့်သွားပြီးလူတွေအကုန်လုံးနီးနီးကို ကူးကုန်ပါတယ်။ ဘူတာမှာ အိပ်ကြတဲ့ အိမ်ယာမဲ့တချို့နဲ့ မြို့ကလူတချို့ပဲအသက်ရှင် ကျန်ပါတော့တယ်။ ဟီဆန်ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကလည်း သူ့ရည်းစားနဲ့ စကားများပြီးဘူတာကို ရောက်လာပြီး ဗိုင်းရပ်ကူးထားတဲ့ လူတွေ လိုက်လို့ ပြေးရင်းနဲ့ ဒုက္ခရောက်နေလို့ သူ့ကောင်လေးနဲ့ သူ့အဖေက လိုက်ရှာကြပါတယ်။အဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာ သူမကိုရော သူ့အဖေနဲ့သူ့ကောင်လေးက ရှာတွေ့ပါ့မလား။ ဗိုင်းရပ်ကူးထားတဲ့လူတွေကိုရော ဘယ်လို ရှင်းကြမလဲ ဆိုတာကတော့………Train to busanလိုပဲ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဇာတ်ကား‌ကောင်း‌လေးတကား ဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦး ခင်ဗျာ။
2016 IMDb 6.4 နဲ့ fantasy ကားကောင်းတစ်ကား အကြည်ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။ Disney ရဲ့ The BFG(Big Friendly Giant) ပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ရိုးစင်းပြီး လှပပါတယ်။ ဆိုဖီဆိုတဲ့ မိဘမဲ့ကလေးလေးကို ကြင်နာတတ်တဲ့ နှလုံးသားရှိတဲ့ မှင်စာဘီလူးကြီးက ဖမ်းခေါ်သွားခဲ့မိတာက စတာပါပဲ။ လူသားစားတဲ့ဘီလူးတွေနေထိုင်တဲ့ ဘီလူးတိုင်းပြည်မှာ အသီးအရွက်ပုတ်လေးတွေစားပြီး အကောင်အသေးဆုံး ဘီလူးကြီး၊ လူသားစားတဲ့ဘီလူးတွေကို မတားနိုင်တဲ့အတွက် လူသားကလေးလေးတွေအတွက် အိပ်မက်လှလှလေးတွေ လိုက်ဖမ်းပြီး လက်ဆောင်ပေးလို့ တတ်နိုင်သလောက် ပြန်ပေးဆပ်နေသူဘီလူးကြီးဟာ သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဆိုဖီလေးကို ကာကွယ်ရင်း ဆိုဖီရဲ့အားပေးမှုနဲ့ ဘီလူးတွေအားလုံးကို အပြီးအပိုင်မောင်းထုတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ….ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ စာတန်းထိုးအမှန်မထွက်တဲ့အတွက် နားထောင်ပြီးပဲ အတက်နိုင်ဆုံးဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လေသံလည်းဖြစ် ဘီလူးတွေကလည်း လူစကားကို ကောင်းကောင်းအသံမထွက်တတ်တော့ အကုန်လုံးတော့ မမှန်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အားလုံးနီးပါးတော့အနီးစပ်ဆုံးမှန်အောင် ကြိုးစားပေးထားပါတယ်။ ဒီကားလေးကိုတော့ မိသားစုနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းပြီး ကလေး လူကြီးအကုန်နှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
2016 ခုနှစ်ထဲမှာ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး Oscar တဆု ရခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကြီးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်ကားကြီးက IMDb မှာ 7.2 ရထားတဲ့ PG 13 ပါပေးထားပါသေးတယ်Tonry Maxson ဟာရေဆိုးသန့်စင်သမားအဖြစ်Pittsburghမြို့မှာ ၁၉၅၀ ပတ်ဝန်းကျင်က အသက်မွေးခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကတော့ တနေ့မှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘေ့စ်ဘောကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ပါ ဒါပေမဲ့ ခါးသီးစွာကြုံတွေ့လိုက်ရတာကအမေရိကန် မေဂျာလိဒ်မှာ လူမည်းတွေကို ပါဝင်ခွင့်မပေးတော့ သူဟာသူ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်လိုက်ရပါတော့တယ် ဒါပေမဲ့ သူဟာသူမဖြစ်ခဲ့ရတာကို သူ့မိသားစုအပေါ်ဖိအားပေးပြီး သူ့သားကို ကောလိပ်ဘေ့စ်ဘောပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်ကဲ ပရိတ်သတ်ကြီး ရေ ဘာတွေဆက် ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာတော့ကြည့်လိုက်ကြတော့နော် အော်စကာမယ် စံကာတင်စာရင်း ဝင်တယ်ဆိုကတည်း ကကောင်းလို့ပဲနေမှာပါ မွန်းလိုက်ထက်တော့ ကောင်းမှာသေချာပါတယ်
“Suddenly Twenty” ———————— CJ Major Entertainment ရဲ့ First movie Production ဖြစ်ပြီး ၊ ထိုင်း နိုင်ငံ ရဲ့ Thai Major Cineplex Group နဲ့ တောင်ကိုရီးယားက CJE& M တို့ ပေါင်းစပ် ထုတ်လုပ်တဲ့ “Suddenly Twenty” ဇာတ်ကားဟာ ၊ ၂၀၁၄ မှာ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့Miss Granny ဆိုတဲ့ Korea ကားရဲ့ နောက်ထပ် မှတ်တိုင်တစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။IMB rating 7.3/10 ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကား တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Drama/Romance အမျိုအစား ဖြစ်ပြီး ၊ Thai မှာတော့ 2016, Nov 24မှာ release လုပ်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကား တစ်ကားဖြစ်ပြီး ၊ IMB rating 10 မှာ 7.3 ရရှိထားပြီး ၊ Google user တွေရဲ့ Like ပေးနှုန်းကတော့ 94% အထိ ရရှိထားတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ထိုင်းကားလေး တစ်ကားပါပဲ။ Pee Mak ကားထဲက မင်းသမီးချောလေး “Davika HOorne” မှ “Parn” အနေနဲ့ ပါဝင်ထားပြီး ၊National film Association Award မှ ပေးတဲ့ 2017 အတွက် Nomination တွေထဲမှာ Best Actress ( Davika Hoorne) Best Supporting Actor – Rong Kaomulkadee Best Supporitng Actress – Niranuch Patamasute Best Costume Design စတဲ့ Title တွေ ပါဝင်ခဲ့ တာနဲ့ အညီ Costume Design တွေကတော့ အလွန် လန်းပါတယ် ၊ မင်းသမီးချော Parn ရဲ့ ဆံပင်ကေ ကတော့ ချက်ချင်းတောင် ပြေးညှပ် လိုက်ချင်တဲ့ ကေ လေးပါ။Story Lines ========= Parn ဆိုတဲ့ အသက် ၇၀ အဘွားကြီး ၊ ခေါင်းမာတယ်၊ စိတ်ညစ်စရာ ကောင်းတယ် ၊ သူမ ပတ်ဝန်းကျင်က ရှိသမျှ လူတွေ တိုင်းကို စိတ်အနှောက်အယှက်ပေးနိုင်တဲ့ ခွတီးခွကျ အဘွားကြီး ။ သူမ ဘဝ ရဲ့ နှစ်လိုဖွယ် ခံစားချက်က တော့ သူမ ချစ်တဲ့ သား Professor ကြီးကို လူစည်စည်မှာ ကြွားရတာပါပဲ ၊အဘွားကြီး Parn ချစ်တဲ့ သူမ သား Professor ကြီးနဲ့ မိသားစုတွေရဲ့ သူမ ကို ဘိုးဘွားစောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာ ကို ပို့မယ် အကြောင်း ကို အဘွားကြီး Parn ကြားသွားသောအခါ……“အသက် ကြီးလာခြင်းဟာ ကြောက်စရာ ကောင်းလှတယ်”ဝမ်းနည်း စိတ်ပျက် အားငယ်မှုတွေနဲ့ အဘွားကြီး Parn တစ်ယောက် ရပ်ကွပ်လမ်းတွေပေါ် အဓိပ္ပါယ်မဲ့ လျောက်သွားပြီး bus မှတ်တိုင် တစ်ခုမှာ အမောဖြေနေခဲ့တယ်။ သူမ အိမ်မပြန်ချင်ဘူး။ဟိုးမှာ လမ်းတစ်ဖက်မှာ ဓါတ်ပုံဆိုင်လေး……………………….Parn တစ်ယောက် မှန်ရှေ့မှာ Make-up တွေ လိမ်းတယ် … သူမ ဓါတ်ပုံထဲမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လှနေချင်သေးတယ်လေ။“ကျမ ကို လှလှ လေး ရိုက်ပေးနော်” အဘိုးကြီးက သဘောတကျ ပြုံးပြတယ် “စိတ်ချ မင်းကို အနှစ် ၂၀ လောက် ငယ်သွားစေရမယ်”“ချလပ်”Chaya Lumruek ဆိုတဲ့ ဓါတ်ပုံ ဆိုင်ဟာ Parn ကို တောက်ပပြီး လှပတဲ့ အသက်၂၀ အရွယ်ကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။အဆိုတော် ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ Parn ၊ ငယ်ဘဝ ကြမ်းတမ်း နာကျင်ခဲ့ရ ရှာတဲ့ အဘွားကြီး Parn တစ်ယောက် ၊ အသစ် တစ်ဖန် ရရှိ လာတဲ့ သူမ ရဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ်မှာ ပျက်စီး ပျောက်ဆုံးခဲ့ ရတဲ့ စိတ်ကူး အိပ်မက် တွေကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်လေမလား ဆိုတာ ………………………………..ဟုတ်ကဲ့ ….. ဒီကားမှာ ထူးထူးကဲကဲ သဘောကျ တဲ့ အချက်ကတော့ အသုံးပြုထားတဲ့ Music ပါပဲ ၊ ခေတ်ဟောင်းက အဘွားကြီး Parn ဟာ ၊ ယနေ့ ခေတ် Music Trends တွေ ကြားထဲမှာ ဂီတ ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတဲ့ Theme ကို ပေးသွားနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်၊ လူငယ် တွေ နဲ့ လူကြီးတွေကြား အမြင် Gap ဖြစ်နေမှု တွေကို ပါးပါးလေး နဲ့ ပုတ် ပြ သွားတဲ့ ဇာတ်ကား လဲ ဖြစ်လို့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှပါတယ်။ ဇာတ်ကားတဲ့ နောက်ဆုံးမှာ Parn တစ်ယောက် Band နဲ့ ဖြေ ဖျော်သွားတဲ့ သီချင်းကတော့ တကယ့်ကို Touching ပါပဲ။
Jack Reacher2Never Go Back 2016
ဂျက် ရီချာ ပြန်လာပါပြီ။ ဒီကားမှာတော့ မေဂျာဘဝကနေ အနားယူသွားတဲ့ ဂျက်ဟာ ဒီစီကို ပြန်လာရင်း သူ့မိတ်ဆွေ ဗိုလ်မှုးမလေး တန်နာ မတရားစွပ်စွဲခံရပြီး ဖမ်းထားခံထားရတာကို လိုက်ရင်း အစိုးရကန်ထရိုက်တာကြီးတစ်ခုရဲ့ မသမာမှုတွေကို ဖော်ထုတ်ပေးရပါတော့တယ်။ ကုမ္မဏီဘက်က ကြေးစားတွေက သူ့ရဲ့ သမီးလို့ထင်ရတဲ့ ဆမ် ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးနောက်ကိုပါ လိုက်လာတဲ့အတွက် ဂျက်ဟာ တန်နာ ဆမ်တို့ကို ကာကွယ်ရင်း စွန့်စားခန်းထပ်ဖွင့်ဖို့လိုလာတဲ့အခါ…..Tom Cruise, Cobie Smulders, Danika Yarosh သရုပ်ဆောင် ၃ ယောက်လုံးဟာ အတွဲညီနေတော့ ဒီကားကတော့ အတော်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကား ဖြစ်လာတာပါပဲ။
ကဲ . . . cmပရိတ်သက်တို့တွေမျှော်လင့်နေတဲ့ နွေရာသီရဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ရောက်လာပါပြီ။ အခုတင်ပေးမယ့်ကားလေးကို ပရိတ်သက်များအချိန်တော်တော်ကြာအောင်မျှော်လင့်တောင်းဆိုစောင့်စားခဲ့ကြသလို ကျွန်တော်တို့ CM Team တစ်ခုလုံးလည်းမျှော်လင့်စောင့်စားနေခဲ့ကြတာပါပဲ။ ဒီနေ့ကတော့ Deadpool Day of Channel Myanmar လို့ပဲ ပရိတ်သက်ကြီးသိထားပေးပါ။ Marvel ကားတွေထဲမှာမှ IMDb rating 8.0/10 ထိတောင်ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။(မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရုံတွေမှာတင်ပြသွားတုန်းလို ဆင်ဆာလုံးဝမဖြတ်ထားပါဘူး။)Deadpool Review ************** မျက်နှာပြောင်လှတဲ့ Deadpool ရုပ်ရှင်က ဇာတ်လမ်းစ စာတန်းထိုးကတည်းကကို ပြောင်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းပြီး စာတန်းထိုးပြီးတဲ့ထိပါပဲ။ ညစ်တီးညစ်ပတ် ဟာသတွေ၊ မျက်နှာပြောင်နေတာတွေက ကြည့်တဲ့လူကို ရုပ်ရှင်တစ်ကားလုံး မပျင်းရအောင် လုပ်ထားနိုင်တယ်။ ညစ်တီးညစ်ပတ်ဟာသ ဆိုတာ အပြောသာဆိုးတာ တကယ်ဆိုမြန်မာကားတွေထဲမှာ ဒီလိုဟာတွေက ကလေးတောင်သိတဲ့ ဟာသတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ Deadpool ထဲက joke တွေတော်တော်များများက ကျွန်တော်တို့ နားမလည်ပါဘူး။ သူတို့ပြောတာနားမလည်တာရယ် တချို့ဟာတွေက သူတို့ နိုင်ငံမှာပဲ ရှိလောက်မဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်နေလို့ပါ။မင်းသား Ryan Reynolds ကတော့ Deadpool လုပ်ဖို့မွေးလာသလားအောက်မေ့ရတယ်။ တချို့ပြောသလိုပဲ RDJ က Iron Man လိုမျိုး Ryan Reynolds က Deadpool ပဲ။ သရုပ်ဆောင် တော်တော်မိုက်တယ်။ လိုက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။ ရိုက်ချက်တွေအကြောင်းပြောရရင် Deadpool ရဲ့ action ခန်းတွေက ကျွန်တော်ကြည့်ဖူးတဲ့ Superhero တွေထဲမှာ အကြမ်းဆုံးဖြစ်နေသလို တော်တော်များများ နာမည်ကြီး Action ကားတွေထက်လည်း ကြမ်းပါတယ်။ ဟိုလို Man of Steel ထဲကလိုမျိုး ဝုန်းဒိုင်းကြဲကြမ်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ Wade Wilson ရဲ့ Skill ကို ပြသွားတာ တော်တော်မိုက်လို့။ ခုန်ပျံကျော်လွှားတဲ့ဟာတွေ ခုတ်တာဘာညာက တော်တော်ကြည့်ကောင်းတယ်။ Stunt တွေလည်းလှတယ်။4th Wall breaking ကတော့ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲပေါ့။ ဖောက်ချက်က မြင်မကောင်းဘူး။ တခြားရုပ်ရှင်တွေ မင်းသားမင်းသမီးတွေ ရုပ်ရှင် studio တွေလည်းမနေရဘူး။ မင်းသားတစ်ယောက်ဆို တော်တော်သနားဖို့ကောင်းတယ် သူ့ပဲဖောက်နေလို့ ။ နောက်ခံတေး သို့မဟုတ် ပြောင်တေး ကလည်းမိုက်သဗျ။ သီချင်းတွေကောင်းတယ်။နောက်ဆုံးပြောချင်တာက Deadpool ဟာ fan တွေစောင့်စားလာသမျှအတွက် တော်တော်အားရစေမဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းကြီး perfect တော့မဖြစ်၊ သိပ်အားမရဘူးတော့ဖြစ်တဲ့လူဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဇာတ်လမ်းက အခုမှ အစဖြစ်တာရယ် ပြသချိန်တိုတာရယ် အဲ BUDGET က $58 Million ထဲရယ်။ နောက်ကားတွေဆို ဒီထက်ပိုကောင်းလောက်မယ်ထင်ပ။ လုံးဝ 18+ joke တွေ အခန်းတွေမို့လို့ သိကြမဲ့အတိုင်း ကလေးတွေအတွက် တော်တော်ကြမ်းပါတယ်။ ဒါတောင် တချို့အခန်းတွေက ဒီကမိန်းကလေးတွေအတွက် သိပ်မသင့်တော်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ (ဒါပေမဲ့ ဒီမှာတော့ ကလေးဘာညာမရွေး ကြည့်နေကြတာပဲလေနော့) ဒီလောက်ပါပဲ။ အဲလောက်ကြီးအဆိုးကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ Comic fan မဟုတ် marvel fan မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင် action/comedy ကားအနေနဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းတယ်။ နောက်ဆုံး မှာချင်တာက ဇာတ်လမ်းကို ပြီးတဲ့ထိကြည့်ကြပါ။ စာတန်းထိုးပြီးတဲ့အထိ။ ကျွန်တော် Mingalar Sanpya မှာကြည့်တာ။ စာတန်းထိုးတဲ့အထိ မီးမဖွင့်သေးလို့ တခြား ဇွဲကောင်းတဲ့ တခြားပရိတ်သတ် (၂၀) လောက်နဲ့ စောင့်လိုက်တာ အားပါးပါး။ ပါတဲ့အခန်းက လုံးဝတန်တယ်။ မိနစ်ပိုင်းလေးပဲကို စောင့်ကြည့်လိုက်ပေါ့။
ဒီဇာတ်ကားရဲ့ ပထမဆုံးအခန်းမှာတင် လူသတ်မှုကျူးလွန်သူလို့စွပ်စွဲခံရတဲ့လူလတ်ပိုင်းအရွယ်ယောင်္ကျားတစ်ယောက်နဲ့ သူငှါးထားတဲ့ အသက်(၅၀)ခန့်အမျိုးသမီးရှေ့နေတစ်ယောက်တို့စကားပြောနေတာကို ခင်ဗျားတို့တွေ့လိမ့်မယ်… သက်သေအထောက်အထားများအရ လူသတ်မှုကျူးလွန်သူလို့ငြင်းလို့မရပေမယ့် ဒီလူကတော့သူလုံးဝမသတ်ကြောင်းကို ရှေ့နေကိုပြောနေတယ်….သူဟာ မိန်းမရှိရက်နဲ့ တခြားမိန်းမနဲ့ငြိစွန်းခဲ့တာကိုသိလို့ ယူရိုတစ်သိန်းပေးရမယ်လို့ချိန်းခြောက်သူရှိတယ်..ငွေတစ်သိန်းယူပြီး ဟော်တယ်တစ်ခုကို သူ့ငြိခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးနဲ့အတူလာခဲ့ဖို့အမည်မသိချိန်းခြောက်သူကပြောတယ်…သူနဲ့ အဲ့ဒီမိန်းမ ဟော်တယ်အခန်းတစ်ခုမှာစောင့်နေကြတယ်…အဲ့ဒီမှာ သူ့ကို တစ်ယောက်ယောက်က ခေါင်းကိုရိုက်လိုက်တယ်…၁၅မိနစ်လောက်မေ့သွားပြီးသတိရလာတဲ့အချိန်မှာ သူငြိခဲ့တဲ့မိန်းမက သေနေပြီး ရဲတွေလည်းရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အငြင်းပွားစရာမရှိလူသတ်မှုတရားခံဖြစ်သွားတယ်….ဒီလူ့ရဲ့အပြောကို ရှေ့နေကတော့ ဟာကွက်တွေရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ်ရင်းထိန်ချိန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောဖို့ …အဲ့ဒီလိုပြောမှသာ သူကူညီနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနားချတယ်…အဲ့ဒီနောက်မှာတော့……………ဘယ်သူက သူ့ကို လူတစ်ယောက်လုံးသတ်ပြီးချောက်ချတာလဲ…. လူတစ်ယောက်လုံးသတ်ပြီးချောက်ချရအောင် သူတို့ဘာရန်ငြိုးတွေများရှိလို့လဲ….သူနောက်ဆက်ပြောမယ့် အကြောင်းတွေက ဘာများဖြစ်မလဲ…သူပြောတာတွေကရော တကယ့်အမှန်တရားလား……ဒီကားက နောက်ခံတီးလုံးသံအေးစက်စက်အောက်မှာ flashback ပုံစံနဲ့ တစ်ဆင့်ခြင်းဖြစ်စဉ်တွေပြသွားတယ်….ခင်ဗျားတို့ထင်ထားတာထက် နောက်ဆက်တွဲအရှုတ်တွေရှိတဲ့အပြင်အံ့အားသင့်စရာတွေလည်းအများကြီးပဲ…ဇာတ်အိမ်အုတ်မြစ်ချသွားတာကလည်း တကယ့်ကို ခမ်းနားတယ်…..ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းနဲ့ကို တဖြည်းဖြည်းဘာကိုမှန်းမသိလန့်လာတာလိုလို … ဒီလိုကြီးဖြစ်သွားရတာလားဆိုပြီးတစ်ဆက်ထဲတွေးရင်းငါဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲ …စသည်ဖြင့် စ၊ဆုံး ဆွဲဆောင်မှုရှိစွာနဲ့ ခင်ဗျားဟာ ဆက်ပြီးကြည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်….စပွိုင်လာလုပ်ရင် ကြည့်ရတာ ပေါ့ပျက်ပျက်ဖြစ်သွားနိုင်လို့ ဒီလောက်နဲ့ တော်ပါရစေ…ဒီကားကြည့်နေစဉ် မိနစ်(၃၅)မိနစ်လောက်ရောက်တာနဲ့ cm ကအညွှန်းက မလွန်ပါဘူးလေဆိုပြီး ခင်ဗျားတို့ သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်….
Jason Bourne2002 လောက်ကဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ James Bond နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက် ရုပ်ရှင်လောကမှာ ပေါလာတယ်။ နာမည်ကတော့ Jason Bourne တဲ့။ သူ့ကိုကျွန်တော်တို့စတွေ့တော့ Mediterranean ပင်လယ်ထဲမှာ မျောနေတဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ်။ ကျောမှာလည်း သေနတ်ကျည်ပေါက်ရာ နှစ်ခုနဲ့။ ပြဿနာက သူဟာ ဘယ်ကလာပြီး ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာ သူကိုယ်တိုင်မသိတာပဲ။ ဒီလိုနဲ့သူတစ်ဖြည်းဖြည်းသိလာတာကတော့ သူဟာ CIA Operation တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Treadstone လက်အောက်မှာ အလုပ် လုပ်ခဲ့တဲ့ CIA အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့တစ်ယောက်ခွဲထွက်သွားတဲ့ Jason Bourne တစ်ယောက်ဟာ CIA ရဲ့အရှုပ်အရှင်းတွေမှာ ပါဝင်ပတ်သက်လာခဲ့တာ Bourne Identity (2002), Bourne Supermacy (2004), Bourne Ultimatum (2007) နဲ့ယခုဆိုရင် Jason Bourne (2016) ထိတောင်ရှိလာခဲ့ပြီလေ။ (2012 က ထွက်ခဲ့တဲ့ Bourne Legacy ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကို ကျွန်တော် ထည့်မရေးခဲ့ဘူး။ စကားချပ်)——————————————————————————————– Jason Bourne ဇာတ်ကားတွေဟာ ကျွန်တော်တို့လို ယောင်္ကျားလေးပရိသတ်တွေအတွက်တော့ James Bond ထက်တောင်ပိုမိုနှစ်သက်တဲ့ ဇာတ်ကောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ တိကျတဲ့အဖြေတစ်ခုက တစ်ခြား Action ဇာတ်ကားတွေနဲ့မတူတဲ့ Action ခန်းတွေကို တင်ပြပုံဆန်းသစ်လို့ပဲ။ Die Hard ဇာတ်ကားတွေကို စိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့ 21 ရာစုရဲ့အကောင်းဆုံးသော Action ဇာတ်ကား Franchise အဖြစ် နာမည်တပ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော်လို့Jason Bourne အမာခံပရိသတ်တိုင်း ယခု Jason Bourne (2016) ဇာတ်ကားကို သွားကြည့်ကြတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကတော့ Jason Bourne ဒီလောကကြီးထဲကို ဘာကြောင့်ပြန်ဝင်လာတာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကို သိချင်လို့ပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့ ထိုအကြောင်းပြချက်ကို ခိုင်မာစွာ မတွေ့ခဲ့ရဘူး။ အတိတ်က မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ကို ဇာတ်လမ်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအဖြစ် ထည့်ထားလိုက်ပြီး ဇာတ်ကားကို အလွယ်တကူ ဖန်တီးလိုက်တယ်လို့ပဲ ခံစားလိုက်ရတယ်။——————————————————————————————-အမှန်တော့ Jason Bourne သည် ပြီးဆုံးခဲ့ပြီ။ သူ့ရဲ့နိဂုံးသည် 2007 လောက်က New York မြိ ု့ရဲ့East River ထဲကနေ လွတ်မြောက်သွားခြင်းကနေ အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီလေ။ ဒါဆို အခုမှ ဘာကြောင့်ပြန်လာရသလဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ ကျွန်တော်မပြောလိုတော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သေချာတာက သူ CIA ထဲမဝင်ခင်က အကြောင်းအရာတွေနဲ့CIA ကို ဝင်ရောက်ခါစက အဖြစ်အပျက်တွေကို စက်ဝိုင်းတစ်ပတ်ပြည့်အောင် ဇာတ်လမ်းကို ပိတ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။Operation Blackbriar ကို သူဖော်ထုတ်ခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီ။ သူဟာ အတိတ်ကိုလည်း ပြန်မှတ်မိသင့်သလောက် မှတ်မိနေပြီ။ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝတစ်ခု မဟုတ်ပေမဲ့ လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ သူဟာ အသက်ရှင်နေတယ်။ သူကျင်လည်ခဲ့တဲ့ လောကကြီးနဲ့ပြတ်ခဲ့တာ ဘယ်လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီလဲပင် မသိပေ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့လွတ်ကင်းနေတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘဝကို ပြန်ဝင်ရောက်လာတာက Nicky Parsons။ ဒီတစ်ခါ သူမရောက်ရှိလာတာ ပို၍ အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခု ပါလာလိမ့်မယ်ဆိုတာ သူကြိုတင်ခန့်မှန်းပြီးသား။ ထို့ကြောင့်လည်း သူမချိန်းဆိုထားတဲ့အတိုင်း သူမကို တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ သူထင်ထားတဲ့ တစ်ခြားအကြောင်းအရာတော့မဟုတ်။ သူမယူဆောင်လာတဲ့ သတင်းက သူ့ရဲ့အတိတ်က သူ မသိသေးတဲ့ ပို၍အရေးကြီးတဲ့ သတင်းတစ်ခုပဲ။ Iceland ရဲ့Reykjavík မြို့မှာ Nicky Parsons တစ်ယောက် CIA ရဲ့Mainframe servers တစ်ချို့ကို hack ပြီး အချက်အလက်တစ်ချို့ကို ယူဆောင်လာကတည်းက CIA က သူမနောက်ကို ထပ်ချက်မကွာ လိုက်လာနေပြီ။ ဒီနေရာမှာ CIA ဟာ Nicky Parsons နောက်ကို လိုက်ရင်း ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့ သူတစ်ယောက်ကတော့ သူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သူတစ်ယောက် မဟုတ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ထိုသူက Jason Bourne ….——————————————————————————————-ဇာတ်ကောင် Jason Bourne ဟာ CIA Operative ကို ထွက်လာခဲ့တာ ကြာပြီဖြစ်သလို မင်းသား Matt Damon ဟာ Jason Bourne ဇာတ်ကောင်ကနေ ထွက်ခွာခဲ့တာ ကြာခဲ့ပြီ။သူ့အနေနဲ့ယခုဇာတ်ကားကို ပြန်လည် ရိုက်ကူးဖြစ်လိမ့်လို့တောင် ထင်မထားခဲ့ဘူး။ Bourne Ultimatum (2007) မှာ အားလုံးအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီလို့သူတို့အားလုံးထင်ခဲ့ကြတာကိုး။ ဘာကြောင့်လဲဆို ပထမဇာတ်ကား3ကားအခြေခံရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ Robert Ludlum ကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့တဲ့ ဝတ္ထုတွေဟာလည်း3အုပ်ပဲရှိပြီး Bourne Ultimatum မှာ နိဂုံးချုပ်ခဲ့ပြီကိုး။ Director Paul Greengrass ကိုယ်တိုင်လည်း ထို project နေထွက်ခွာခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း 2014 September လတုန်းက Director Paul Greengrass နဲ့မင်းသား Matt Damon တို့နောက်ထပ် Jason Bourne ဇာတ်ကားသစ်ကို ရိုက်ကူးတော့မယ်လို့သတင်းထွက်လာတော့ လူတိုင်း အံ့သြသင့်ခဲ့တာကိုး။——————————————————————————————–Jason Bourne ဇာတ်ကားတွေဟာ အရင်တုန်းကတော့ ပရိသတ်တွေအပေါ်မှာ Entertainment အနေတစ်ခုနဲ့သာ စံနှုန်းတင်ထားခြင်းခံခဲ့ရပေမဲ့ ယခုနှောင်းပိုင်းနှစ်တွေအတွက်တော့ Edward Snowden ရဲ့case တွေဟာ ကမ္ဘာအနှံကလူသားတွေနဲ့မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးနောက် ထိုတစ်ကယ့် ဖြစ်ရပ်မှန်တွေဟာ ယခုလို ဆင်တူယိုးမှားဇာတ်လမ်းမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ Jason Bourne လို ဇာတ်ကားတွေအပေါ်မှာတော့ ဖိအားတွေ ရှိလာခဲ့ရတယ်။ လူတိုင်းဟာ Jason Bourne ကို Snowden နဲ့Reference တောင်လုပ်ချင်လုပ်လာကြတယ်။ Jason Bourne ဟာ ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေပေမဲ့ Snowden ကတော့ လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်ပကမ္ဘာမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ လတ်တလော အဖြစ်အပျက်တွေပဲလေ။—————————————————————————————–ထားပါ။ ကျွန်တော် ဇာတ်ကောင်အကြောင်းနည်းနည်းပြောချင်လို့။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရော ကျွန်တော်တို့Page က တစ်ခြား Admins တွေပါ Jason Bourne အကြောင်း မရေးဖူးသေးဘူးလေ။ Jason Bourne ဟာ ဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတာပေ့ါ။ စောစောက ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း သူဟာ James Bond လို စုံထောက်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ James Bond နဲ့အရာအားလုံးကွာခြားတယ်။ သူဟာ စကားနည်းသလောက် ဘယ်အရာကိုမှ အကျိုးအမြတ်မယူဘူး။ လက်တွေ့လောကနဲ့ပိုနီးစပ်တယ်။ အလွန်တော်ပေမဲ့ အသုံးမဝင်တဲ့ လူစားမျိုး။ သူဟာ သူ့ရဲ့ဖြစ်တည် အသက်ရှင် ရပ်တည်မှုကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ မေးခွန်းထုတ်နေရမဲ့ သူမျိုးလို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။ သူဟာ အမြဲတမ်း နိုကြားနေတဲ့ သတိနဲ့နေတဲ့လူသား။ တိုက်ခိုက်မှု စွမ်းရည်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် အရွယ်အစားကို သူဂရုမစိုက်။ လူကောင်ချင်း မျှတသည်ဖြစ်စေ မမျှတသည်ဖြစ်စေ သူ့မှာ တစ်ခြားပြိုင်ဘက် ရန်သူထက် သာလွန်နေတဲ့တစ်ချက်က လက်ရှိအခြေအနေကို ကောင်းစွာအသုံးချနိုင်တဲ့ ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းရည်ပဲ။ သူ့မှာ Superpowers တွေ မရှိဘူး။ သို့သော် Skills တွေတော့ ရှိတယ်။ ဒါကို ဆိုလိုချင်တာ။ ဥပမာ သူ့မှာ လတ်တလော အခြေအနေအရ လက်နတ်မရှိပေမဲ့ အနီးအနားမှာ ရှိတဲ့ Magazine စာအုပ်တို့ဘာတို့ကိုတောင် ကောင်းစွာအသုံးချသွားပြီး ရန်သူကို ပြန်လည် ကောင်းမွန်စွာ တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ သူမျိုး။ ကျွန်တော်တို့တွေ သူ့ကို နှစ်သက်ရတဲ့ အချက်ကလည်း ဒီအချက်ပဲ။ သူဟာ ကျဉ်းတည်းကျပ်တည်း အခြေအနေတစ်ခုကနေ မည်ကဲ့သို့လွတ်မြောက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ပရိသတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကြည့်ရတာ Jason Bourne ဇာတ်ကားတွေရဲ့အဓိကအချက်တစ်ခုပဲ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် Daniel Craig ရဲ့ပြန်လည်ဆန်းသစ်ထားတဲ့ James Bond ဇာတ်ကားတွေဟာ Jason Bourne ဇာတ်ကားတွေကို စံနမူနာ ယူခဲ့တယ်လို့တောင် ထင်မှတ်စရာ ကောင်းလှတယ်။ဒါဆို ခု ကျွန်တော် ဆက်ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာက Jason Bourne ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ကြေးစားလူသတ်သမားလို့မြန်မာလို ရိုးရှင်းစွာခေါ်လို့ရတဲ့ Assets တွေအကြောင်းပဲ။ အရင် ဇာတ်ကား3ကားရဲ့Assets တွေအဖြစ် Clive Owen, Karl Urban နဲ့Edger Ramirez တို့က သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီး ယခုနောက်ဆုံးဇာတ်ကားမှာတော့ Vincent Cassel က သရုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ တစ်ကယ့်ကို Deadly Assassins တွေပါ။ အရင်ဇာတ်ကားတွေက Assets တွေက တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားကြောင့်ဖြစ်ပေမဲ့ ယခုဇာတ်ကားက Asset (Vincent Cassel) ကတော့ Bourne အပေါ်မှာ Personally အရပါ နာကျည်းချက်တွေ ရှိနေခဲ့ခြင်းကြောင့် ပိုမိုပြင်းထန်တယ်လို့ခံစားခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ ယခုဇာတ်ကားသစ်မှာ Matt Damon နဲ့Julia Stiles တို့က ပြန်လည်ပါဝင်ခဲ့ကြပြီး ကျန်သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, Vincent Cassel နဲ့Riz Ahmed တို့ပဲဖြစ်တယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေအပိုင်းမှာတော့ Matt Damon ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကို ပိုအလေးပေးရေးသားထားတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းကြောင့် မည်သူမှ ပို၍ကောင်းတယ်ဆို ဝေဖန်ဖို့ခဲယဉ်းတယ်။——————————————————————————————–အရင် Jason Bourne ဇာတ်ကားတွေကို ကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေ ခုစာဖတ်သူတွေထဲမှာ ရှိတယ်ဆိုရင် ဘယ် Action ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို မှတ်မိနေသေးလဲ။ ထို ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကြောင့်ပဲ Jason Bourne ဇာတ်ကားတွေဟာ နာမည်ကြီးခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်ရှင်းပြပါရစေ။ ခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ Action ကားတွေ မြောက်များစွာ ထွက်ပေါ်လာတယ်နော်။ ဒါပေမဲ့ ထိုရုပ်ရှင်တွေရဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို မှတ်မိပါသေးလား? ကျွန်တော့်အတွက်တော့ တစ်ချို့ဇာတ်ကားတွေဟာ ဝါးတားတားပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ Jason Bourne ဇာတ်ကားတွေရဲ့Action ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကိုတော့ ခုထိ မှတ်မိနေတုန်းပဲ။ဥပမာ .. Bourne Identity ထဲကဆိုရင် American သံရုံးကနေ ထွက်ပြေးရတဲ့အခန်း။ တိုက်အစွန်အဖျားလေးတွေပေါ်မှာ ကန့်လန့်သွားနေရတဲ့ ထိုအခန်းရယ်၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ Paris မြို့ပေါ်က လမ်းမတွေပေါ်က Car Chasing ခန်း နဲ့ထိုဇာတ်ကားရဲ့နောက်ဆုံးခန်း တိုက်အတွင်းက လှေကားထစ်တွေပေါ်ကနေ အောက်ကို တစ်ရှိန်ထိုးခုန်ချပြီး လှေကားပေါ်က ရန်သူတွေကို သေနတ်နဲ့ပစ်သွားတဲ့အခန်းတွေ။နောက်ပြီး Bourne Supermacy ဆိုရင်လည်း စစချင်းမှာပဲ Marie မောင်းနှင်နေတဲ့ ကားကို အနောက်က လူသတ်သမားက ထပ်ကြပ်မကွာလိုက်ပြီး သူမကို သတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခန်း၊ Berlin မြို့က ဘူတာရုံက ဇာတ်ဝင်ခန်း နဲ့နောက်ဆုံး Moscow မြို့ပေါ်က လမ်းမတွေပေါ်က ရန်သူနဲ့သဲကြီးမဲကြီးတိုက်ခိုက်ကြတဲ့ Car Chase ခန်းတစ်ခန်း။ထို့နောက် ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Bourne Ultimatum ဇာတ်ကားထဲက ပထမဆုံး ဇာတ်ဝင်ခန်းဖြစ်တဲ့ London မြို့ရဲ့Waterloo ဘူတာရုံက လူအုပ်တွေကြားထဲက သတင်းစာဆရာကို ကယ်တင်တဲ့အခန်း၊ ထို့နောက် Tangiers က ပြေးတန်းလိုက်တန်းဇာတ်ဝင်ခန်း (ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး) ဒီဘက် အဆောက်အဦးရဲ့ပြတင်းပေါက်ကနေ ဟိုဘက် အဆောက်အဦးရဲ့ပြတင်းပေါက်ကို ခုန်ချသွားတာကို Cinematography ကပါ သရုပ်ဆောင်နောက်က အတူ လိုက်ရိုက်ပြသွားတဲ့ အခန်း၊ နောက်ဆုံး New York မြိ ု့ရဲ့Parking Bay ကနေ ကားကို နောက်ပြန်မောင်းချသွားတဲ့ Car Chasing အခန်းတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေအတွက် ဘယ်တော့မှ မမေ့တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ။——————————————————————————————ယခုဇာတ်ကားမှာလည်း ထိုကဲ့သို့Iconic ခန်းတွေမပါဘူးလားဆိုတော့ ပါတာပေါ့။ ပထမဆုံး action ခန်းဖြစ်တဲ့ Greece နိုင်ငံက ဆန္ဒပြပွဲညက ဒေါသထွက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးတွေနဲ့မဲမဲမြင်သမျှလိုက်ဖမ်းဆီးနေတဲ့ ရဲသားတွေရဲ့ကြားထဲကို ရောက်သွားတဲ့ Jason Bourne နဲ့Nicky Parsons တို့အပြင် သူတို့နှစ်ယောက်ကို သတ်ဖြတ်ဖို့လိုက်နေတဲ့ Asset ရဲ့ရန်က ပြေးရတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းဟာ အသက်ရှုမှားလောက်ပါပေတယ်။ ဒါတင်ပဲလား။ ဘယ်ကမလဲ။ နောက်ဆုံး Las Vegas ရဲ့ညက လမ်းမတွေပေါ်က Car Chasing ခန်းဟာ ဒီနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး Action ခန်း ဆိုတဲ့ ဆု ရဖို့တောင် ထိုက်တန်လွန်းတယ်။ ထိုဇာတ်ဝင်ခန်းလေးကိုပဲ ရိုက်ကူးဖို့မိုင်တစ်ဝက်ခန့်ကို ပိတ်ခဲ့ရတယ်။ သေသေချာချာ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ် plan ချပြီး အသေးစိပ်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခန်းပါ။ ထိုအခန်းလေးတစ်ခန်းကို ရိုက်ကူးဖို့ပဲ ပြင်ဆင်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်က7လ ကြာပြီး၊ တစ်ကယ် ရိုက်ကူးခဲ့ချိန်ကတော့ 17 ည တိတိပါ။ သူတို့ရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်တိုင်း လမ်းမတွေပေါ်မှာ အမှန်တစ်ကယ် ရှိနေခဲ့တဲ့ ကားအရေအတွက်ဟာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် 300 ကျော်ခန့်ရှိပြီး သူတို့ရိုက်ကွင်းမှာ အမှန်တစ်ကယ် ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတဲ့ ကားအရေအတွက်ကတော့ 60 ဖြစ်ပြီး (ဒါတောင် Rehearsals လုပ်ခဲ့တုန်းက ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ ကားအရေအတွက်မပါပါ။) Stunt drivers ပေါင်း 45 ယောက်တိတိ နဲ့သရုပ်ဆောင်ပေါင်း အယောက် 250 ကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါဟာ ဇာတ်ဝင်ခန်းလေး တစ်ခန်းအတွက် အသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့ ဒီဇာတ်ကားရဲ့အလေးထားမှု သက်သက်ပဲ။နောက်ဆုံးပြောချင်တာ တစ်ခုကတော့ ဒီဇာတ်ကားဟာ အကောင်းဆုံး Jason Bourne ဇာတ်ကားတစ်ကား မဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ ဒီနှစ်အတွက်တေ့ာ အကောင်းဆုံး Action ဇာတ်ကားဆိုတာ ကျွန်တော် ရဲရဲကြီးပြောရဲပါတယ်လို့ပဲ။ နောက်ထပ် Jason Bourne ဇာတ်ကားတွေအတွက် မသေချာတော့ပေမဲ့ ထပ်မံ ရှိလာအုံးမယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်ကတော့ ကြိုဆိုနေမှာပါ။
ollywood ဇာတ်ကားကတော့ အပျော်ကြည့်ရန်သက်သက်ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ Comedy…Sex Comedy ..Horror ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီး ယခင် Grand Masti (2013) ရဲ့အဆက်အနေနဲ့တင်ဆက်ထားတာပါ။Grand Masti (2013) မြန်မာစာတန်းထိုးကို မကြည့်ဖူးသေးရင် https://channelmyanmar.org/grand-masti-2013/ မှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်။မင်းသမီး Urvashi Rautela နဲ့ မင်းသား (၃)ယောက် Riteish Deshmukh..Vivek Oberoi..Aftab Shivdasani တို့အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ဘောလိဝုဒ်ရဲ့ အပျော်ဇာတ်ကားသပ်သပ်အဖြစ်ခံစားကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Winter’s War (2016)
IMDb rating 6.1/10 ပဲ လက်ရှိမှာရထားသေးပေမယ့်ပရိတ်သက်တော်တော်များများကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါပဲ . . . ပါဝင်ထားတဲ့မင်းသားက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်လိုက်ကြီး Thor မင်းသား Chris Hemsworth က Huntsman အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။တကယ်တော့ ဒီဇာတ်ကားဟာ 2012 ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့Snow White and the Huntsman ရဲ့ အဓိကဇာတ်အိမ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအစောပိုင်းမှာစုန်းမ၂ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရဗန်နာ နဲ့သူ့ညီမ ဖရယ်ယာတို့နဲ့စတင်ထားပါတယ်။ ရဗန်နာဟာ snowwhite ကားထဲကစုန်းမဖြစ်ပြီး သူ့ညီမရဲ့ချစ်ခြင်းကိုပါ ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်ခဲ့တဲ့ ဖရယ်ယာ တစ်ယောက်သူ့ရဲ့အင်ပါယာကိုစတင်တည်ထောင်မှုကနေ Huntsman ရဲ့ ဇာတ်လမ်းပါပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားဟာ Snow White ကားမစတင်ခင်ကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့Snow White ကားပြီးတော့ ထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အချိန်ကာလနှစ်ခုကိုပြန်လည်ဆက်စပ်ပေးထားတဲ့ ဇာတ်ကားဆိုလည်းမမှားပါဘူး။Snow White ရဲ့လက်ချက်နဲ့သေဆုံးခဲ့တဲ့ ရဗန်နာကဒီဇာတ်လမ်းမှာပြန်လည်ရှင်သန်လာတာလည်း တွေ့ရပြီး . သူ့ရဲ့မှော်ကြေးမုံဟာ ဒီဇာတ်ကားမှာအဓိကနေရာကပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ကဲ ဇာတ်လမ်းကောင်းကောင်းကို spoiler မဖြစ်စေဖို့ဒီလောက်ပဲညွှန်းပါရစေ Snow White ကားမကြည့် ရသေးသူကလည်း ပြန်လည်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင် ဇာတ်အိမ်တစ်ခုလုံးကိုပိုပြီးနားလည်လာပါ လိမ့်မယ်။ တရုတ်စာတွေတွဲလျှက်ပါနေပေမယ့် ရုပ်ထွက်ကHD ဖြစ်နေတာကြောင့်အတတ်နိုင်ဆုံး အဆင် ပြေအောင်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
IMDb 6.9 Rotten Tomatoes 100 percent
2016ခုနှစ်ထွက် korea movieတွေထဲမှာ
အကောင်းဆုံးလို့ ပြောရမယ့် train to busan
(၃ခါတောင်ကြည့်တာ ပြီးမှဘာသာပြန်တာ )
ဇတ်လမိးအကျဉ်းကိုပြောပြရရင် KIA (ကီယာပါခင်ဗျာ သူပုန်ဟုတ်ဘူးနော် )
ကားcompanyအရောင်းဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့လီဂျံုဆူတစ်ယောက်သူ့
ဒီနေ့ မှာတော့ အိန္ဒိယစွန့်စားခန်း အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးအကြောင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကို ဘီစီ ၂၀၁၆ ကာလမြင်ကွင်းနဲ့ အစပြုထားပြီး ဆာမန်းနဲ့ ဟိုဂျိုတို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာ အမ်ရီဆိုတဲ့ ရှေးဟောင်းရွာလေးမှာ နေထိုင်သူတွေပါ။ တစ်ရက်မှာတော့ လှေနဲ့ မြစ်ကျောင်းတစ်လျှောက်သွား လာကြရင်း မိကျောင်းသုံးကောင်နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကာ ဆာမန်းက အကြီးဆုံးမိကျောင်းကို သတ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက မိဘနှစ်ပါးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရာဟာ ဆာမန်းကို ယနေ့အထိ ခြောက်လှန့်နေပြီး မိုဟန်ဂျိုဒါရိုမြို့က ဦးချိုတစ်ခုတည်းပါတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ သတ္တဝါကြီးအကြောင်းကိုလည်း မကြာခဏအိပ်မက်မက်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ရက်မှာတော့ ဆာမန်းဟာ ဦးလေးဖြစ်သူ တားနေတဲ့ကြားကနေပဲ မိုဟန်ဂျိုဒါရိုကိုသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမြို့ဟာ ကြမ်းတမ်းရက်စက်တဲ့အပြင် ဘယ်သူ့ကိုမှ မယုံကြည်ရတဲ့အကြောင်း သူ့ဦးလေးက သတိပေးခဲ့ပြီး သေရေးရှင်ရေးကြုံတဲ့အခါမှာ သုံးဖို့အတွက် အဆောင် ပစ္စည်းတစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်။
မိုဟန်ဂျိုဒါရိုမြို့ကို အာဏာရှင်မာဟမ်နဲ့ သူ့သားဖြစ်တဲ့ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲတဲ့ မွန်းဂျာတို့က အုပ်ချုပ်နေတာပါ။ ဆာမန်းဟာ မိုဟန်ဂျိုဒါရိုက ဩဇာရှိဘုန်း တော်ကြီးရဲ့ သမီးဖြစ်တဲ့ ချာနီဆို တဲ့ မိန်းမလှလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံခဲ့ပါတယ်။
အာဏာရှင်မာဟမ်ရဲ့ အခွန်အကောက်သစ်တွေကို ဆန့်ကျင်ကြတဲ့ ဘယ်သမားအဖွဲ့တွေကို မာဟမ်ရဲ့ စစ်သားတွေက အပြတ်ရှင်းပစ်ရာမှာ ဆာမန်းက ဝင်ကူခဲ့ပါတယ်။ ချာနီကိုလည်း မြင်းတွေကြားထဲက ကယ်တင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် နှစ်ဦးသား ချစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ ချာနီဟာ ကောက်ကျစ်တဲ့မွန်းဂျာနဲ့ လက်ထပ်ဖို့အတွက် အတင်းအဓမ္မစေ့စပ်ခံထားရတာပါ။ နောက်တော့ ဆာမန်းဟာ မာဟမ်ဆန့်ကျင်ရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး မာဟမ်က ဆာမန်းကို သတ်ပစ်ချင်ပေမယ့်လည်း အလောင်းအစားတိုက်ပွဲတစ်ခု စိန်ခေါ်ခဲ့ပြီး ဆာမန်းနိုင်ခဲ့ရင် ချာနီကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးမယ့်အကြောင်း သဘောတူခဲ့ပါတယ်။
မကောင်းဆိုးဝါးမာဟမ်က ဆာမန်းကို ဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာလဲ၊ ဆာမန်းနဲ့ မိုဟန်ဂျို ဒါရိုက ဘယ်လိုဆက်စပ်မှုတွေရှိနေတာလဲ၊ ချစ်သူနှစ်ဦးကော ပေါင်းစည်းခွင့်ရကြမှာလားဆိုတာ ဆက်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ရှေး ဟောင်းနောက်ခံ အချစ်ဇာတ်ကားလို့ဆိုပေမယ့်လည်း အက်ရှင်ဇာတ်ကွက်လေးတွေပါတာမို့ ပရိသတ်တွေသဘောကျမှာပါ။
(ရုပ်ရှင်အညွှန်းကို 7Daydaily.com မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
မင်းသားကတော့ လက်ပွားမင်းသား (Hrithik Roshan) ဖြစ်ပြီး မင်းသမီး Pooja Hegde နှင့်အခြားသရုပ်ဆောင်များစွာပါဝင်ထားပါတယ်။ IMDB (6.3/10) ပါ။
မင်းသမီး Neha Sharma အဓိကပါဝင်ထားတဲ့ Drama,Romance အမျိုးအစား Bollywood ဇာတ်ကားပါ..
အချစ်ကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ နှလုံးသားက ဘယ်နေရာမှာ သာယာမလဲဆိုတာ အမြဲတမ်းခက်ခဲနေတတ်ပါတယ်…
ကြာမြင့်ချိန် ၂ နာရီခွဲနီးပါးရှိတာကြောင့် အေးအေးဆေးဆေးကြည့်ရှုခံစားသင့်ကြောင်းပါ။
IMDb (4.8/10) သာရရှိထားပေမယ့် Bollywood ရဲ့ အက အလှ တွေနဲ့ အချစ်ရဲ့စေစားရာကို လိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့ ထိုက်တန်ပါတယ်။
ဒီလောကကြီးထဲမှာ လူရယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင် လောကဓံရဲ့ရိုက်ချက်တွေကံတရားရဲ့ ကစားကွက်တွေ
ချစ်ရသူတွေကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ခံစားမှုရဲ့ ဒဏ်တွေကို တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကတော့ အလူးအလဲခံစားကြဖူးကြမှာပါပဲ
ဒီလို နာကျင်မှုတွေ ထိုးနှက်ချက်တွေကြားမှာ လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကြံ့ကြံ့ခံ ရပ်တည်နေနိုင်ပါ့မလား
ဒါမှမဟုတ် အရာအားလုံးကို နာကျည်းမုန်းတီးသွားမလား…?
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ Batman ရဲ့ အဓိကရန်သူတော် Villain ကြီး Joker ဟာ သူဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ လောကဓံရဲ့
ရိုက်ချက်တွေ သူ့အပေါ် ပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ အခါမှာ သူ့ရဲ့ကျရှုံးမှုတွေ နာကျင်မှုတွေ ကနေ
အရာအားလုံးကို နာကျည်း မုန်းတီးသွားခဲ့ပြီး ရူးသွပ်စွာ ရက်စက်တတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်အဖြစ်ကို
အသွင်ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ် နောက်ပြီး Joker ဟာ သူ့လိုပဲ လူတိုင်းဟာ
စိတ်ဒါဏ်ရာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရသွားခဲ့ ရင် ရူးသွပ်သွားမှာပဲဆိုတဲ့ အချက်ကို သက်သေပြဖို့အတွက် ဘယ်လို ဘယ်ပုံတွေ
ရက်စက် အကွက်ချ လုပ်ပြမလဲဆိုတာကတော့ ဒီဇာတ်ကားရဲ့အဓိက ဇာတ်အိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
မြင်ရခဲတဲ့ Jokerရဲ့နောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကို ဒီကားထဲ မှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး
Batman နဲ့ Joker ရဲ့ကြားထဲက relationship ကို လေးလေးနက်နက်ပုံဖော်ပြထားပါတယ်
1988 ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့The Killing Joke comicကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူး ထားတဲ့ဒီဇာတ်ကား ဟာ
အချိန်ကန့်သတ်ပြသပေမယ့်လဲ ပြသခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်အတွင်းမှ3.8သန်းအထိဝင်ငွေရရှိခဲ့ပြီး Box-Office ရဲ့
အခြား ရိုမန့်ရုပ်ရှင်တွေလိုပဲ ဒီရုပ်ရှင်က ငယ်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်
အေးအေးငြိမ့်ငြိမ့်လေးနဲ့ Narrative ပုံစံတစ်ခုနဲ့ ဆွဲခေါ်သွားမှာပါ
Synopsis -ရုပ်ရှင်အဖွင့်မှာ ငယ်ငယ်တုံးက
ကြာတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဘာခေါင်းစဥ်တပ်ရမလဲကို
James Reid နဲ့မင်းသမီး Nadine Lustre တို့သရုပ်ဆောင်ထားက
တခြားcast တွေက comedy ဖြစ်ပြီးကြည့်
အတွက်ဆို ကြည့်ရအဆင်ပြေမယ့် ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ
IMDb rating- 6.7/10
“Our Times”တို့ “You are the apple of my eyes”တို့လိုကျောင်းသားကားတွေရဲ့ Vibeကိုကြိုက်တတ်တဲ့သူတွေဆိုရင် ဒီကားကိုလည်းကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
Box office မှာ ယွမ်26.3millions ရရှိခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့သူအထင်သေးတဲ့*ကောင်းရှန်*ဆိုတာ သူ့အိပ်မက်ကိုတကယ်ဖြစ်လာအောင်လုပ်ရဲပြီး စိတ်ထားမှန်ကန်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့*ထျန်းကျောင်း*လည်း လူငယ်ဘဝကိုကောင်းကောင်းနားလည်လာပြီး အိပ်မက်အစစ်အမှန်ကဘာလဲဆိုတာသိလာခဲ့ပါတယ်။
စာကလွဲပြီးဘာမှမစွန့်စားရဲတဲ့”ထျန်းကျောင်း”တစ်ယောက် “ကောင်းရှန်”ရဲ့အားပေးမှုတွေနဲ့ သူလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ရဲလာခဲ့ပါတယ်။
ကောင်းရှန်နဲ့တွေ့ပြီးနောက်မှာ ဘဝအပေါ်မြင်တဲ့အမြင်တွေပြောင်းလဲသွားတာကရော မှန်ကန်မယ်လို့ထင်ပါသလား…
မိသားစုကိစ္စတွေ သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်တွေနဲ့ သူတို့တွေတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ဘဝတွေကိုကြည့်ရင်း လူငယ်ဘဝအငွေ့အသက်တွေကိုပြန်ခံစားမိပြီး ငယ်ဘဝကိုပြန်အမှတ်ရလာပါလိမ့်မယ်။
နာရီတွေကို ရပ်ထားရင် ဘာတွေ
တောင်တွေပေါ်ကို ခရီးထွက်ခဲ့ကြတဲ့ ကလေးတစ်စု
သွားခဲ့ရာက မတော်တဆ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ကြပါတယ်။
ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ၁၃ နှစ်သား ကောင်လေးက
အသက် ၃၀ အရွယ် အမျိုးသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြန်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အခါမှာ ……
ကောင်မလေးကရော သူ့သူငယ်ချင်းကို မှတ်မိနိုင်ပါ့မလား?
ကောင်လေးက အချိန်တွေကို ရပ်တန့်ထားနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ကလေးတွေကို သတ်တဲ့လူဟာလည်း
အဲဒီအမျိုးသားလို့ သံသယဝင်ခံရတဲ့အချိန်မှာတော့ …..
ဇာတ်လမ်းက တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
မင်းသားကတော့ Too Beauty to Lie ထဲက
Gand Dong Won ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
IMDb – 7.3/10 ရထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်း ဖြစ်တာမို့
သူမရဲ့အမြွှာအစ်ကိုဖြစ်သူ သေဆုံးမှုကြောင့် အန်နာဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာ စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီး အတိတ်ကနေ ရုန်းမထွက်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်
သူမရဲ့အမေက အန်နာ စိတ်ပြန်လှည်လာနိုင်ဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် မထူးခဲ့ပါဘူး
အဲ့လိုခေါင်းမာလွန်းလှတဲ့အန်နာဟာ ထူးဆန်းတဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံခဲ့ရပါတယ်
အလျှင်းသင့်သလို ဟာသလေးတွေကိုလည်း ထည့်ပေးထားတာမို့ ကြည့်ပျော်စေမယ့် ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပါပဲ ။
Patersonဇာတ်ကားဟာ အချစ် ကဗျာစာပေ နဲ့ မျှော်လင့်ချက်အိမ်မက် တွေအကြောင်း
ခံစားပြထားသလို Paterson အမည်ရှိဇာတ်ကောင်က နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရသမျှကိုလည်း ကဗျာ
ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝပုံစံနဲ့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဉီးရဲ့အပြန်အလှန်ချစ်ခင်ဖေးမမှုတွေကို ဇာတ်လမ်းထဲမှာကြည်နူး
ဖွယ်တွေ့နိုင်တယ်။ မျှော်လင့်ချက်တွေဟာ လက်တွေ့လုပ်ရင်ဖြစ်လာကြောင်းကို ပညာပေးဆန်ဆန်
ပြထားပါတယ်။ အဆိုးတွေကြုံလာသည့်တိုင်အောင် အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာတုံ့ပြန်တတ်တဲ့
စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရသ ကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ စွဲမက်စရာဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ။
သမားရိုးကျနိုင်လွန်းတဲ့ သို့ ပုံစံခွက်ထဲအများစုဝင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားထဲမှာ
disaster/survival ရုပ်ရှင်များလည်း ပါပါတယ်။ Titanic,
The day after tomorrow တို့လိုကားတွေ လူကြိုက်များခဲ့၊
အောင်မြင်ခဲ့ကြပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ဒါမျိုးကားတွေ
သိပ်အလုပ်မဖြစ်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဥပမာ World Trade Centre, Poseidon တို့လိုကားတွေ။
ဒီလိုဇာတ်ကားများမှာ ဖော်မျူလာကျ ဇာတ်ကြောင်းပြောတဲ့ပုံက
ကျွန်တော်တို့နဲ့အတော်ကျွမ်းဝင်နေခဲ့ပြီ။ အစပိုင်းမှာ Victims
ဒါဟာ နောက်ပိုင်းမှာ ဇာတ်ကောင်ကိုပိုမိုကရုဏာသက်စေဖို့အထောက်အကူပြုတယ်။
သေကြ၊ ကြေကြ၊ ပျက်ဆီးကြမယ်။ ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံကြမယ့်
သူရဲကောင်းတွေပါမှာဖြစ်သလို တစ်ဘို့သမား ဗီလိန်များလည်းပါရလိမ့်မယ်။
ဒီလို ပုံစံကျရှိနေတဲ့ ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားမို့လို့ ပရိသတ်တွေရိုးအီလာတာရှိမှာဖြစ်သလို
ဒီပုံစံမှာ ဆက်လက် ရင်ခုန်ခံစားချင်၊ စီးမျောချင်တဲ့ပရိသတ်လည်းရှိဦးမှာပါပဲ။
Deepwater Horizon ဟာလည်း 2010 ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Deepwater Horizon ဆိုတဲ့ ပင်လယ်ရေနံတူး Rig ကြီးဟာ
မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့မှာ မတော်တဆ မီးလောင်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး အမေရိကန်ရဲ့
အဆိုးရွားဆုံး လောင်စာဆီဖိတ်စင်မှုကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကြီးအပေါ်
သေချာလေ့လာရေးသားထားတဲ့ New York Times ကဆောင်းပါးကိုအခြေခံကာ
ဒီရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့လည်း အချက်အလက်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ရေနံတွင်းကြီးကိုပိုင်တဲ့ BP managers တွေဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ထက်
test တစ်ခုကို (Cement test ဟုကြားသည်။ မသေချာပါ။) မလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
တကယ်ရေနံတူးကြသူတွေကတော့ Transocean ဆိုတဲ့
Drilling company ကသူများဖြစ်ပါတယ်။ Michael Williams (Mark Wahlberg) က
Transocean ရဲ့ Chief electric technician တစ်ယောက်ပါ။ ရေနံတွင်းတူးသမားတွေရဲ့
Captain (Kurt Russell) ကတော့ သင်္ဘောပေါ်ကလူအားလုံးရဲ့
ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် သူတာဝန်ရှိတာမို့ BP managers များရဲ့
နောက်ဆုံးတော့ Cement test မလုပ်ရင်တောင် နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့
Negative pressure test ကိုပြုလုပ်ဖို့သဘောတူကြတယ်။
ဒီ test ကိုပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါ ပင်မရေနံပိုက်လိုင်းမှာ ဖိအားတွေဟာ
အန္တရာယ်ရှိအဆင့်ထိ မြင့်တက်နေခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင်
လုပ်ငန်းကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတော့မှာဖြစ်ပေမယ့် BP representative တစ်ဦး
(John Malkovich) က ဖိအားများရင် ရေနံတွေဘာလို့ပန်းထွက်မလာတာလဲလို့
အကြောင်းပြပြီး (သူ့ရဲ့ Bladder effect ဆိုတာတွေရှင်းပြပြီး) ပင်မရေနံလိုင်းရဲ့ဘေး၊
kill line မှာနောက်ထပ် Negative pressure test ထပ်လုပ်စေပါတယ်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ pressure က zero level ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
Deepwater Horizon ကလည်း ပုံစံခွက်ထဲကနေဖောက်ထွက်ထားတဲ့ဇာတ်ကားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကြည့်ရတာ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုကိုတော့ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဒီနှစ်အစောပိုင်းလောက်က ထွက်ရှိထားတဲ့ ပုံစံတူ The finest hours ထက်ပိုကြိုက်မိပါတယ်။
The lone survivor ရဲ့ဒါရိုက်တာ Peter Berg ကရိုက်ကူးထားတာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း
တချို့နေရာတွေမှာ The lone survivor နဲ့ဆင်တူနေတာကို သတိမထားဘဲမနေနိုင်ဘူး။
အထူးသဖြင့် Lone survivor ထဲက တောင်ပေါ်ကခုန်ချကြတဲ့အခန်းတုန်းကလို ခံစားချက်မျိုး
ဒီကားမှာ ပြန်လည်ခံစားမိတယ်။ ဒါရိုက်တာဟာ ဇာတ်လမ်းကို
overdramatized ဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်ဟန်တူပါတယ်။ ဇာတ်ကောင်မိတ်ဆက်မှုတွေ
လူဆိုး၊ လူကောင်း၊ သူရဲကောင်းကွဲပြားပေမယ့်လို့ အသေးစိတ်လေးတွေထိ
မသွားတာကိုပြောချင်တာပါ။ ရေနံတွေပန်းထွက်လာတာကနေစပြီး အဆုံးထိရောက်တဲ့ဇာတ်ကားရဲ့
action အပိုင်းတွေကတော့ တကယ်ကို ရင်သပ်ရှုမောဖြစ်ဖွယ်ရာပါပဲ။ မီးတောက်ကြီးတွေ၊
ပေါက်ကွဲတာတွေက ပီပြင်လှပါတယ်။ ဒါမျိုးပီပြင်အောင်ရိုက်ခဲ့လို့လည်း
budget က သန်းတစ်ရာကျော်ခဲ့တာပေါ့။ လောလောဆယ်ထိတော့
Mark Wahlberg ရဲ့ သမီးဖြစ်သူက ရေနံတူးတာအကြောင်း
ကိုကာကိုလာဘူးနဲ့ နိမိတ်ပြသွားတဲ့အခန်းလေးကို ပြီးသွား
သတိထားမိတဲ့ထူးခြားချက်လေးတွေပြောရရင်တော့ Mark Wahlberg ကို
A perfect storm ဆိုတဲ့ပုံစံတူဇာတ်ကားမှာ မြင်တွေ့ခဲ့ပြီးပြီးဖြစ်သလို
Kurt Russell ဟာလည်း Poseidon မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ပင်လယ်ပျော်တွေပေါ့။
နောက် Kate Hudson အတွက်လည်း ပထွေးဖြစ်သူ Kurt Russell နဲ့
ဇာတ်ကားအဆုံးမှာ တကယ့်အပြင်က heroes တွေရဲ့ပုံတွေ၊
news footage တွေကို စာတန်းထိုးရင်းပြသွားတယ်။ ကြည့်ရတာ အဖိုးတန်ပါတယ်။
မကြာခင်ကမှ ထွက်ရှိ ထားတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်စွန့်စားခန်း Animation ဇာတ်ကားလေး ဖြစ်တဲ့
Moanaကားလေး အကြောင်း ညွှန်း ပေးလိုက်ပါတယ်။
Disney ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်ရေးရဲ့ ၅၆ ခု မြောက် Animationဇာတ်ကား အဖြစ်
နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်ကမှ ထွက်ရှိထားတာပါ။
#တီဖီတီ ဟာ ကျွန်းကို စောင့် ရှောက်တဲ့ နတ်သမီးတစ်ပါးဖြစ်ပြီး
ကျွန်းတွေ၊ အသက်ဝိညာဉ်တွေ စတဲ့ အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်း ထားသူဖြစ်ပါတယ်။
#တီဖီတီ ရဲ့ နှလုံးသားဟာ ကျောက်စိမ်းတုံး လေးတစ်ခုအနေနဲ့ရှိပြီး
အသက် ဝိညာဉ်တွေ ဖန်ဆင်းရာမှာ အသုံး ပြုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကို လူသား နတ်ဘုရားဖြစ်တဲ့
#မာဝီ က သူ့ရဲ့ စွမ်းအားတွေ၊ ဝိညာဉ်တွေ မြှင့် တင်ဖို့နဲ့ မှော်ငါးမျှားချိတ်ကြီး ဖန် တီးဖို့
အသုံးပြုခဲ့ပြီး မီးတောင် ချော်ရည်မိစ္ဆာကောင်ကြီး #တီခါ နဲ့ ဆုံပြီးတဲ့နောက်
တီဖီတီရဲ့ နှလုံးသားရော၊ မှော်ငါးမျှားချိတ်ကြီး ရော သမုဒ္ဒရာထဲမှာ ပျောက်ဆုံး သွားခဲ့ပါတယ်။
ထောင်စုနှစ် တစ်ခုကြာအ ပြီးမှာတော့ #တီဖီတီ ဖန်ဆင်းထား တဲ့ မိုတန်နူဝီ
ကျွန်းသူကြီး တွီရဲ့ အမေ တာလာဟာ သူ့မြေး #မိုအာနာ အပါအဝင်
ကျွန်းပေါ်က ကလေးတွေကို ကျွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဒဏ္ဍာရီတွေကို ပုံပြင်ပြောပြလေ့ ရှိပါတယ်။
တီဖီတီရဲ့ နှလုံးသားဖြစ်တဲ့ ကျောက်စိမ်းတုံးလေး ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက်
ကျွန်းမှာ အန္တရာယ်တွေကျရောက်နိုင်တယ်လို့ တာလာက မကြာခဏ သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
တစ်ရက်မှာ မိုအာနာဟာ ကမ်း တင်နေတဲ့ လိပ်လေးတစ်ကောင် ကို
တွေ့ခဲ့ပြီး စင်ရော်တွေဝိုင်းနေ တာကြောင့် ရေထဲပြန်မဆင်းရဲ ဖြစ်နေတာကို
မိုအာနာကယ်ဆယ်ခဲ့ တာကို သမုဒ္ဒရာကြီးက အသိအ မှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ တီဖီတီရဲ့ နှလုံး သားကို ပေးခဲ့ပါတယ်။
မိုအာနာ့လက်ထဲက ကျောက် စိမ်းတုံးကို သူ့အဖေက
သိမ်းသွား ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း မိုအာနာရဲ့ အဘွားတာလာက ယူခဲ့ပြီး
အဲဒီ အရာဟာ ကျွန်းသခင်မတီဖီတီရဲ့ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ နှလုံးသားဖြစ် တယ်လို
့ မိုအာနာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ မိုအာနာတို့ကျွန်းမှာ အုန်းပင်တွေပျက်စီး၊
ငါးတွေဖမ်း မမိနဲ့ တစ်ကျွန်းလုံး ဒုက္ခရောက် နေတာမို့ ကျွန်းကိုကျော်ပြီး အစာ ရှာထွက်ဖို
့ မိုအာနာစိတ်ကူးခဲ့ပေမယ့် ဒေါသကြီး၊ စည်းကမ်းကြီးတဲ့ သူ့ အဖေက လက်မခံခဲ့ပါဘူး။
နောက်တော့ မရတော့တဲ့အ ဆုံး မိုအာနာဟာ သူ့အချစ်တော် ဝက် ပေါက်လေး ပူးဝါးကိုခေါ်ပြီး
မာဝီကိုရှာဖို့ သမုဒ္ဒရာထဲကို ထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ လမ်းခရီးမှာ မုန် တိုင်းမိပြီး
တခြားကျွန်းတစ်ကျွန်း ကို ရောက်သွားခဲ့ကာ အဲဒီမှာ မာဝီနဲ့ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအခါမွာ မိုအာနာက တီဖီတီရဲ႕ ႏွလံုးကို ေနရာ မွန္မွာ
ထိန်းသိမ်းနိုင်မှ တစ်ကျွန်း လုံးအန္တရာယ်ကင်းမှာမို့
မာဝီကူညီမှဖြစ်မယ့်အကြောင်း ပြောပြခဲ့ ပါတယ်။
အဲဒီမှာလည်း တီဖီတီရဲ့ နှလုံးသားကိုလုမယ့် ပင်လယ်ဓားပြ အဖွဲ့နဲ့လည်း
ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပြန်ပါ တယ်။ စွမ်းအားကြီးတဲ့ မာဝီဟာ ငှက်အသွင်လည်းပြောင်းလို့ရပြီး
မိုအာနာကူရှာပေး ခဲ့ပြီး အတူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတော့ တယ်။
မိုအာနာတစ်ယောက် မာဝီနဲ့ အတူ သူတို့ကျွန်းမှာ ရောက်နေ တဲ့
မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို ဘယ် လိုနှိမ်နင်းမှာလဲ။ နတ်ဘုရားမ တီဖီတီရဲ့
နှလုံးသားကိုကော မူလနေရာရောက်အောင် ပြန်ထားခွင့်ရမှာလားဆိုတာတော့
အထူးပြုလုပ်ချက်တွေကောင်းလွန်တဲ့ Animation ဇာတ်ကားမို့ ကလေး၊
လူကြီး မရွေး သဘောကျမှာ သေချာသလောက်ပါပဲ။
အသံသရုပ်ဆောင်ထားသူတွေက မိုအာနာအဖြစ် အော်လီအိုင်ခရက်ဗယ်ဟို၊
မာဝီအဖြစ် ဒွိန်းဂျွန်ဆင်၊ တာလာအဖြစ် ရေချယ်ဟောက်စ် စသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၃တုန်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ Bostonမာရသွန်ပြေးပွဲမှာ ဗုံးဖောက်ခွဲမှုဖြစ်ပြီး လူတွေသေကြေ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာပါ။
ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီဇာတ်လမ်းကို ၂၀၁၃တုန်းကပဲ DVBကလွှင့်ခဲ့တဲ့ Documentryအတိုလေးကြည့်လိုက်ရပါတယ်။
အလွန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလွန်းခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးခန်းအထိကို
2013,April 15ရက်နေ့မှာ Bostonမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့
ဗုံးဟာ Home-Madeဗုံး လို့ယူဆရပြီးBostonမြို့ခံရဲသား
Tommy Saunders(Mark Wahlberg)ကဦးဆောင်ပြီး
Commissioner Ed Davis (John Goodman)နဲ့
FBI Special Agent Richard DesLauriers
(Kevin Bacon)အတူပူးပေါင်းကာ ဗုံးဖောက်ခွဲသူကိုဖေါ်ထုတ်ကြတာပါ။
Mark Wahlbergရဲ့သရုပ်ဆောင်မှုကတော့ တချက်၂ချက်ထဖောက်တာကလွဲပြီး အတော်ပီပြင်ကောင်းမွန်တယ်လို့ချီးကျူးရမှာပါ။
Screen Timeနည်းတယ် ဆိုပေမယ့် ပါရတယ့်အခန်းမှာရအောင်တော့ကြမ်းပြသွားပါသေးတယ်။
(Rogue Oneမှာ Darth Vaderပါလာသမျိုးပါပဲ။)
10 CloverField Laneဇာတ်ကားမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ John Goodmanနဲ့
Tremors နဲ့ Hollow Manဇာတ်ကားတွေထဲက Kevin Baconတို့ရဲ့ ဒီကားမှာသရုပ်ဆောင်မှုဟာလည်း
Supergirl မင်းသမီး Melissa Benoistလည်းအရံအဖြစ်ပါဝင်အားဖြည့်ထားပါတယ်။
Real Life Eventကိုမှီးထားတဲ့ဒီကားကို
အပြင်ကအဖြစ်အပျက်နဲ့ ထပ်တူကျအနိုင်ဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြီးရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဝတ်ခဲ့တဲ့အဝတ်အစားတွေ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကိုအသေးစိပ်လေ့လာခဲ့ပြီးမှ
ဒီကားမှာတော့ အသေးစိပ်ရိုက်ပြသွားလို့ ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။
ဖြစ်ရပ်ဆိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသူ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သူတွေအတွက်လည်းဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ :'(
သူတို့နိုင်ငံကရဲတွေ တရားခံဖမ်းဖို့ကို ပညာသားပါပါနဲ့အဆင့်ဆင့်ထောက်လှမ်းပုံ သက်သေပစ္စည်းတွေခင်းကျင်းထားပုံတွေ ဖြစ်ရပ်ဆိုးနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါ
မြို့ခံရဲတွေကနေ ကူညီကယ်ဆယ်ပုံ စတာတွေကိုလည်း
နောက်ဆုံး တရားခံတွေနဲ့ အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့
Gunfightဟာလည်း Actionကားတကားအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
Jessica Kensky နဲ့ Patrick Downesတို့
ဗုံးခွဲသူတွေကို လိုက်လံစုံစမ်းနေတယ့် ဇာတ်ကြောင်းနဲ့
သိပ်မဆိုင်လို့ အဲ့အတွဲအကြောင်း နည်းနည်းပဲထည့်ရိုက်သွားတာလို့ ထင်မိပါတယ်။အပြင်မှာတော့ သူတို့စုံတွဲဟာ
MCU Credit Sceneလောက်တောင်မကြာပါဘူးစောင့်ရတာ။
၅မိနစ်ကျော် ၁၀မိနစ်လောက်ပဲကြာတာမို့လည်း သိပ်အချိန်မပေးရပါဘူး
ကျနော့်အနေနဲ့ သုံးသပ်ရမယ်ဆို Patriots Dayဆိုတဲ့ဇာတ်ကားဟာ
မနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့Real Life Eventကိုရိုက်ထားတဲ့ Sullyလိုပဲ
ကားကောင်းတကားလည်းဖြစ်ပြီး ဇာတ်လမ်းက Sullyထက်ကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလွန်းခဲ့ပါတယ်။
မနွစ္ကထြက္ခဲ့တဲ့Real Life Eventကိုရိုက္ထားတဲ့ Sullyလိုပဲ
ဒီဇာတ်လမ်းဟာ ဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်လမ်းတွေရဲ့ မှော်လောကထဲမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပါပဲ။ ဒါပေမယ် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကာလဟာ ၁၉၂၆ ဖြစ်ပြီး ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး အဲဘတ်စ် ဒန်ဘယ်လ်ဒိုးရဲ့လူငယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကာလရဲ့ နာမည်ကြီးမှော်နက်ဆရာကတော့ ဟယ်ရီစာအုပ်ထဲမှာ နာမည်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဂရင်ဒီဝေါလ်ပါ။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင်ကတော့ မှော်ပညာ နဲ့ မှော်သတ္တဗေဒ ပညာရှင် နျု စကန်မန်ဒါပါ(ဟယ်ရီတို့ ကာလမှာ နျုရဲ့စာအုပ်တွေဟာ ကျောင်းအတွက် ပြဌာန်းစာအုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ဟက်ဂရစ်လက်စွဲပေါ့)။ နျုဟာ လန်ဒန်ကနေ နယူးယောက်ကို မှော်သတ္တဝါဆန်းတွေ အပြည့်ပါတဲ့ လက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံးနဲ့ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ နယူးယောက်မှာ အဖြေရှာမရတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။ အမေရိကန်အခေါ် No-Maj (ဗြိတိန်အခေါ် မက်ဂယ်) မှော်ပညာမတတ်တဲ့ သာမာန်လူသားတစ်ဦးနဲ့ မတော်တဆအလွဲတွေ ဖြစ်ရင်း သူ့ရဲ့သေတ္တာထဲကနေ သတ္တဝါအချို့လွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါ တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အကြောင်းရင်းဟာ သူ့ကြောင့်လို့ သံသယဖြစ်စရာတွေပေါ်လာပြီး ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားရပါတော့တယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ ၅ ကားအထိ ဆက်ရိုက်ဖို့ သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာမို့ ဒီကားလေးကြည့်ပြီးရင် နောက်နှစ်တွေအတွက် ဆက်ပြီး စောင့်မျှော်ကြတာပေါ့ဗျာ။ဒီဇာတ်လမ်းဟာ ဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်လမ်းတွေရဲ့ မှော်လောကထဲမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပါပဲ။ ဒါပေမယ် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကာလဟာ ၁၉၂၆ ဖြစ်ပြီး ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး အဲဘတ်စ် ဒန်ဘယ်လ်ဒိုးရဲ့လူငယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကာလရဲ့ နာမည်ကြီးမှော်နက်ဆရာကတော့ ဟယ်ရီစာအုပ်ထဲမှာ နာမည်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဂရင်ဒီဝေါလ်ပါ။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင်ကတော့ မှော်ပညာ နဲ့ မှော်သတ္တဗေဒ ပညာရှင် နျု စကန်မန်ဒါပါ(ဟယ်ရီတို့ ကာလမှာ နျုရဲ့စာအုပ်တွေဟာ ကျောင်းအတွက် ပြဌာန်းစာအုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ဟက်ဂရစ်လက်စွဲပေါ့)။ နျုဟာ လန်ဒန်ကနေ နယူးယောက်ကို မှော်သတ္တဝါဆန်းတွေ အပြည့်ပါတဲ့ လက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံးနဲ့ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ နယူးယောက်မှာ အဖြေရှာမရတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။ အမေရိကန်အခေါ် No-Maj (ဗြိတိန်အခေါ် မက်ဂယ်) မှော်ပညာမတတ်တဲ့ သာမာန်လူသားတစ်ဦးနဲ့ မတော်တဆအလွဲတွေ ဖြစ်ရင်း သူ့ရဲ့သေတ္တာထဲကနေ သတ္တဝါအချို့လွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါ တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အကြောင်းရင်းဟာ သူ့ကြောင့်လို့ သံသယဖြစ်စရာတွေပေါ်လာပြီး ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားရပါတော့တယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ ၅ ကားအထိ ဆက်ရိုက်ဖို့ သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာမို့ ဒီကားလေးကြည့်ပြီးရင် နောက်နှစ်တွေအတွက် ဆက်ပြီး စောင့်မျှော်ကြတာပေါ့ဗျာ။
နောက်ဆုံးထွက် Ice Age ကို တင်ပေးထားပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်ဇာတ်လမ်းမှာတော့ ဝက်သစ်ချသီးကို စွဲလန်းနေတဲ့ Scrat ဟာ မတော်တဆ အာကာသယာဉ်တစ်ခုကို စက်နှိုးမိပြီး ကမ္ဘာ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားကာ ဂြိုလ်တစ်ချို့ကို ဖျက်စီးမိပြီး ဥက္ကာခဲကြီးတွေကို ကမ္ဘာမြေပေါ်ကို ကျလာစေခဲ့ပါပြီ။ မန်နီ နဲ့ အယ်လီတို့ လင်မယားဟာ သမီးဖြစ်သူ ပိချက်စ် နဲ့ သားမက်လောင်း ဂျူလီယန် တို့ လက်ထပ်ပြီး သူတို့ကို ခွဲခွာသွားတော့မယ့် အခြေအနေကို စိုးရိမ်နေရင်းနဲ့ပဲ ကမ္ဘာကြီးပျက်စီးလာမယ့် အန္တရာယ်ကို တားဆီးဖို့အတွက် မိတ်ဆွေတွေ အားလုံးနဲ့ စုပေါင်းပြီး မဖြစ်နိုင်တဲ့ စစ်ဆင်ရေးကြီးကို စတင်ပါတော့တယ်။ ကမ္ဘာပျက်တာ သူတို့မပါဘူးလို့ ထင်နေတဲ့ ဒိုင်နိုင်ဆောငှက် မိသားစုကတော့ သူတို့ စစ်ဆင်ရေးကြီးကို ဖျက်စီးဖို့ ကြိုးစားရင်း ဖျံနီ ဘက်ခ်ကို လက်စားချေဖို့ ကြိုးပမ်းကြပါလိမ့်မယ်။ Ice Age ကားတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ရယ်စရာ၊ ဝမ်းသာစရာ၊ ဝမ်းနည်းစရာတွေနဲ့ မိသားစုစိတ်ဓာတ် မိတ်ဆွေစိတ်ဓာတ်တွေကို ဇာတ်လမ်းကောင်းကောင်းနဲ့ ခံစားနိုင်မှာပါပဲ။
Alice Through Looking Glass ဟာ ၁၈၆၅ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Charles Lutwidge Dodgson ရဲ့ နာမည်ကြီးဝတ္ထုအတွဲတွေကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် ပြန်လည်အသက်သွင်းခံရတဲ့ ဒုတိယမြောက် ဇာတ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားဟာ ၂၀၁၀ မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ပထမ ဇာတ်ကား Alice In Wonderland ရဲ့ sequel ဖြစ်တာနဲ့ အညီ ပထမကားကို ကြည့်ထားမှ နားလည်နိုင်မှာကြောင့် Alice In Wonderland ကို ကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ
ခု ဒုတိယဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Alice Through Looking Glass ရဲ့ ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းချုံးအနေအထားကို ပြောရရင်တော့… Alice တစ်ယောက် အပြင် ကမ္ဘာ့မှာ သဘောၤကပ္ဗတိန်တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ စွန့်စားခန်းတွေ ဖွင့်နေရင်း သူ့တိုင်းပြည်ကို ပြန်ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာတော့ သူ့ အမေ့က သူ့ကို သင်္ဘောကို ရောင်းချဖို့ ပြင်ဆင်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတဲ့ Aliceတစ်ယောက် သူ့ အမေနဲ့ စိတ်ဆိုးပြီး ထိုင်နေတုန်း အက်ပလွန်ရဲ့ ခေါ်ဆောင်မှူနဲ့ Underland လို့ ခေါ်တဲ့ မှော်ကမ္ဘာထဲကို ပြန်ရောက် လာပါတော့တဲ့။ အဲဒီအချိန်မှာ သူမတွေ့ရှိလိုက်ရတာကတော့ Hatter ရဲ့ စိတ္တဇရောဂါဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေပါပဲ။ အဲဒီ စိတ်ရောဂါကက ဘာကြောင့် ဖြစ်နေရတာလဲ ????
Alice တစ်ယောက် Mad Hatter နဲ့ Underland ရဲ့ ကံကြမ္မာ ကို ကယ်တင်ဖို့အတွက် သူမ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အကူအညီတွေကို ယူပြီး အချိန်နောက်ပြန် ခရီးသွားရပါတော့မယ် မိစ္ဆာမကြီး Red Queen နဲ့ နာရီ တစ်ဖြစ်လဲ Timeတို့ကို ဘယ်လို အနိုင်ယူ ရမလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေပါတော့တယ်။ ဟတ်တာကိုရော ပြန်ကယ်တယ်နိူင်ပါ့မှာလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ Hatter အဖြစ် ကျွန်တော်တို့ အချစ်တော် မင်းသားကြီး Johnny Deepကနေ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
ထွက်သမျှတွေထဲက အကြည်ဆုံးဖြစ်တဲ့ 720 HDTCဗားရှင်းနဲ့ တင်ပေးထားပါတယ်။ ကာလာတွေလဲ တော်တော်စုံတာမို့ ကြည့်ရတာ အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။Blu Ray ထွက်ရင်လဲ ထပ်ပြီး updateလုပ် ထပ်တင်ပေးသွားမှာမို့ blu rayမှ ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေတော့ စောင့်ကြပါလို့……
The Land Before Time XIV 2016
The Land Before Time XIV(2006)
Channel Myanmar ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဒီတစ်ခါ တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်က စတင်ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ The Land
Before Time ဆိုတဲ့ ကာတွန်းဇာတ်လမ်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးအကြောင်းမပြောခင် သိစေချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါ
တယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ ဒီဇာတ်လမ်းကို ဖန်တီးသူတွေအကြောင်းပါ …. Producer တွေကတော့ ဂျော့်ဂျ်လူးကပ်စ် နဲ့ စတီဗင်စပီးဘာ့ဂ် တို့
ဖြစ်ကြပြီး ဒါရိုက်တာကတော့ ဒွန်ဘလုသ် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့လို ရုပ်ရှင်အကျော်အမော်ကြီး ၃ ယောက်ဆုံထားတဲ့ ဒီလိုစီးရီးမျိုးဟာ
Movie Industry မှာ ဒီတစ်ခုတည်းသာ ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ် ကမ္ဘာဦးအစက ဒိုင်နိုဆောလေးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ရှင်သန်ရပ်တည်မှု ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတွေ
အကြောင်းကို ဇာတ်အိမ်တည်ပြီး လစ်တဲဖု စပိုက်ခ် ဆယ်ရာ နဲ့ ပီထရီဆိုတဲ့
ဒိုင်နိုဆော သူငယ်ချင်းလေးတစ်စုရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ရိုက်ပြထားတာပါ။
ကာတွန်းကားဆိုပေမယ့် …… ကမ္ဘာဦးတုန်းက ဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်တွေ ဒိုင်နိုဆောအမျိုးအစားတစ်ခုစီရဲ့ သဘာဝလေးတွေကိုပါ
သေသေချာချာလေး ထည့်ရိုက်ထားတာမို့ ကလေးလေးတွေရော လူကြီးတွေပါ ကာတွန်းကြည့်ရင်း ဗဟုသုတရစေမှာအမှန်ပါပဲ။ ပြီး
တော့ ဒီကာတွန်းကားလေးမှာ သတိထားမိတာက ကလေးလေးတွေရဲ့ တကယ့် အပြုအမူနဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကို ထည့်ရိုက်ထား
တာပါ။ စိတ်တိုလွယ်တဲ့ကလေး တစ်ခုခုဆို ကြောက်တတ်တဲ့ ကလေး သူများကို သနားတတ်တဲ့ကလေး ဘာမဆို စပ်စပ်စုစု လုပ်တတ်တဲ့
ကလေးတွေ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ အပြုအမူလေးတွေကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ အကျိုးဆက်လေးတွေကို ပြပေးထားတာက entertainment တင်
မက ကလေးလေးတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကို ပြုပြင်ဆုံးမရာမှာ တစ်နည်းနည်းနဲ့ အထောက်အကူပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ အများကြီးတော့ မညွှန်းတော့ပါဘူး ကမ္ဘာဦးတုန်းက ဒိုင်နိုဆောကြီးတွေက ဘယ်လိုနေကြလဲလို့ ကလေးလေး
တစ်ယောက်ယောက်ကများ မေးလာခဲ့ရင် ကျွန်မ ဒီဇာတ်ကားလေးကိုပဲ ပြဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အိမ်မှာ ကလေးရှိတဲ့သူတွေရော
ကာတွန်းကားနှစ်သက်တဲ့သူတွေရော ဒီကာတွန်းကားလေးတွေကို မြည်းစမ်းကြည့်ပါ နောင်တမရစေရဘူးလို့ အာမခံပါတယ်နော်။
ဒီဇာတ်ကားက ၂၀၀၉ ခုနှစ် တစ်လပိုင်းက ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ မြစ်ထဲကို လေယာဉ်ပျက်ကျမှုဖြစ်ရပ်မှန်ကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာပါ။ ထူးခြားမှုကတော့ လေယာဉ်ပေါ်က လူ ၁၅၅ ယောက်လုံးအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့တာပါပဲ။ ဒီဇာတ်ကားမှာ မင်းသားကြီး တွမ်ဟန့်ခ်က အမေရိကန်ရဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့ ပိုင်းလော့ကြီးနေရာကနေ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ မြစ်ထဲကို လူအသေအပျောက်မရှိထိုးဆင်းနိုင်ခဲ့လို့ တကယ်ချီးကျူးစရာဖြစ်ခဲ့သလို ၂၄ မိနစ်အတွင်း သဘောင်္ လေယာဉ်နဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး လူ၁၀၀၀ ကျော်စုစည်းပြီး အားလုံးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကလည်း အံသြစရာတစ်ခုလို့ ပြောသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။
IMDb rating 7.8 ရထားတဲ့ဒီဇာတ်လမ်းမှာ အားလုံးက သူရဲကောင်းလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပိုင်းလော့ကြီးရဲ့ လေယာဉ်ဆင်းသက်ခဲ့ပြီး နောက်ဆက်တွဲပြဿနာနဲ့ လေယာဉ်ပေါ်က အကြောင်းအရာတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီးပြသထားတာပါ။ ပြဿနာကတော့ လေယာဉ်ကိုစစ်ဆေးတဲ့ အင်ဂျင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေနဲ့ ကွန်ပြူတာအချက်အလက်တွေက လေယာဉ်ဟာ မြစ်ထဲထိုးဆင်းစရာမလိုဘဲ လေဆိပ်ကိုအရောက်ပျံသန်းနိုင်တယ်လို့ ညွှန်ပြပြီး ပိုင်းလော့ကို အာမခံကုမ္မဏီက တရားခံရှာဖို့ကြိုးစားလာတာပါပဲ။ ဆူလီဟာ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်လား အားလုံးကိုအန္တရာယ်ကျရောက်စေတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မှားယွင်းသူလား? ဆူလီတစ်ယောက် သူ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ကွန်ပြူတာတွေ ပညာရှင်တွေရဲ့ သီအိုရီတွေထက် ပိုမှန်ကန်လားဆိုတာ သက်သေပြနိုင်ဖို့……
Haruko Azumi Is Missing (2016)
Japanese Girls Never Die လို့လည်း ဒီဇာတ်ကားကို ခေါ်ပါသေးတယ်(သတိပေးချက်။ ။ ဒီအညွှန်းက ပွဲရှာတာ၊ မီးမွှေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် တချို့ဓာတ်မတည့်တဲ့သူတွေ ကျော်သွားနိုင်အောင် သတိပေးချက်ရေးပေးတာပါ။ ဒီဇာတ်ကားက မဟာပုရိသဝါဒလက်ကိုင်ထားသူများ၊ ရှေးရိုးစွဲသူများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အယူသီးတတ်ကြသူများ၊ အသက်မပြည့်သေးသူများ၊ အသက်ပြည့်သော်လည်း စိတ်ဓာတ်မပြည့်သေးသူများ၊ လိင်ခွဲခြားဆက်ဆံတတ်သူများ၊ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ထိရှလွယ်သူများ၊ လူသားအမြင်နဲ့သာမကြည့်တတ်ဘဲ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအမြင်ကိုသာ လက်ကိုင်ထားတတ်ကြသူများ လုံးဝ(လုံးဝ) ကြည့်ရှုရန် မသင့်တော်သောကြောင့် အထက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ ဇာတ်ကားကိုရော အညွှန်းကိုပါ လက်ရှောင်ပေးကြပါရန် လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါတယ်ဗျာ။)
တံခွန်မရှိတဲ့ ရထားက မတင့်တယ်ဘူးတဲ့ ရထားမရှိတဲ့ တံခွန်ကကျတော့ ဘာဖြစ်လို့ သုံးစားမရတော့တာ ဖြစ်သွားရတာလဲ။
Haruko Azumi ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ အသက် ၃၀ ပြည့်ခါနီး အိမ်ထောင်မရှိသေးတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်။ သူငယ်ချင်းဆိုတာလည်း မရှိသလောက်ပဲ။ မိသားစုမှာရော သူ့ရဲ့နေရာက ဂျပန်အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အနေနဲ့ သိပ်ပြီး အရေးပါလှတာမဟုတ်ဘူး။ အိမ်သာသုံးစက္ကူကုန်နေတဲ့အချိန် သွားဝယ်ပေးဖို့လောက်ပဲ အရေးပါတဲ့ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်။ သူချစ်နေတဲ့သူဆိုတာကလည်း သူဆိုတာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအင်ဆန္ဒကို ဖြည့်ပေးဖို့အတွက် အရုပ်တစ်ရုပ်ထက် ပိုပြီးဘာမှခံစားချက်မရှိဘူး။ တစ်နေ့မှာ သူ အိမ်သာသုံးစက္ကူ ဝယ်ဖို့ သွားရင်း ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်။ သူပျောက်ဆုံးတဲ့ အချိန်က အဲဒီအချိန်မှလား။ ဒါမှမဟုတ်…..
Haruko မပျောက်ဆုံးခင် အချိန်မှာ ညဖက်တစ်ယောက်တည်း လမ်းလျှောက်သွားနေတဲ့ အမျိုးသားတွေကို ကျောင်းသူ ၆ယောက် ၇ ယောက်လောက်ပါတဲ့ အမျိုးသမီးဂိုဏ်းတစ်ခုက ရိုက်နှက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ သူတို့တွေဘာလို့ ဒီလိုလုပ်နေရတာလဲ။ အဲဒီကျောင်းသူအဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ရဲ့ ပြောစကားအရကတော့ လက်စားချေတာပါတဲ့။ သူတို့တွေ ဘာကိုလက်စားချေကြတာလဲ။ သေချာတာကတော့ အဲဒီကျောင်းသူကောင်မလေးတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ နာမည်တွေပါနေတဲ့ လူပျောက်ကြော်ငြာတွေ တစ်နေရာရာမှာ ရှိနေကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။
Haruko ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ နောက်မှာ သူ့အတွက် လူပျောက်ကြော်ငြာတွေ နံရံတွေမှာ ကပ်ထားပါတယ်။ ဒီလူပျောက်ကြော်ငြာတွေကို ဘယ်သူတွေကြည့်ကြလဲ။ ကြည့်မိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ မြင်တဲ့သူတွေရောရှိကြပါရဲ့လား။ ဒါကို မြင်မိတဲ့ Graffiti သဘောကျတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်နဲ့ Graffiti အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ့် လူငယ်တစ်ယောက်က အဲဒီ လူပျောက်ကြော်ငြာကို Graffiti အဖြစ်ဖန်တီးပြီး Haruko Azumi ရဲ့ လူပျောက်ကြော်ငြာကို သူတို့ရဲ့ အမှတ်အသား Graffiti တစ်ခုအနေနဲ့ ရေးဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အဖွဲ့ကို နောက်ထပ် ဝင်ရောက်လာသူတစ်ယောက်ကတော့ သူတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ Aina ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါပဲ။ သူတို့သုံးယောက် အဖွဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းက သူ့ကြောင့်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ အဖွဲ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်စည်းပေးနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တခြားအဖွဲ့ဝင် နှစ်ယောက်ရဲ့ အမြင်ကတော့ သူကသူတို့နှစ်ယောက်အတွက် ဖျော်ဖြေမှုကို ပေးဖို့အတွက်ပဲ အသုံးဝင်တဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်လို့ပဲ မြင်တာပါ။ အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် သူတို့အဖွဲ့ကွဲသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက် သူတို့ရဲ့ Haruko Azumi ပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ Graffiti က အောင်မြင်မှုရလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ သူတို့အဖွဲ့မှာ Aina ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ နေရာက ပျောက်ဆုံးသွားပါပြီ။ နောက်ထပ် လူပျောက်ကြော်ငြာတစ်ခုမှာ Aina ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ သူ့ရဲ့ပုံပါတဲ့ Graffiti လေးတစ်ခု ထပ်ပြီး တိုးလာနိုင်မလားဆိုတာတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ဇာတ်ကားကို ကြည့်ပြီး စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။
ဂျပန်နိုင်ငံဆိုတာ အမျိုးသားတွေ ကြီးစိုးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပါ။ အမျိုးသမီးတွေက အမြဲတမ်း တစ်ဆင့်နိမ့်လိင်(Second Sex ကိုပြောချင်တာပါ။ ကျွန်တော် အသုံးအနှုန်းမှားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်) အဖြစ် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ (ယနေ့ခေတ် ဂျပန်နိုင်ငံအကြောင်းကို ပြောခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဇာတ်ကားထဲမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံအကြောင်းကိုပဲ ပြောတာကို သတိချပ်စေလိုပါတယ်။) အမျိုးသားတွေရတဲ့ လစာနဲ့ အမျိုးသမီးတွေရတဲ့ လစာက ၁၀ ဆလောက်ကွာပါတယ်။ အလုပ်ခွင်က မိန်းကလေးတွေဆိုတာ ပုံမှန်အလုပ်အပါအဝင် အောက်ခြေသိမ်းအလုပ်အားလုံးလုပ်ဖို့အတွက် နဲ့ အမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေအတွက် အပန်းဖြေစရာတစ်ခုပါ။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်မှု ဆိုတာက နေ့စဉ်ကြုံနေကြ မထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါကို သည်းမခံနိုင်ရင် လုပ်စရာ တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ အလုပ်ထွက်တာပါ။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ အဝတ်အစား အတိုင်းအရှည်က နိုင်ငံတော်အဆင့် အရေးတယူ စောင့်ကြည့်စရာကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာသင်ခွင့်ရပေမဲ့ ပညာကို အပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးမရှိပါဘူး။ ပညာဘယ်လောက်ပဲတော်တော် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် လုပ်အားနဲ့လစာ အချိုးမမျှသလို ပညာရှင်အဖြစ် အသတ်မှတ်မခံရဘဲ အမြဲတမ်း အလှဆင်ပစ္စည်းတစ်ခုသာသာ လုပ်သားတစ်ယောက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရတတ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်ဆိုတာ လင်ကောင်းသားကောင်းရဖို့ဆိုတာကလွဲရင် ဘာမှမျှော်လင့်စရာမရှိပါဘူး။ အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်နေပြီး အိမ်ထောင်မကျသေးတာက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက်ကျရှုံးမှုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝဟာ ယောက်ျားယူဖို့ကလွဲရင် ဒါမှမဟုတ် ယောက်ျားတွေကို ဖျော်ဖြေဖို့အတွက်ကလွဲရင် ဘာမှအသုံးဝင်တာမရှိသလိုပါပဲ။ ဂျပန်ဇာတ်ကားတော်တော်မျာများမှာပါတတ်တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုကို သတိထားမိကြမှာပါ။ ထမင်းဝိုင်းမှာ အမျိုးသမီးတွေက စားဖို့သောက်ဖို့ ဟင်းချက်ပြင်ဆင်ပြီး ထမင်းခူးခပ်ပေးချိန်မှာ ယောက်ျားဖြစ်သူက အရက်တစ်ခွက်သောက်ရင်းထိုင်စောင့်နေပါတယ်။ ပြီးရင် သူငယ်ပြန်နေတဲ့ ယောက်ျားရဲ့ အမေကို ချွေးမဖြစ်သူက စားဖို့အတွက်ခွံ့ကျွေးနေပြီး ကလေးအငယ်လေးတွေရှိရင် ထိန်းနေရတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းမျိုး ကျွန်တော်တော့ မကြာမကြာတွေ့တတ်ပါတယ်။ အဲဒါက ဂျပန်မိသားစုတစ်စုရဲ့ အခြေခံပုံစံကိုဖော်ကျူးနေသလိုပါပဲ။ အဖေက အပြင်မှာ အလုပ်လုပ် ကျန်တဲ့ အိမ်ထောင်မှုကိစ္စမိသားစုကိစ္စအား လုံးကို အမေက အကုန်လုပ်ရပါတယ်။ အမျိုးသားကဝင်ကူတယ်ဆိုတာ ဂျပန်မှာ ထုံးစံမရှိပါဘူး။ ရိုးရာကိုက အဲဒီလိုပါပဲ။ အိမ်ထောင်မကျသေးတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက် ဘဝ ရည်မှန်းချက်က အိမ်ထောင်ကျဖို့ ဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်ကျသွားပြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက် ဘဝရည်မှန်းချက်ကတော့ အိမ်ထောင့်တာဝန်၊ မိသားစုတာဝန်တွေကို အကောင်းဆုံးထမ်းဆောင်ပေးဖို့နဲ့ ယောက်ျားဖြစ်သူကို ပြုစုဖို့အတွက်ပါပဲ။ ဒီနေရာမှာပဲ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ တန်ဖိုးက ကုန်ဆုံးသွားပါပြီ။ တစ်နည်းအားဖြင့် အိမ်ထဲမှာပဲ ပိတ်မိနေပြီး အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ပျောက်ဆုံးသွားပါပြီ။
ဒီနေရာမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်နဲ့ လိင်ကိစ္စ ဘယ်လိုဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ကျွန်တော် လေးစားပြီးချစ်ရတဲ့ ပွင့်လင်းတဲ့အတွေးအခေါ်ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို မေးဖူးတာလေးပြောပါရစေ။ မိန်းကလေးတွေက လိင်ကိစ္စကို ဘာလို့ ထိန်းချုပ်တတ်ကြတာလဲပေါ့။ သူ့အဖြေက ပွင့်လင်းသလောက် ရိုးရှင်းပြီး ထိမိပါတယ်။ မိန်းကလေးအများစုကက မချစ်တဲ့သူနဲ့ မအိပ်တတ်ဘူးတဲ့။ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က အချစ်မပါဘဲ ဘယ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ် အိပ်လို့ရပေမဲ့ မိန်းကလေးတွေကတော့ ချစ်တဲ့သူနဲ့ပဲ ဒီအခြေအနေကိုရောက်ချင်ကြတယ်တဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာပါ ထပ်ရှင်းပြပါတယ်။ “မိန်းကလေးတွေမှာလည်း ယောက်ျားလေးတွေလို သွေးသားဆန္ဒရှိတာပဲ။ လိုချင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ယောက်ျားလေးတွေ ဘုန်းတန်ခိုးထွားတဲ့၊ မိန်းမအိန္ဒြေ ရွှေပေးလို့မရ ဆိုတဲ့ ပါကင်ပိတ်အရုပ်က တန်ဖိုးပိုကြီးတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်ရှိတဲ့၊ အပျိုကိုမှ တန်ဖိုးထားလိုချင်ကြတဲ့ ယောက်ျားလေးအများစုရှိတဲ့၊ ယဉ်ကျေးမှု(သို့) ရိုးရာကို အလေးထားတတ်တဲ့၊ မိန်းကလေးတွေက တစ်ဆင့်နိမ့်လိင်လို့မြင်တတ်တဲ့(ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် အခံဖက်ကချည်းပဲလို့မြင်တဲ့)၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က လိင်ကိစ္စကို စတင်တောင်းဆိုလာရင် မကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖြစ် သတ်မှတ်တတ်ကြတဲ့၊ လပ်မထပ်ခင် လိင်မှုကိစ္စပြုလုပ်မိရင် ရာဇဝတ်သားတစ်ယောက်လို၊ အနုအဝဲ၊ သိမ်ဖျင်းတဲ့သူတစ်ယောက်လိုသတ်မှတ်တတ်ကြတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းကြောင့်၊ လိင်ကိစ္စရဲ့နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေကို အများဆုံး တာဝန်ယူရတတ်တာကြောင့် (ယောက်ျားလေးဖက်က တာဝန်ယူသည်ဖြစ်စေ၊ မယူသည်ဖြစ်စေ ကိုယ်ဝန်လွယ်ရတဲ့ဒုက္ခ** ဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်) စတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကြောင့်အပါအဝင် မိန်းကလေးတွေက လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင် ယောက်ျားလေးတွေထက် Emotional Connection(စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှု) ပိုပြီးလိုအပ်လို့”ဆိုပြီး သူ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သူပြောတာတွေနဲ့ သဘောထားခြင်းတိုက်ဆိုင်ပေမဲ့ ဖတ်ရှု့သူတွေ သဘောတူတာ၊ မတူတာကတော့ လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားထဲက မိန်းကလေးတွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို လိင်ကိစ္စနဲ့ ရောထွေးမမြင်ကြဖို့ ဒါလေးကို နည်းနည်းပြောချင်တာပါ။ မိန်းကလေးတွေလည်း သွေးသားဆန္ဒရှိပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံတတ်သလို ချစ်တတ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးက အပျိုစင်ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းပေါ် မူတည်နေတာမဟုတ်သလို မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးက လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးထက် နည်းနည်းမှမလျော့ဘူးလို့ ကျွန်တော်တော့ အခိုင်အမာယုံကြည်ပါတယ်။
(** ဒီနေရာလေးကို နည်းနည်းထပ်ပြောချင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်လွယ်ရတဲ့ ကိစ္စမှာ အမျိုးသမီးတွေက မိခင်စိတ်ရှိလို့ ဒုက္ခလို့ မမြင်ကြဘူး မသတ်မှတ်ဘူးဆိုရင်လည်း တကယ်တန်း ပင်ပန်းဆင်းရဲတဲ့ ခံရတာကတော့ ငြင်းမရတဲ့ အချက်လို့မြင်ပါတယ်။ ဒါကို Biological Issuse ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လို့ ဒီနေရာမှာ ထည့်ပြောစရာမလိုဘူးလို့ ထင်လို့လည်းရပါတယ်။)
ဒင်ချိုင် ဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာ အခု ခေတ် အဆိုအရ FA တစ်ယောက်ပါ
သူက အိုင်တီဝန်ထမ်း တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လူတိုင်း ရဲ့ လိုသုံးလဲ ဖြစ်ပါတယ်
ရုံးတစ်ခုလုံးက သူ့နာမည်ကို မှတ်မိမှု မရှိသလို လိုအပ်တာ နဲ့
ဟေး.. ဆိုပြီး အဆင်သင့် ခေါ်ခိုင်းလေ့ ရှိပါတယ်..
အဲ့ဒီလို အထီးကျန် မှုတွေ နဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ဒင် ဆီကို နူဝီ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးဟာ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်ရှိလာပါတယ်…
နူဝီ ဟာ သူမ ပရင်တာပျက်နေလို့ ဒင် ကို အကူအညီလာတောင်းရာကနေ ဘယ်မိန်းကလေးကိုမှ စိတ်မဝင်စားခဲ့တဲ့
ဒင် ဟာ နူဝီ အနောက်က အရိပ်လို တကောက်ကောက် လိုက်နေခဲ့ပြီး နူဝီ ကြိုက်တက်တာတွေ လိုက်မှတ်
နူဝီ ဘယ်သွားလဲ လိုက်ကြည့် သူမ လိုအပ်တာလေးတွေကို မသိမသာ ကွယ်ရာကနေ လိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်…
ဒါပေမယ့် ဒင် ရဲ့ အချစ်တွေဟာ နူဝီ ဆီ မရောက်ခဲ့ပါဘူး…
နူဝီ ဆိုတဲ့ မိန်းမချောလေးကို ဒင် ရဲ့ သူဌေး တော့ပ် က ချစ်ရေးဆိုပြီး လက်တွဲလိုက်ကြတဲ့နေ့မှာတော့ ဒင် ရဲ့ အသဲတွေ
ဒါပေမယ့် တစ်ရက်မှာတော့ နူဝီ သွားချင်နေတဲ့ ဟော့ကိုင်းဒိုး က နှင်းပွဲတော် ကို လိုက်ပို့ဖို့အတွက် သူဌေး တော့ပ် က
ရုံးက ဝန်ထမ်း အားလုံး ကိုပါ ပျော်ရွှင်ဖွယ် ခရီးတစ်ခု ထွက်နိုင်အောင် စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်…
ထို ခရီးစဉ်မှာလဲ ဒင် ဟာ အမြဲလိုလို တော့ပ် နှင့် နူဝီ တို့ အနောက် အရိပ်လို လိုက်နေခဲ့ပြီး
တစ်ဖက်သက် အချစ်တွေနဲ့ နူဝီ အပေါ် အချစ်တွေ မပြတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး…
ဒီလို နဲ့ နှင်းတွေ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ ဟော့ကိုင်းဒိုး က ဆုတောင်းပြည့်တဲ့ ခေါင်းလောင်းရှေ့မှာ
ဒင် တစ်ယောက် တိတ်တစိတ်လေး ဆုတောင်းပြီး ခေါင်းလောင်းတီးခဲ့ပါတယ်…
ထူးဆန်းလှတဲ့ ဒင် ရဲ့ ဆုတောင်းလေးက အမှန်တကယ် ပြည့်သွားပါတယ် ဘာ ဆုတောင်းလဲ ဆိုတာ
ပရိတ်သက်ကြီးရော သိချင်ပါသလား ?
ဇတ်လမ်း အစ မှာ နည်းနည်းပျင်းဖို့ကောင်းသလို ရှိပေမယ့် ခေါင်းလောင်း တီးပြီး နောက်ပိုင်း မှာ
ထိုင်ရာက မထစတမ်း သင် ကြည့်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာ ကျနော် ပြောနိုင်ပါတယ်
သူငယ်ချင်း ၃ ယောက် ရှိလေသည်ပေါ့ဗျာ။
၃ ယောက်ပေါင်း လောင်းကျော်ကြတဲ့ ဇာတ်။
ဦးလေးကြီးတွေ ကဲရင် ဆယ်ကျော်သက်တွေ ဘယ်လိုက်မီလိမ့်မလဲ?ဦးလေးကြီး ဂျန်ဆုထက်က မိန်းကလေးတွေကိုအရမ်းစွဲလမ်းပြီး
ဦးလေးကြီး ဂယ်ဂျိုဖီးကတော့ အစိုးရဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပေါ့
တစ်နေ့ ဂျယ်ဂျူဒိုမှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ဈာပနာသွားရင်း
တည်းခိုဆောင်က နာရေး နဲ့ ရူဘီဆိုတဲ့ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်နဲ့
တွေ့ဆုံရင်းဘယ်လိုဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာတော့ ….. ဒန့် တန် တန် ပေါ့ဗျာ
The Road to Mandalay (2016)
စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ကာဗာ ကိုကြည့်ပြီး မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့
ဆိုတဲ့စကားတော့ တကယ်လက်ခံသွားပါပြီ ။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် JoJo က ဘာသာပြန်နေရင်းနဲ့ဒီကားကောင်းကို သာမန်ပဲထင်ခဲ့တာပါ ။
မင်းသမီးကလည်း သိပ်မချောတော့လေ. ..
(ဒါပေမဲ့ Google ခေါက်တော့မှ အထင်နဲ့အမြင်လွဲတာဆိုတာ … )
ဒီကားလေးက The Lady ကားကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Myanmar Montage Film Production ကပါ ။
နိုင်ငံတကာ ဆုပေါင်း (၁၉) ဆု ဇကာတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီး
အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆု ၊ ထုတ်လုပ်ရေးဆု၊
အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု နဲ့ အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆု ရရှိခဲ့ပါတယ် ။
နည်းနည်းတော့ ဖြုံသွားပြီး … အဲ့လောက်တောင်လားပေါ့ ?
တကယ် အဲ့လောက်တောင်ပါ …
ဇာတ်လမ်းလေးက မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထိုင်းဘက်ကို
တရားမဝင်သွားရောက်နေထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်တဲ့ အကြောင်းလေးပါ ။
ထိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့က အလုပ်ပါမစ်လိုပါသတဲ့။
အဲ့အလုပ်ပါမစ်အတွက် မင်းသမီးက အသေရရ အရှင်ရရ ကြိုးစားပါတော့တယ်။
သူ့ရည်မှန်းချက်က ထိုင်းပတ်စပို့ပါယူပြီး ထိုင်ဝမ်ပါသွားမယ်ဆိုပဲ ။
သူ့ကောင်လေးကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ထိုင်းမှာပိုက်ဆံစုမယ်။
ပြီးရင် မြန်မာပြည်ပြန်မယ်. . . ဒီလောက်ပါပဲ
မြန်မာစကားတစ်ခွန်းမှမပြောပါဘူး.. (သရုပ်ဆောင်တွေက ထိုင်ဝမ်ကပါ)
ဒါပေမဲ့ မြန်မာမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အတိုင်း တစ်ပုံစံတည်းရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
နယ်စပ်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ တရားမဝင်ဝင်ရောက်သူတွေရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကို
အကွက်ကျကျ ရိုက်ပြသွားတာပါ ။
JoJo ဘာသာပြန်ရင်း နှစ်ခါတောင်ပြန်ကြည့်လိုက်ရတယ်။
အဆုံးသတ်လေးကို ဒါရိုက်တာရိုက်ပြသွားတာ အံ့ဩလွန်းလို့ပါ ။ ။
ကြိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် ။ ။
ဘက်စတာမွန်းဆိုတဲ့ ကိုအားလားဟာ အကြွေးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ ပြဇာတ်ရုံကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ သူဘာလုပ်လုပ်မဖြစ်မြောက်တဲ့သူလို့ နာမည်ဆိုးရှိနေပေမယ့် အကြွေးနွံနစ်နေတဲ့ ပြဇာတ်ရုံကြီးကိုကယ်တင်ဖို့ရာ ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ ကြံပါတော့တယ်။ အဲ့ပွဲကတော့ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲပါ။ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရသူကို ဒေါ်လာတစ်ထောင်ပေးမယ်လုပ်ထားပေမယ့် မွန်းရဲ့လက်‌ထောက် မစ္စခရော်လီက တစ်သိန်းလို့ သုညတွေပိုထည့်မိတဲ့အခါ….
အသံသရုပ်ဆောင်တွေကလည်း Scarlett Johansson၊ Reese Witherspoon စတဲ့လူသိများတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ Call Me Maybe, Shake It Off စတဲ့ နာမည်ကြီးသီချင်းတွေပါ နားဆင်ရဦးမှာပါ။ IMDb 7.1, RT 72% ရထားတယ်ဆိုတော့ ထပ်မညွှန်းတော့ပါဘူး။ မိသားစုနဲ့တူတူပျော်‌ပျော်ပါးပါးကြည့်ရမယ့် Musical ကားလေးပါပဲနော်။
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ရစ်ကီဆိုတဲ့ကောင်ဆိုးလေးတစ်ယောက်အကြောင်းပါ။ သူကကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာမှာနေရတဲ့မိဘမဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ကိုအိမ်အများကြီးကမွေးစားခဲ့ပေမဲ့လဲ အမြဲတမ်းထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။
တစ်နေ့တော့သူလယ်ယာဘက်ကအိမ်တစ်အိမ်မှာမွေးစားခံရပါတယ်။ အဲ့ဒီအိမ်မှာကျတော့မွေးစားအမေနဲ့ သူအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကံကြမ္မာဆိုးတစ်ခုက အဲ့ဒီမိသားစုကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူအိမ်ကထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ တောကြီးမျက်မည်းထဲမှာလမ်းပျောက်နေတုန်းမွေးစားအဖေနဲ့တွေ့ပြီး သူတို့နှစ်ယောက်အိမ်အပြန်လမ်းမှာပြသနာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်နေ့ကျတော့သူတို့ကပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဝရမ်းပြေးတွေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောထားတဲ့အကြောင်းကိုသိခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအိမ်ကိုပြန်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပဲ ကျယ်ပြန့်လှတဲ့တောအုပ်ကြီးထဲမှာ ရစ်ကီလေးနဲ့သူ့မွေးသားအဖေဟက်တာတို့ရဲ့ စွန့်စားခန်းတွေကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းစရာတွေကိုစိတ်ခံစားချက်မျိုးစုံနဲ့ကြည့်ရှုရမဲ့ ရုပ်ရှင်ကောင်းတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားလေးဟာ နာမည်ကျော် ရုပ်ရှင်မင်းသား မင်းသမီးများစွာ
ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပေးထားပြီး အကောင်းဆုံး သီချင်းတွေ နဲ့
ပိုပြီးထူးခြားတာက မကြာသေးခင်ကမှ နတ်ရွာစံတော်မူသွားတဲ့
ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ် ဘူမိဘော ရေးထားတဲ့ သီချင်းတွေကို
ဒီရုပ်ရှင်မှာ ထည့်သွင်း အသုံးပြုပြီး ထည့်ထားလို့
ရုပ်ရှင်ကားကို ပိုပြီး အသက်ဝင်စေပါတယ်…
နှစ်သစ်ကူးတော့မယ် ဒီဇင်ဘာ လမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့
အချစ်ဇတ်လမ်းလေး ၃ ခု ကို ဒီရုပ်ရှင်ကား
ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းလို့ ၂ ခါပြန်တောင် ကြည့်ရပါတယ်
မင်းသားတွေဆိုရင်လဲ ATM ရုပ်ရှင်ကားထဲက မင်းသား
I Fine..Thank You..Love You ရုပ်ရှင်ကားထဲက မင်းသား တို့
ပါဝင်ပါတယ် သူတို့ကတော့ CM Fan တွေ နဲ့ မစိမ်းလောက်ပါဘူးနော်…
ကဲပါ ကျနော် ဇတ်လမ်းကို ပြောမပြချင်ပါဘူး ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်ပါ
သင့်ဘ၀ မှာ ကြည့်ရလို့ နောင်တ မရစေမယ့် ရုပ်ရှင်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်
2016 ကထွက်ခဲ့တဲ့ our love story ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဒီဇာတ်ကားလေးက ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာ ဆုတွေ ၅ ဆုတောင်ရရှိထားပါတယ်
ဂင်ယွန်ဂျူဟာ ပန်းချီဆရာမ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပြပွဲအတွက် ထူးခြားတဲ့ လက်ရာတစ်ခု ဖန်တီးနေတဲ့လူပါ
အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အထိ ရည်းစားမထားသေးတဲ့ အပျိုကြီးတစ်ယောက်ဆိုလည်းမမှားပါဘူး
အပျိုကြီးယွန်ဂျူနဲ့ ဂျီဆူဆိုတဲ့ ကောင်မလေး mini-mart တစ်ခုမှာ အမှတ်မထင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်
မှတ်ပုံတင်မေ့လာခဲ့လို့ ဆေးလိပ်ဝယ်မရဖြစ်နေတဲ့ ဂျီဆူကို အပျိုကြီးက ဆေးလိပ်ဝယ်တိုက်လိုက်တာပါ
အဲ့နောက်မှာတော့ သူတို့ ဘယ်လိုတွေဆက်တွေ့ပြီး ချစ်သူဖြစ်သွားမလဲ…….
Lesbian အတွဲလေးဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်လို ပြဿနာလေးတွေကြုံရမလဲ……
အဆုံးထိ လက်တွဲနိုင်မှာလားဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားလေးမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါနော်
18+ ဇာတ်ဝင်ခန်း အနည်းငယ်ပါတာမို့ မိသားစုနဲ့တူတူ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး
သည်တစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်ကြီးတွေအတွက် စိတ်ဝင်စားစေမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကောင်းကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ အယ်ကိုင်ဒါ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အိုစမာ ဘင်လာဒင် ကို ဖမ်းဆီးရန် ကြိုးစားခဲ့သူတစ်ယောက် ဂယ်ရီ ဘရွတ်ခ် ဖော်ခ့်နာဆိုတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။
သည်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ 2016 November4ရက်နေ့က ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန် Comedy အမျိုးအစားပဲ။ Rating အနေနဲ့ IMDb 5.1/10 ရရှိထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ လက်သမားဆရာတစ်ဖြစ်လဲ အလုပ်လက်မဲ့ ကျောက်ကပ်သွေးသန်စင်နေရသော ဂယ်ရီတစ်ယောက်ကို လူအများက လူအရူးလို့ သတ်မှတ် ထားသည့်တိုင် တကယ်တမ်းကျ သူကအရူးတစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ တစ်နေ့တွင် ဆေးကုခန်း၌ ဘုရားသခင်၏ တာဝန်အပ်နှင်းခြင်းကို ဂယ်ရီလက်ခံခဲ့ရသည်။ သူ့တာဝန်က အယ်ကိုင်ဒါခေါင်းဆောင် အိုစမာ ဘင်လာဒင် ကိုဖမ်းဆီးလာရန်ဖြစ်သည်။ ငွေမရှိ ကျန်းမာရေးထိခိုက်နေသည့် ဂယ်ရီတစ်ယောက် ဘင်လာဒင်ကိုဖမ်းရန် ပါကစ္စတန်ကိုမည်သို့ခရီးဆက်မည်နည်း။ မည်သည့်အစီအစဥ်များနဲ့ သူခရီးဆက်မည်နည်း။ အမှန်တရားလား အမှန်တရားတစ်စိတ်တစ်ဒေသ ပါဝင်နေခြင်းလား။ ဂယ်ရီ၏ တန်ဖိုးထားရသူ မာစီလေးနဲ့ရော ဘာဆက်ဖြစ်ကြမလဲ။ လူသားတို့၏နေ့စဥ်ဘဝကို ဖြတ်သန်းရှင်သန်နိုင်ရန်သည် မိမိ၏ စိတ်နှလုံး ခေါင်းဆောင်ရာနောက်သို့သာ လိုက်ကြောင်း ပြောပြပေးချင်သည့်။ ဟာသ ဆန်ဆန် ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်သည်မို့ GC ပရိသတ်ကြီးအား လက်လွှတ်မခံဘဲ ကြည့်ရှူပေးကြပါဦးလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။
ဒီတခါမှာတော့ ဘောလီဝုဒ်ဖန်တွေအတွက် IMDB 8.4/10နဲ့ RT 50% အထိရရှိထားတဲ့ ကားကောင်းတကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး အတော်လေးကို ကြည့်ကောင်းတဲ့ကားတစ်ကားပါပဲနိုင်ငံရေးအရှုပ်အထွေး၊ နိုင်ငံတကာဖိအားတွေကြားက နျူကလီးယားစမ်းသပ်မှု အောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာကို တင်ဆက်ပြသထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်၁၉၉၅ ခုနှစ်ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက် အခက်ခဲဆုံံးကာလတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုတွေ ကွဲပြိုခဲ့ပြီး အိန္ဒိယဘက်မှာမဟာမိတ်အနေနဲ့ မည်သည့်အင်အားကြီးနိုင်ငံမှ ရှိမနေခဲ့ပါဘူး ဒါပေမဲ့ ပါကစ္စတန်ကတော့ အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတွေရဲ့ အကူညီရကာ စစ်ရေးအတောင့်တင်းဆုံး အနေအထားမှာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယကို နိုင်ငံတကာသဘောတူညီစာချုပ်တွေမှာ လက်မှတ်ထိုးစေချင်ပြီး မည်သည့်အင်အားမှ မတိုးတက်လာအောင် အမေရိကန်၊ ပါကစ္စတန်နဲ့ နိုင်ငံအများစုက ဖိအားပေးနေပါတယ်အိမ်နီးချင်း ပါကစ္စတန်နိုင်ငံက နျူကလီးယားစမ်းသပ်မှုတွေ ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုတွေ အကြိမ်ကြိမ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် အိန္ဒိယကတော့ ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့် ၁၉၉၅ မှာ အိန္ဒိယအနေနဲ့ ဖိုကာရန်ကွင်းမှာ နျူကလီးယားစမ်းသပ်မှုလုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် အမေရိကန်၏ စောင့်ကြည့်နေမှုကြောင့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး၁၉၉၈ မှာတော့ အိန္ဒိအနေနဲ့ ဘယ်လိုဘယ်ပုံများ အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားခဲ့သလဲဆိုတာကို …….
Parmanu The Story of Pokhran (
mmbusticketဘောလီးဝုဒ်ဇာတ်ကားကိုမှကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ CM ပရိသတ်တွေအတွက် 2018 ခုနှစ်ထွက် Aiyaary ဆိုတဲ့ Action, Thriller
ဇာတ်ကားကောင်းလေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကို Neeraj Pandey ကဇာတ်ညွှန်းရေးသားပြီး သူကိုယ်တိုင်ကပဲရိုက်ကူးထားပါတယ်။အဓိကဇာတ်ဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့ Major Jai Bakshi နဲ့ Colonel Abhay Singh တို့နေရာမှာ Sidharth Malhotraနဲ့ Manoj Bajpayee တို့က အသီးသီး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း
စစ်တပ်မှာအရာရှိနှစ်ဦးဖြစ်ကြတဲ့ ကာနယ် Abhay Singh နဲ့မေဂျာ Jai Bakshi တို့ဟာ ဆရာတပည့်နှစ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ အမိမြေကိုချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့ စစ်သားကောင်းများဖြစ်ပါတယ်။ကာနယ်Abhay Singh ဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကို ချွင်းချက်မရှိ သက်ဝင်ယုံကြည်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
သို့ပေမယ့် တပည့်ဖြစ်သူ မေဂျာJai Bakshi ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်သူပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကို သိသွားတဲ့အခါမှာတော့…..။ (ဘာသာပြန်ပေးထားသူကတော့ ကိုရဲမာန်အောင်ပါ)
၂၀၁၄ခုနှစ်ထွက်အိန္ဒိယကားကောင်းလေးတစ်ကားတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။Ratingအနေနဲ့8.2အထိရရှိထားတယ်ဆိုတော့တော်ရုံဇာတ်ကားတစ်ကားမဟုတ်တာတော့အသေအချာပါပဲ။ဆုပေါင်းများစွာဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့Action/Crimeအမျိုးအစားကားကောင်းလေးပါ။ဒီကားလေးဟာဆိုရင်စာရေးဆရာကြီးဝီလီယံရှိတ်စပီးယားရဲ့”Helmet”ဆိုတဲ့ဇာတ်လေးကိုကျောရိုးကိုယူပြီးပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်အိမ်ကိုတော့၁၉၉၅ခုနှစ်ကတ်ရှမီးယားဒေသကိုအခြေပြုထားပါတယ်။ လူငယ်လေးတစ်ယောက်သူ့ဖခင်ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာပဲအဲဒီကတ်ရှမီးယားဒေသကိုသွားရောက်ခဲ့တာကစတင်ထားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးမှာအချိုးအကွေ့လေးတွေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာမို့ဇာတ်ကြောင်းကိုသိပ်မပြောပြတော့ပါဘူး။ကိုယ်တိုင်အပြည့်အဝခံစားကြည့်တာပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ဒီလူငယ်လေးအနေနဲ့ဘယ်လိုမြုပ်ကွက်တွေကိုဖော်ထုတ်လိုက်နိုင်မလဲ။သူ့ဖခင်ကိုရောပြန်တွေ့နိုင်မှာလား။ဘယ်လိုပျောက်ဆုံးသွားတာလဲ။နောက်ကွယ်ကဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေရှိနေလည်းဆိုတာတော့ အပြည့်အဝဇာတ်ကားလေးကြည့်ရင်းရင်တမမနဲ့ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး။နိုင်ငံတကာမှာလည်းမှတ်ချက်ကောင်းတွေရထားတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကတ်ရှမီးယားဒေသကိုအခြေတည်ထားတာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာအချက်တချက်ပါပဲ။ကဲRatingမြင့်တာနဲ့အညီဘယ်လိုကြောင့်မြင့်ရသလဲဆိုတာတော့ကိုယ်တိုင်ပဲကြည့်ရှုဝေဖန်လိုက်ပါဦးလို့။
ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ် ပြောပြချင်တယ်ဗျာ့ ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကပေါ့ မူဟီနာဂူရီလို့ ခေါ်တဲ့ မြို့လေးရဲ့ ဆေးရုံလေးတစ်ခုမှာ ကလေးငယ်တစ်ယောက် ဖွားမြင်လေခဲ့တယ်။ကလေးရဲ့ ကံဆိုးမှုလားပဲ သူ့ကို မွေးဖွားပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အက်ဆီဒန့် တစ်ခုပြီး မိဘနှစ်ပါးလုံး သေဆုံးခဲ့ကြတယ်။သူ့ကို လာခေါ်မယ့်ဆွေမျိုးသားခြင်း ဘယ်သူမှ မရှိလေဘူး့ ဒီဆေးရုံလေးကပဲ သူ့ကမ္ဘာလေးဖြစ်ခဲ့ရတယ့်နှစ်တွေအလီလီ ဆေးရုံမှာ ဖြတ်သန်းနေထိုင်ရင်းတနေ့မှာတော့ ရထားပေါ်က ခုန်ချလိုက်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို မြင်သွားပြီး အပြေးသွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒီလူကြီးက ဒဏ်ရာတွေ အများကြီးနဲ့ သတိလစ်မေ့မျောနေတယ် ဒီလူကြီးသတိရလာတော့ ဆေးရုံပေါ်ရောက်နေပြီ ဘေးနားမှာ ကောင်လေးတစ်ယောက် ဆေးပုလင်းလာချိတ်ပေးတယ် ” မင်းနာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲ “ ဘာမှ မဖြေပဲ ကောင်လေးပြန်ထွက်သွားတယ်နောက်နေ့ ဆေးပုလင်းထပ်လာချိတ်ပေးတယ် “မင်းနာမည် ဘယ်လို ခေါ်လဲ” ထပ်မေးတယ် ကောင်လေးလှည့်ပြန်သွားလိုက်တယ် ဘေးနားက ဆရာဝန်မကြီးက ပြောမှ သိရတယ် ကောင်လေးက စကားထစ်နေလို့ စကားမပြောဘူးတဲ့စကားထစ်နေတဲ့ ကောင်လေးဟာ ဆေးရုံပေါ်က လူကြီး အကူအညီနဲ့ စကားပြောနိုင်ခဲ့တယ် သူပြောတဲ့ စကားလုံးတိုင်းဟာ သံစဉ်လေးတွေနဲ့ သီချင်သီဆိုနေသလိုပဲ ဒါဆို စကားမထစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာ သိလိုက်ရတာ ကောင်လေး နာမည်က ဂျဂ္ဂ တဲ့သူဆေးရုံကို ပို့ပေးလိုက်တဲ့ လူကြီးက ကောင်လေးကို သံယောဇဉ်ဖြစ်ပြီး သားအဖြစ်မွေးစားဖို့ ခေါ်သွားလိုက်တယ်ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ဂျဂ္ဂနဲ့ မွေးစာစအဖေရဲ့ ဘဝထဲကို ဒုက္ခဆိုးကြီးက ဝင်လာပါလေရောတစ်နေ့ ဂျဂ္ဂတို့သားဖကို ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ လူတစ်စု လိုက်ဖမ်းပါလေရော ဖမ်းမမိတော့ စာလေးတစ်ဆောင် ချန်ခဲ့တယ့် အဲ့ဒီစာထဲမှာ ဘာတွေပါလဲ ဂျဂ္ဂတော့ မသိနိုင်ဘူးသူ့အဖေက သူ့ကို ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့ ဘော်ဒါ်ဆောင်တစ်ခုမှာ ထားခဲ့ပြီး ထွက်သွားလိုက်တော့တယ်ဂျဂ္ဂ ခမျှာ ဘာကြောင့်သူ့ကိုထားခဲ့တာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်နဲ့ပဲ ကျန်ခဲ့ရတယ် ငယ်ဗီဇအတိုင်း စူးစမ်းလိုစိတ်ပြင်းပြတဲ့ ဂျဂ္ဂတစ်ယောက် ဒီမေးခွန်းအတွက်အဖြေရှာဖို့ ကြိုးစားရင်း့မွေးစာ အဖေဆီက နှစ်စဉ် ကျောင်းစရိတ်နဲ့ မွေးနေ့အတွက် ဗီဒီယို တိပ်ခွေလေး တစ်ခုပဲ ရနေကျ့ဒီနှစ်မွေးနေ့မှာ အဖေ့ တိပ်ခွေလေးကို မျှော်ရင်း့ကျောင်းက ဆရာမတစ်ယောက်ရဲ့ သေဆုံးမှု့သူစိမ်း မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ခြောက်ချခံလိုက်ရတဲ့ အဖြစ်တွေကို ကူညီရင်း ဂျဂ္ဂဂျာဆူး ဆိုတဲ့ စုံထောက်လေး ဂျဂ္ဂ ဖြစ်လာပါတော့တယ့်ဂျဂ္ဂ သူ့အဖေနဲ့ ပြန်တွေ့ရပါမလားး့ တိပ်ခွေလေးကော ရောက်လာပါ့မလား့ ဟိုမိန်းကလေးကရော ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုတော့#ဇာတ်လမ်းလေးက ခပ်မြူးမြူးလေးနဲ့ Mystery / Adventure အမျိုးအစားဖြစ်လို့ ဘောလီဝုဒ် ကောင်းကောင်းတွေ မျှော်လင့်နေရင် လက်လွတ်မခံလိုက်ပါနဲ့။ပြီးတော့ မင်းသား ရန်ဘီးကပူးရ် စကားပြောလိုက်တိုင်း သံစဉ်လေးတွေနဲ့ဆိုတော့ လန်ထွက်နေတာပါပဲ။
1975-1977 နှစ်တွေမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ အရေးခင်းကာလဖြစ်ပြီး အရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေ ထုတ်ပြန်ထားပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ လူဦးရေ တစ်ဝက်လောက်က ဆန္ဒတွေပြ သပိတ်တွေ မှောက်ပြီး ထောင်ထဲတွေ ရောက်နေပါတယ်။အစိုးရဆိုတာ နာမည်သာ ရှိပြီး ပြည်သူလူထုကို ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နိုင်တာကလည်း ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ အကြီးအကဲတွေ ဘုရင်မျိုးရိုးဟောင်းတွေပဲ တာဝန်ယူစောင့်ရှောက်ပေးနေတာပါ။ရာဂျစ်တန် မြို့ကိုလည်း ဘုရင်ကြီး ဆုံးပါးသွားပေမယ့်
အသက်အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ မင်းသမီး ဂီတန်ဂျလီက ကူညီပေးနေပါတယ်။ဘုရင်စနစ်က ဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီ့ ဘုရင့်အခွန်ထမ်း စနစ်လည်း မရှိတောပေမယ့် မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ ဘဏ္ဍာတွေနဲ့ပဲ ပြည်သူတွေကို ထောက်ပံ့နေပါတယ်
ပြသနာရဲ့ အစပဲ ပြောရမလား ပါတီတစ်ခုမှာ အစိုးရအာဏာကို လွဲအပ်ထားတဲ့ ဆန်ဂျီးဒ်ဆိုတဲ့ အာဏာပိုင်က အမျိုးသမီးတစ်ဦးတည်း ဖြစ်တဲ့ ဂီတန်ဂျလီကို ထိကပါးယိကပါးလုပ်မယ်ကြံပေမယ့် ဘုရင့်သွေးဖြစ်တဲ့ ဂီတန်ဂျလီကို ထိလို့တောင် မရခဲ့ပါဘူး့ပါတီပွဲက လူပုံအလယ်မှာ အရှက်ကွဲခဲ့ရတဲ့ ဆန်ဂျီးဒ်က ရှက်ရမ်းရမ်းပြီး ယုတ်မာဖို့ ကြံစည်ပါတော့တယ့်ဘုရင်စနစ်ဖြတ်သိမ်းပြီး ဘုရင့်အခွန်စနစ် ဖြတ်သိမ်းလိုက်ရင် ဘုရင်မျိုးရိုးတွေက ပိုင်ဆိုင်သမျှ ဘဏ္ဍာအားလုံးကို အစိုးရလက်
ထဲကို ပြန်အပ်ရပါတယ်။ဂီတန်ဂျလီကတော့ တိုင်းရေးပြည်ရေး အခက်အခဲတွေမှာ သူ့လက်အောက်က ပြည်သူတွေ အတွက် အသုံးချဖို့ ဘဏ္ဍာတွေကို မအပ်ခဲ့ပါဘူးဒီဘဏ္ဍာတွေရှိတာကို သိပြီး ဆန်ဂျီးဒ် ယုတ်မာပါတော့တယ့်အာဏာကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ဘဏ္ဍာတွေကို အပိုင်သိမ်းပြီး ဂီတန်ဂျလီကို ဖမ်းချုပ်ခဲ့ပါတော့တယ့် ဘဏ္ဍာအားလုံးကို ဒေလီက ဆန်ဂျီးဒ်ဆီကို ပို့ပေးဖို့ တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ့်ဒီအချိန်မှာတော့ ဂီတန်ဂျလီရဲ့ အခက်အခဲဖြေရှင်းပေးဖို့ ဘဝါးနီးဆင့် တစ်
ယောက် ရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ့်” လေးရက်တာ ဘဝပဲ့ ဒီနေ့က လေးရက်မြှောက်နေ့ ဒီလို တွေးခေါ်ပြီး နေထိုင်တာ “ဘဝါးနီးဆင့်ဆိုတာ ဂီတန်ဂျလီရဲ့ သက်တောင်စောင့်ဟောင်း တစ်ယောက်နုနယ်တဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ သူ(မ)ကို အကောင်းဆုံး ကူညီပေးပြီး အဖက်ဖက်က ပံ့ပိုးပေးခဲ့သူ အကြောင်းအမျိုးအမျိုးကြောင့် ဂီတန်ဂျလီနားက ထွက်သွားခဲ့ရပေမယ့် သူ(မ) ဒုက္ခရောက်နေတော့ အပြေးရောက်လာတဲ့ လူမျိုးဂီတန်ဂျလီက သူ့လွတ်ဖို့ထက့် ဒေလီကို ပို့မယ့် ဘဏ္ဍာတွေကိုသာ
ပြန်အရယူခိုင်းခဲ့ပါတယ့်ဘဝါးနီးတစ်ယောက် ဘဏ္ဍာတွေကို လမ်းက ဖြတ်လုဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲရပါတော့တယ့် ဒီအချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့ ဘော်ဒါတွေ ဖြစ်တဲ့ ဂူရုကြီးနဲ့ ဒလီယားတို့နဲ့ အတူ ဘဏ္ဍာတွေကို ပြန်လုပါတော့တယ်ဘဝါးနီး ဂူရုကြီးနဲ့ ဒလီးယားတို့ အပြင် ဂီတန်ဂျလီရဲ့ လူယုံတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဆန်ဂျနာကပါ ဝင်ရောက်ကူညီပေးခဲ့ပြီး ဘဏ္ဍာတွေသယ်သွားတဲ့ကို လုဖို့ ဖြစ်လာပါတော့တယ့်သူတို့စီစဉ်ထားသလို အလွယ်တကူပဲ ဖြစ်မလားး့ဒါပေမဲ့ ဒီကားကို တာဝန်ယူ ပို့ဆောင်ပေး
မယ့်သူကတော့ မေဂျာ ဆဟဲရ် ဆင့်
ဘဝါနီး(အဂျေးဒီဗန်) , ဒလီယား (အင်မရန်းဟက်ရှ်မီး) မေဂျာဆဟဲရ်ဆင့် (ဗစ်ဒ်ရွှတ်ဂျမာဝဲလ်) တို့ရဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့မှုကြီးကို အက်ရှင်အလန်းစားတွေနောက်ခံအသံအမှန်အကန်ကြီးတွေနဲ့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းအရ မင်းသားချောကတော့ စစ်ဗိုလ်တစ်ယောက်ပါ။စစ်ဆင်ရေးတွေမှာလည်း ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသပြီး အရမ်းတော်တဲ့ စစ်သားတစ်ယောက်ပါ။ မိဘမဲ့တစ်ယောက်ဘဝနဲ့ စစ်တပ်ထဲမှာ အသက်ရင်းပြီး မိခင်မေတ္တာကို လိုချင်တောင့်တနေသူပါ။ဒီလိုနဲ့ သူဦးဆောင်တဲ့ စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုမှာ စစ်သားတစ်ယောက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။လတ်တလောမှာ အဲ့ဒီစစ်သားဟာ ဒီစစ်ဆင်ရေးပြီးရင် ညီမဖြစ်သူရဲ့ မင်္ဂလာပွဲအတွက် အိမ်ပြန်မှာပါ။ခွင့်လည်း တောင်းထားပြီးသား။ခုလိုအခြေအနေကို မိသားစုကို အကြောင်းကြားဖို့ရာ မိသားစုတစ်ခုလုံး အခြေအနေတွေ ကမောက်ကမဖြစ်မှာစိုးလို့တပ်ရင်းရဲ့ ကိုယ်စား စစ်သားတစ်ယောက် သွားရောက်ပြီး အေးဆေးစွာ ပြောပြနိုင်ရပါမယ်။ဒီတာဝန်ကို တာဝန်ယူလိုက်တဲ့ သူကတော့… မင်းသားချောပါပဲ။ကဲ သူ့ ခရီးတစ်လျှောက် ဘယ်လိုမျိုးတွေ တွေ့ကြုံရမလဲအဲ့ဒီအိမ်ကို ရောက်သွားတဲ့အခါမှာရော သူထင်ထားသလို ဖြစ်နေမလား ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင် ခံစားကြည့်ကြပါဦးဗျာ။
K.G.F Chapter 1 (2018)
mmbusticketIMDb rating – 8.7/10 Google Users – 95%Budget – 50-80 crore Box Office – 240 croreဒီဇာတ်ကားဟာ မကြာသေးမီက 2018နှစ်ကုန်ပိုင်း ဘောလိဝုဒ်နာမည်ကြီးဇာတ်ကားတို့နဲ့အတူရုံတင်ပြီး အောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံ ခန်နားဒါးပြည်နယ်က မင်းသား Yash ရဲ့အရင်ထွက်ပြီးတဲ့ ဖန်စီအချစ်ကားတွေနဲ့ မတူ တမူထူးခြားနေတော့ အားပေးမှုတော်တော်လေးရခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့် ပြောစကားတွေ ထိမိပြီး ပညာရစေပါတယ်။ ——————————————— ဇာတ်လမ်းအနေအထားမှာတော့ အာနန်းဆိုတဲ့ ဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက်ရဲ့ စာအုပ်နဲ့ အစပျိုးထားပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်က ကိုလာရွှေလုပ်ကွက်နဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ မိသားစုဖွား ရော့ကီရဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။ဘယ်လိုသမိုင်းမှတ်တမ်းမှ မရှိတဲ့ လူတစ်ယာက် အကြောင်း၊အထူးသဖြင့် အထက်လူကြီးတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကြောင့်တချိန်က ထုတ်ဝေခွင့်မရဘဲ အာဏာပိုင်တွေဆီ သိမ်းဆည်းမီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ။ရော့ကီ.. တော်တော် ကတိတည်တဲ့အကောင်၊မိခင်သေလုမျောပါးအချိန်မှာ ပေးခဲ့တဲ့ ကတိကိုအိပ်မက်အဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဂန်းစတားတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ပြီး သူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပုံတွေပါ။“မပြောနဲ့ … အိန္ဒိယပြည်နယ်ကားတွေအတိုင်းပဲ နေမှာ”ဆိုရင်တော့ မှားပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပြည်သူနဲ့အတူရပ်တည်ပြီးအာဏာပိုင်တွေကို ဖီဆန်ရုံသက်သက် မဟုတ်လို့ပဲ။မိခင်ဟာ လင်မရှိဘဲ မွေးလာတဲ့ သားကို လူဆင်းရဲပေမဲ့ ဦးဏှောက် မဆင်းရဲခဲ့ဘဲ သွန်သင်ပြခဲ့တဲ့စကားတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းအဆုံးထိနောက်ခံစကားပြောအနေနဲ့ ထည့်သွင်းထားမှာပါ။သူ့မိခင်ဟာ ဆင်းရဲသားဘဝကို နာကြည်းခဲ့ရသူ၊သားအတွက် သတ္တိတွေ ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့သူပါ။“ကမ္ဘာပေါ်မှာ မိခင်လောက် သတ္တိရှိတဲ့စစ်သားမှ မရှိဘူး”မိခင်ပြခဲ့တဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့ ရော့ကီဟာကိုယ်တိုင် လမ်းရှာရမယ့် ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်ပါ။“ဖိနပ်ဆိုဒ် သေးချင်သေးနေမယ်၊လှမ်းလိုက်တဲ့ ခြေလှမ်းကတော့ မငယ်စေရဘူး”သူ့နာမည်ကြီးဖို့အတွက်ဆို ရဲအရာရှိခေါင်းကိုရိုက်ခွဲရတယ်။ရဲအရာရှိခေါင်းကို ရိုက်ခွဲရတာက”သာမန်လူကို ရိုက်ရင်.. ရဲက လိုက်ရှာမယ် ရဲကို ရိုက်ရင်တော့.. ဂန်းစတားတွေက လိုက်ရှာမယ်”ဒါကို သူ သိထားတယ်။ခေတ်ပျက်မှာ မင်းမူနေတဲ့ ရွှေတွင်းပိုင်ရှင်၊ရွှေလုပ်ကွက်ထဲ အကျဉ်းကျနေရတဲ့ ခိုကိုးရာမဲ့ ပြည်သူတွေ….ဒါတွေဟာ ရော့ကီမွေးဖွားခဲ့ချိန်နဲ့အတူစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာတွေပါ။ဒီလူတွေကို ကယ်တင်ပြီး ဒီရွှေတွင်းကို သူပိုင်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့သလားပဲဗျ။ဒီလိုနဲ့ အရွယ်ရောက်တော့ကြေးစားတစ်ယောက် ဖြစ်နေပါပြီ၊သိပ်လိုချင်တဲ့ ဘုံဘေဘုရင်ဘဝ၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၊ ဩဇာညောင်းမှု ဒါတွေရဖို့ အလုပ်တစ်ခု ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ကို… သူ လက်ခံလိုက်ရာမှာတော့ ….ဘဝတစ်ခုကို ကြုံရာဘဝနဲ့ မနေလိုဘဲရဲဝံ့စွန့်စားလိုစိတ်တွေ၊ထောင်ပေါင်းများစွာသော လူတွေကို ကိုယ့်ဘက်ပါအောင် ဆွဲဆောင်ပုံတွေနဲ့လှည့်ကွက်တွေနဲ့အတူ လှနေပါတယ်။ဪ… မေ့လို့…သတ်ဖြတ်ခန်းတွေဟာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်နေတဲ့အတွက် အကြမ်းဖတ်မှုတွေကို ကလေးတွေ မကြည့်ရှုဖို့ ဆင်ခြင်ပေးစေချင်ပါတယ်။
Gangs of Wasseypur (2012) Part 2
Bollywood ပရိတ်သတ်ကြီးတွေအတွက် အကောင်းဆုံးစာရင်းဝင် Bollywoodကားတွေကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
IMDB 8.6/10 နဲ့Rotten Tomatoes 96% ထိရရှိထားပါတယ်မှတ်မှတ်ရရပဲ ဒီကားတွေကို Oscar ရထိုက်သော Bollywoodကားများစာရင်းထဲမှာ ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်နေပါတယ်။2012လိုခုနှစ်မျိုးမှာ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲသရုပ်ဆောင်တွေကြားထဲကမှ မျက်နှာသစ်အများစုနဲ့ပွဲထုတ်ခဲ့ပြီး အမှန်အကန် အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကာ
Bollywood ရုပ်ရှင်လောကကို တစ်ဆင့်မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပဲ ပြောရပါမယ်။ဒီဇာတ်လမ်းမှာ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းတွေ၊ ဇာတ်လမ်းအသွားအလာတွေ
နောက်ခံသီချင်းတွေ၊ သွေးအေးအေးနဲ့ လူသတ်ရဲတဲ့ အက်ရှင်ခန်းတွေ၊
အထူးသဖြင့် Casting ပိုင်းပေါ့======================================================
1942 ကနေ 2004 ခုနှစ်ထိ အိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားနယ်စပ်က Wasseypur မြို့မှာ
ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံထားပြီး အကောင်းဆုံး ပုံဖေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမီးလောင် သားကောင်ချနင်းဆိုတဲ့ စကားပုံအတိုင်း အင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်ထက်မှာ
ကျောက်မီးသွေးတွေက အဓိကသွင်းအားစုဖြစ်နေတဲ့ အချိန် နေရာတကာမှာ
ကျောက်မီးသွေးလုပ်ငန်းတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန်ပြန့်လုပ်ကိုင်နေကြပြီးတောမီးလောင် တောကြောင် လက်ခမောင်းခက်ဆိုတဲ့အတိုင်း တောပုန်းဓားပြတွေ ပေါများတဲ့ခေတ်မှာ အဆိုးရွားဆုံး ဓားပြဗိုလ်က ဆူလ်တာနာ့ဆူလ်တာနာ နာမည်ကိုအသုံးချပြီး လက်တလုံးခြား ဆူလ်တာနာကို မလိမ့်တပ်လုပ်ကာ ဖြတ်လုနေတာက ရှဟီးဒ်ခန်းမ်
အလည်လွန်တဲ့ဘီး ချေးနင်းမိဆိုသလို ဆူလ်တာနာနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့အခါ
အသက်လုပြေးလာခဲ့ရတယ်နောက်မွေးလာမယ့်ကလေးအတွက် ဒီလိုခိုးဆိုးနှိုက်အလုပ်ကို မလုပ်တော့ဘဲ
ရှဟီးဒ်ခန်းမ် တစ်ယောက် တခြားနေရာကို ပြောင်းသွားခဲ့ပေမယ့်
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရာမာဒီးရ်ဆိုတဲ့ ခရိုနီတစ်ယောက်ရဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးသမား ဖြစ်လာခဲ့တယ့်” ဒီခွေးအင်္ဂလိပ်တွေက ရိုတီတစ်ချပ်လောက်ကို ပစ်ကျွေးခဲ့တာ
ဒီကမျောက်အုပ်လိုက်က လုနေကြတယ်၊ ရာမာဒီးရ်ကိုရော ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေ သူ့အဖေပေးခဲ့တာလား သူလည်း ဒီအတိုင်းယူလိုက်တာပဲ
မနက်ဖြန်ဆို သူ့အလောင်းပေါ်ကနေ ရှဟီးဒ်ခန်းမ်ဆီ ရောက်လာလိမ့်မယ်”သူ့အကြံအကောင်ထည်မဖေါ်နိုင်ခဲ့ပေ
ရာမာဒီးရ်ရဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ပေးရင်း ရှဟီးဒ်ခန်းမ် ပြန်ရောက်မလာတော့ဘူးသူ့သား ဆဒါးရ်ခန်းမ်ကို တပည့်ဖြစ်သူ နဆီးရ်က စောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီး
အဖေ့အတွက်အကြွေးကို သားတစ်ယောက်က ပြန်သိမ်းဖို့အထိ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်” ငါ့ဘဝမှာ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုပဲရှိတယ် … ကလဲ့စားချေဖို့ “သူ့ရည်မှန်းချက်က ပြည့်ဝပါ့မလားဆိုတာကိုတော့
=======================================================ဇာတ်လမ်းကို ဒီလောက်ပဲပြောထားတာ အကြောင်းရှိပါတယ်၊ ကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်ကြပါခင်ဗျာသရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုက အားကောင်းလှသလို
ဇာတ်လမ်းကလည်း အစအဆုံးဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးဖြစ်ပါတယ်Castတွေအနေနဲ့
ဆဒါးရ်ခန်းမ် အနေနဲ့ Manoj Bajpayee
ဖိုက်ဇဲလ်ခန်းမ် အနေနဲ့ Nawazuddin Siddiqui
နဂ်မား ခါတွန် အနေနဲ့ Richa Chadda
မိုဟ်ဆီးနား အနေနဲ့ Huma Qureshi
ရာမာဒီးရ်ဆင့် အဖြစ် Tigmanshu Dhulia နဲ့
တခြားနာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင်များလည်း ပါဝင်ထားကြပါတယ်။
Gangs of Wasseypur (2012) Part
Gangs of Wasseypur (2012) Part 1
IMDb Rating -7/10 Google User – 86% Genre – Crime/Thriller Duration – 2hr2mins ဒီတစ်ခေါက် တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားက ချန်နယ်မြန်မာမှာ တောင်းဆိုမှုအများဆုံးဇာတ်ကား တစ်ကားဆိုရင် မမှားပါဘူး။ အချစ်အတွက်နဲ့ တောင်ဖြိုပြခဲ့တဲ့ မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့ အကြိုက်မင်းသားကြီး Nawazuddin Siddiqui ရဲ့ 2017 က ထွက်တဲ့ ဂန်းစတား ဘဝ သရုပ်ဖော် ဘောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ (2017 ကားက 2018နှစ်ကုန်ပိုင်းမှ ကြည်တောက်ရှင်းထွက်လာပြီး 2019နှစ်သစ်မှာ စာဖိုင် ထွက်လာလို့ပါ။) သဘာဝကျတဲ့ ဇာတ်ရုပ်တွေကိုအပိုအလိုမရှိ သရုပ်ဆောင်တတ်တဲ့မင်းသားကြီးရဲ့ ကားဆိုတော့မကောင်းမှာ မပူရသလို၊လူ့သဘာဝနဲ့ လူ့စိတ်ကို အကောင်းဆုံး ပြသပေးတဲ့ ဇာတ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အပစ်အခတ် အသတ်အပုတ်တွေ ကြမ်းသလို၊ အချစ်ခန်းတွေကလည်း ကြမ်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီကားက မင်းသမီး Bidita Bag လက်စွမ်းပြလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ပီပြင်လှတဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လက်ဖျားခါရပါတယ်။ ဇာတ်ကားအကြောင်းအရာကို မညွှန်းတော့ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာကို ဖတ်ကြည့်တာထက်ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တာက ပိုကောင်းလို့ပါ။ ပြောလိုတာကတော့မြန်မာပြည်က ဂန်းစတားတွေလိုစကားတွေအများကြီး မပြောပါဘူး။ မျက်နှာတွေ ရှုံ့မပြပါဘူး။ မျက်နှာ အမူအရာတွေ ၊မျက်လုံးအကြည့်တွေ၊သီချင်းတွေနဲ့တင် မြိုင်ဆိုင်ပြည့်စုံနေတဲ့ကြေးစားလူသတ်သမား၂ယောက်ရဲ့ ကစားပွဲပါ။ ဒီကစားပွဲကို ပြည့်စုံစေဖို့ နိုင်ငံရေးလောကထဲဝင်မယ့် လူမိုက်ကြီးတွေကလည်း အားဖြည့်ထားပါတယ်။ “ရသမပါတဲ့ အနုပညာက ဆားမပါတဲ့ဟင်းနဲ့တူတယ်၊ဘဝအမောတွေ ပြေပျောက်စေသည်မှာ ရသပင်ဖြစ်သည်” တဲ့။ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ အဆိုအမိန့်ကလည်း ရှိခဲ့တယ်။ ဒီတော့ ဘဝအမောတွေကို ပြေပျောက်စေဖို့သဘာဝစစ်စစ်ကို ရသလေး ဖြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ နှလုံးသားကို အဟာရလေး ရစေမှာပါ။ ရေခဲသေတ္တာထဲက အအေးဘူးထက်ကမ်းခြေက အုန်းသီးရေက ပိုပြီး အရသာရှိသလိုမျိုး။ အကောင်းစားအရက်ကို အကောင်းဆုံးအမြည်းနဲ့နာမည်ကြီး ဆိုင်မှာ သောက်ရတာထက်တခါတလေ နားအေးပါးအေးကွင်းလယ်က ဖျာစုတ်တစ်ချပ်ပေါ်ထိုင်ပြီး ထန်းရေကို ပဲလှော်နဲ့ မြည်းကြရအောင်လားဗျာ….။ ဒီဇာတ်ကားလေးကို ကြည့်ရှုပြီးကြရင် ခံစားမိသမျှကို ကျွန်တော်တို့ထက်ပိုကောင်းတဲ့Reviews လေးတွေ ရေးဖြစ်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ စောင့်မျှော်လျက်ပါပဲဗျာ။ (အရွယ်မရောက်သေးသူတွေ၊မိသားစုနဲ့အတူကြည့်မယ့်သူတွေ အတွက်တော့ တချို့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေနဲ့ ပြောစကားတွေဟာ ကြမ်းတမ်းမယ် ထင်ပါတယ်)
၀၁၈ ထွက် ကိုရီးယားရာဇဝင်ကားကောင်းလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဦးမယ်နော်ဇာတ်ကားနာမည်လေးက The Great Battle ပါ မင်းကြီးဂျူမုံတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဂိုဂုလျောပြည်ကို တရုတ်ထန်ဘုရင် ကျူးကျော်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို စစ်တိုက်ပုံမျိုးစုံ ဝေဝေဆာဆာနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရာဇဝင်ကားကောင်းလေးပါ ဂိုဂုလျောက စစ်သူကြီးယွန်းဟာ အန်စီခံတပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ယန်မန်ချွန်ရဲ့ အမိန့်မနာခံမှုကို အပြစ်ပေးဖို့အတွက် သူ့ဆီကို သူလျှိုတွေ စေလွှတ်ပေါင်း မနည်းပါဘူး အန်စီမြို့သား ဆာမူကို စေလွှတ်လိုက်ချိန်မှာတော့ ဆာမူဟာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးယန်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ပီသမှုတွေကို မြင်တွေ့ရပြီး လုပ်ကြံမှု မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး တိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကို ရှုံးပွဲမရှိ တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ တရုတ်ထန်စစ်တပ်ဟာ အန်စီခံတပ်ကို တိုက်ဖို့ လာတဲ့အခါ ယန်မန်ချွန်ရဲ့ ပါးနပ်မှု လက်ရုံးရည် နှလုံးရည်ပြည့်ဝမှုတွေကြောင့် လွယ်လွယ်နဲ့ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး ၃ လလောက်တိုက်ပွဲဝင်ရတာကို တိုက်ခန်းခိုက်ခန်း မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ ရိုက်ကူးထားလို့ ကြည့်ရတန်တဲ့ ရာဇဝင်ကားကောင်းတစ်ကားပါ ဒီ့အပြင် အချစ် အလွမ်း နဲ့ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်တွေကိုပါ ပေါ်လွင်အောင် ရိုက်ပြထားလို့ ရသမျိုးစုံကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါလို့ ညွှန်းပေးပါရစေ
“ဇာတ်လမ်းအညွှန်း” ဆယ်နာပသီ ဆိုတဲ့ ဩဇာကြီးတဲ့ ဒုစရိုက်သမားကြီးဟာဘုရားက အပြန်မှာ လူမိုက်တချို့ရဲ့ လုပ်ကြံခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ကြားတော့…သားသုံးယောက်ဖြစ်တဲ့ချန်နိုင်းရာဇာ “ဗာရာဒန် “၊ဒူဘိုင်းမှာ အခြေချနေကြတဲ့ သားလတ် “သီယာဂူ”၊သားငယ် “အီသီ”တို့ ရောက်လာကြပါတယ်။ ဖခင်ကို လုပ်ကြံသူအား လက်စားချေဖို့ပါ။ ဖခင်ဆုံးသွားရင် နေရာဆက်ခံဖို့လည်း ပါတာပေါ့။ ဖခင်ကတော့ ဘယ်သူလက်ချက်လဲဆိုတာသိတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ မပြောပြခဲ့ပါဘူး။ တနေ့မှာတော့ ဖခင်ဟာ အကြောင်းမဲ့ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲ သားတွေရဲ့ ဇနီးမယားတွေလည်းလုပ်ကြံခံရတယ်။ တရားခံက ဘယ်သူလဲ? ဒုစရိုက်လောက တစ်ခုလုံး ကြောက်ရတဲ့သူတို့ကို ဘယ်အဖွဲ့က လုပ်ကြံသလဲ? ဘာကြောင့်လုပ်ကြံလဲ ဆိုတာကို ကြည့်ရှုခံစားကြပါဦးဗျာ….။ —————————————- လူတွေရဲ့ အတွင်းစိတ်ဟာ အင်မတန်ကြောက်ဖို့ ကောင်းတယ် . . . ပိုပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းတာက အပေါ်ယံဟန်ဆောင်ပြုံးပြပြီး နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ ထိုးတဲ့သူတွေ။. . . သူတစ်လူ ငါတစ်မင်းဆိုတဲ့စကားရယ်ငဖြူသေရင် ငမည်းပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားရယ်. . . ဒီဇာတ်ကားထဲက အဖြစ်အပျက်တွေဟာ ကွက်တိတွေ။ ဇာတ်လမ်းက ရိုးမလိုနဲ့ ဆန်းပြားပြီးကြည့်ရင်းနဲ့ ကြက်သီးထလောက်အောင်ကို လူ့စရိုက်တွေကို အော်ဂလီဆန်လာစေတာမျိုးပါ။ ဒီကားထဲမှာတော့ဂန်းစတားလောကရဲ့ လည်သူစားစတမ်းလှည့်ကွက်တွေကြားက သွေးသားတော်စပ်မှုကို ဘေးချိတ်ပြီး ကိုယ့်အတွက်ဆို ဘယ်သူ့ကိုမှ အရှင်မထားတတ်တဲ့ ရွံရှာဖွယ်ရာ စိတ်ဓာတ်တွေ၊ကိုယ့်မှာ ဇနီးသည်နဲ့ ကလေးတွေ ရှိနေပါလျက် ဖောက်ပြားတတ်တဲ့ ယောက်ျား၊ကိုယ့်ခေတ် ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းခဲ့ကောင်းခဲ့ ခြသေ့ၤမင်းပဲ ဖြစ်ခဲ့စေဦးအသက်အရွယ်ရလာချိန် အားမတန်လို့ မာန်လျှော့ရတဲ့ ဂိုဏ်းဂုရုကြီး တစ်ယောက်၊ဂန်းစတားတွေရဲ့ အပူသည် ဇနီးသည်တွေအကြောင်း စသဖြင့် ဇာတ်ရုပ် ဇာတ်ကွက် စုံလင်လှပါတယ်။ တမီးလ်မင်းသား ဗီဂျေးစည်သူပသီ၊အာရ်ဗင်းဆွာမိတို့နဲ့ အတူမြောက်ပိုင်းက ဘောလိဝုဒ်မင်းသမီး အာဒီတီးရိုဟိုက်ဒါရီ(Bhoomi 2017 ထဲက မင်းသမီး)တို့ အဓိက ပါဝင်ထားပါတယ်။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ပြောရရင်ဂန်းစတားလောက အကြောင်းကိုရိုက်ထားတယ်လို့ ပြောလို့ ရပေမယ့်. . . တကယ့်တကယ်တော့လူ့သဘာဝကို လှလှပပ သရုပ်ဖော်ပြသွားတဲ့ ပညာပေး ဇာတ်ကားတစ်ကားသာ ဖြစ်ပါကြောင်း. . .။ ။
Spider-Man_ Into the Spider-Verse (2018)
With great power comes great responsibility ကြီးမားတဲ့စွမ်းအားမှာကြီးမားတဲ့ဝတ္တရားရှိတယ် ဒီစကားပုံလေးကိုမြင်တာနဲ့ long long agoSpiderma movie ထဲက Uncle Ben ပြောတာကို ပြန်မြင်ယောင်မိကြမှာပါ Spiderman ဆိုတဲ့ comic character ကို Tobey Magurie နဲ့ triology ရိုက်ခဲ့သလို Andrew Garfield နဲ့လဲ ၂ ကားထပ်ရိုက်ခဲ့ပါတယ် Tobey ရော Andrew ရော အတော်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ပြောရမှာပါ အခု Into thespiderverse ဆိုပြီး Animation တစ်ကားထပ်ထွက်လာပါတယ် ဒီ Spiderverse မှာ ကျွန်တော်တို့အချစ်တော် ပီတာပါကာ အပါဝင် မိုင်းစ်မိုရဲလတ်စ် ဆိုတဲ့ လူမဲ စပိုက်ဒါမန်းလေး ပါမြင်ရမှာပါ အခုကားက Comic timeline နဲ့လုံးဝကွဲထွက်ပါတယ် အခြား comic game reference တွေယူပြီး သူ့ဘာသူတည်ဆောက်သွားတယ် spiderman6ယောက်ထည့်သွင်းထားတယ် spiderverse ဆိုတဲ့အတိုင်း multiverse တွေကလာတဲ့အခြား spiderman တွေပါလာတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ villain ဖြစ်တဲ့ ကင်းပင်က အမှုန်အရှိန်ပေးစက်သုံးပြီး portal တွေဖွင့် အခြားuniverse က သူ့မိသားစုကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်ပါတော့တယ် ဒါပေမယ့် အမှုန်အရှိန်ပေးစက်ရဲ့ side effect ကြောင့် reality တွေပျက်စီးပြီး မြို့ပျက်တော့မှာသိလို့ ပီတာပါကာက ဝင်တားတယ် အဲ့အချိန်မှာပဲ မိုင်းစ်မိုရဲလတ်စ်က ပင့်ကူကိုက်ခံရပြီး spider man အစွမ်းတွေရခါစ ဒီလိုနဲ့ multiverse တွေက portal တွေပွင့်ပြီး မိုင်းစ်မိုရဲလတ်စ် တို့ universe ကို အခြား universe တွေက Peter Parker, Spider Gwen, Peni Parker, Spiderman Noir နဲ့ PeterPorker တို့ရောက်လာပါတယ် အတော်လေးကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ story lineလို့မြင်မိပါတယ် Animationပိုင်းတွေကတော့ပြောစရာကိုမလိုဘူး Peni Parker တို့ Peter Porker (SpiderHam) တို့ပါထည့်ထားတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် အကောင်းဆုံးလို့ဆိုရမှာက theme song နဲ့ background music ပဲ theme song တွေက unique ဖြစ်တယ် ဥပမာ Prowler လာတဲ့အခန်းတွေမှာဆို သူလာမှန်းသိရတဲ့ theme song မျိုးတွေ Spiderman ဇာတ်ရုပ်တိုင်းမြူ းမြူ းကြွကြွ theme song တွေက ကြည့်ရတာ တကယ်မိုက်တယ် အားတက်စရာကောင်းတယ် plot ကလဲအတော်လေးကိုကွဲထွက်တယ် ပြီးတော့အခြား spiderman game တွေ ထဲက villain တွေပါတွဲမြင်ရတာအားရစရာပါ ကျွန်တော် Marvel ရော DC fan ပါ ဒါပေမယ့်အဲ့ထဲမှာ အသနားမိဆုံးက spiderman ပဲ အခြား superhero တွေလိုမချမ်းသာဘူး နာမည်မကြီးဘူး သာမန်ဓာတ်ပုံဆရာလေးတစ်ယောက် နေ့စဉ်အလုပ်တွေနဲ့ ရုန်းကန်နေတဲ့ကြားက အသက်ကယ်ဖို့ နှစ်ခါပြန်မစဉ်းစားတဲ့ Super strength နဲ့သာမညလူသား သူ့အတွေးကရိုးစင်းတယ်ဒါပေမယ့် သူ့ အပြုအမူနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအောချရတယ် ဘယ်အခြေနေမှာဖြစ်ဖြစ် spiderman ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ကျတတ်တဲ့ hero မဟုတ်ဘူး သူ့ကြည့်လိုက်ရင်အမြဲပျော်ရွှင်နေတတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ friendly neighbourhood spiderman Animation ကားလို့ဆိုပေမယ့် Tobey ရဲ့ spiderman တုန်းကလိုဖီလ်းမျိုးအငွေ့အသက်မျိုး ပြန်ခံစားလိုက်ရတယ် ကြည့်ရတာတော်တော်တန်ပါတယ်
Spider-Man_ Into the Spider-Ve